ရမကျဇုနျ – My Blog
မငျးဇျော တဈယောကျ အလုပျတာဝနျ ပွီးပီ မို့ အိမျကို ပွနျလာခဲ့တယျ ။ လေးရကျလုံးလုံး မိမိ အထကျလူကွီး နဲ့ ခရီးစဉျ တလြောကျ ပါသှားခဲ့တာ အခု မနကျပိုငျး ပွနျရောကျခဲ့တာ မို့ နလေ့ညျပိုငျး ရုံးပွနျမတကျခငျြတော့ ။ မိမိ အထကျလူကွီးမှလညျး ပွနျနားပါတော့ ဆိုတာနဲ့ အိမျကို တနျးပွနျလာခဲ့တယျ ။ အိမျပွနျရောကျတော့ အိမျရှေ့ တခါး ပိတျထားတာ နဲ့ တခါးခေါကျလိုကျပီး စောငျ့နလေိုကျတာ ခနနတေော့ မငျးဇျော ရဲ့ခယျမ ဝါဝါ တဈယောကျ တံခါးလာဖှငျ့ပေးတယျ ။ အိမျမှာက မငျးဇျောရယျ မိနျးမ ဝမောလှိုငျရယျ ခယျမလေး ဝါဝါဦး ရယျ သုံးယောကျ နကွေတယျ ။ မငျးဇျောမိနျးမ ဝမောလှိုငျက ဆရာမ ။ ဝါဝါဦးကတော့ အခု မှ တက်ကသိုလျ တကျနတေုနျး ဒုတိယ နှဈ ။ ကြောငျးတကျရငျးနဲ့ မငျးဇျော တို့ အိမျမှာ ပဲ နနေတေယျ ။ အိမျက ကယျြကယျြလှငျ့လှငျ့ ရှိပီး အခနျးသုံးခနျး ပါတော့ ဒီမှာပဲ ခယျမလေး ဝါဝါဦး ကလိုကျနတေယျ ။ တခါတခါတော့ သူတို့ အမေ မငျးဇျော ယောက်ခမ ဒျေါစိုးစိုးဦး လာတယျ ။ တဈလ တခါလောကျတော့လာတယျ ။ မငျးဇျော ယောက်ခမ ဒျေါစိုးစိုးဦးက အခု မှ အသကျလေးဆယျကြျောကြျောသာ ရှိသေးတယျ ။ အိမျထောငျပွုတာ စောပီး သမီးနှဈယောကျ ရှဆေ့ငျ့နောကျဆငျ့ မှေးခဲ့တယျ ။ ယောက်ခထီးကတော့ သူတို့ ငယျငယျ မှာ ပဲ ဆုံးပါးသှားခဲ့တော့ သမီး နှဈယောကျ အရှယျရောကျ တဲ့ အထိ ဒျေါစိုးစိုးဦး ပဲ ရှာဖှကြှေေးမှေး ခဲ့ရတာ ။ မငျးဇျောနဲ့ ဝမောလှိုငျ အိမျထောငျ ပွု တာ လညျး မကွာလေး တဈနှဈကြျောကြျော သာရှိသေးတယျ ။
… .. ဝါဝါ က တံခါးဖှငျ့ပေးအပီး အိမျထဲလှမျးဝငျခဲ့လိုကျတယျ ။ ဝမောလှိုငျ ရှိပုံ မရ ။ ကြောငျးဖှငျ့ရကျမို့ ကြောငျးသှားသညျထငျတယျ “ဝါဝါ နငျ အတနျးမရှိဘူးလား ကြောငျးမသှားဘူးလား ´´ “အတနျးက မနကျက တခြိနျ ရှိတယျ တကျပီး ပီ အခုက နလေ့ညျပိုငျးနောကျဆုံးခြိနျတဈခြိနျပဲ အတနျးရှိတာ မို့လို့ မတကျခငျြတာနဲ့ ပွနျလာလိုကျတာကိုကွီး ´´ “အျော အေးအေး ´´ “ကိုကွီး ထမငျးစားတော့မလား ညီမ ပွငျလိုကျမယျလေ ´´ “အေးးး နပေါဦး ရမေိုးခြိုးလိုကျပါဦးမယျဟာ´´ “ဟုတျကဲ့ ကိုကွီး .. ဒါဆို ရခြေိူးပီး စားလိုကျပေါ့ ညီမလေးလဲ မစားရသေးဘူး အတူတူ စားရအောငျနျော´´ “အငျးးးအငျးးး´´ လှညျ့ထှကျသှားတော့ ဝါဝါ ကို တခကျြကွညျ့လိုကျမိတယျ ။ အငျးး နောကျပိုငျး အလှက တော့ သူ့အမ အတိုငျးပဲ တငျးရငျးနတောမြား ထမိနျ အပြော့သား ဝတျထားတာမို့ အောကျခံပငျတီ ကွိုးရာလေး က တငျပါး အစပျနားမှာ ပျေါနတေယျ ။ အိမျနောကျခနျး ထဲ ဝငျသှားတာ ကွညျ့ပီးတော့မှ မငျးဇျောလညျး အိပျခနျးထဲ ဝငျကာ ရခြေိုးရနျ အဝတျတှေ ခြှတျပီး အောကျပိုငျး ကို တဘကျ အဖွူဖွငျ့ ပတျထားလိုကျတယျ ။
ခုန က ခယျမလေး ရဲ့ နောကျပိုငျး အလှကို မွငျပီး အောကျက ညီတျောမောငျက ဖောငျးကွှနတေော့ တဘကျ အဖွူပတျထားတဲ့ ပေါငျဂှကွားနရောက ဖောငျးဖောငျးကွီး ထနတေယျ ။ လေးငါးရကျ ကြျော ငတျပွတျနတေဲ့ ညီတျောမောငျ ကို ညကမြှ ဝမောလှိုငျ နဲ့ အစာကြှေးရဦးမယျ ရခြေိုးခနျး ဝငျမယျ အလုပျ “ဒေါကျ ဒေါကျ ´´ တံခါး ခေါကျသံကွားလိုကျပီး ဝါဝါ ရဲ့ အသံလေး ထှကျလာတယျ “ကိုကွီး ..ညီမလေး ပါ ဝငျခဲ့မယျနျော ´´ “အျော ..အေးအေးးး´´ တံခါးဖှငျ့ပီး လှမျးဝငျလာတဲ့ ဝါဝါ ရဲ့ လကျထဲမှာ သောကျရဖေနျခှကျလေး တဈခှကျ ကြှနျနျော အပျေါပိုငျးဗလာ နဲ့ အောကျက တဘကျပတျထားတာကွီး မွငျတော့ အခနျးဝ မှာ တှတှေေ လေး ရပျသှားတယျ “ကိုကွီး ရသေောကျဘို့ပါ အပွငျက တအားပူလို့ အပူရှပျမစိုးလို့ သောကျရေ လာတိုကျတာ ´´ ကြှနျနေျာ့ ကို သခြော မကွညျ့ပဲ ခေါငျးငုံကာ ပွောလာတယျ ။ တျောတျော အလိုကျသိတဲ့ ခယျမလေး ။ “ကြေးဇူးနျော ဝါဝါ ´´အပျေါပိုငျး စပို့ရှပျ လေး ဝတျထားတဲ့ ဝါဝါ ရဲ့ နို့သီးလေးတှကေ စပို့ရှပျ အကွပျလေး ပျေါမှာ ငေါထှကျနတေယျ ။လကျတဘကျက အခွားလကျတဘကျ ကိုငျထားပီး လကျခြောငျးလေး တှေ မသိမသာ တဆကျဆကျ တုံနတေုနျးပဲ ။ရကေို ခပျဖွေးဖွေး သောကျရငျး ဝါဝါ ရဲ့ အလှတှေ ကို သခြော ကွညျ့မိနတေယျ ။
ထမိနျ အပြော့သားလေး ကို တငျးတငျးရငျးရငျး ဝတျထားပီး အောကျဆုံးမှာ တော့ ဖှေးဥတဲ့ ခွထေောကျ နုနုလေး ခွသေညျးနီအနီရောငျလေး ဆိုးထားပီး ပနျးပှငျ့ပုံလေးတှေ ပုံဖျောထားတဲ့ ခွခြေောငျးလေးတှကေ လညျး ခဈြစရာ ရသေောကျပီး ဖနျခှကျပွနျပေးလိုကျတော့ လှမျးလာတဲ့ လကျကလေး တှမှောလညျး လကျသညျးနီ အနီရောငျ လေး တှေ ဆိုးထားတယျ ။ ဖနျခှကျကို လှမျးလိုကျတဲ့ လကျကလေးကို မငျးဇျော အသာ ဖမျးဆုပျလိုကျတော့ ဝါဝါ တဈယောကျ ခေါငျးမော့လာတယျ “ဝါဝါ အရမျးလှလာတယျနျော လကျကလေးတှေ ခွခြေောငျးလေးတှေ ကလညျး ခဈြစရာလေး လကျသညျးနီရောငျလေးနဲ့လညျး လိုကျတယျ ´´ ရှကျကိုးရှကျကနျး အမူအရာလေးဖွငျ့ “အာ ကိုကွီး ကလညျး လြောကျပွောနတေယျ ´´ “တကယျပွောတာပါ ဝါဝါ အရမျးလှလာတယျ ကြောငျးမှာ ရီးစားတှေ ရနပေီလား ´´ “အာ ကိုကွီးကလဲ ပွောဘူး ရှကျတယျ ´´ “မပွောလဲ သိပါတယျ ဒီလောကျ ခြောလှတဲ့ ငါ့ခယျမ နားမှာ ကောငျလေးတှေ ဝိုငျးဝိုငျးလညျနမှောပဲ ဟုတျတယျမလားး´´ “အာ သိဘူး သိဘူး ´´ ဖနျခှကျကို ယူပီး လှညျ့ထှကျမယျ အလုပျ မငျးဇျော ဝါဝါ ရဲ့ လကျဖြံကို လှမျးဆှဲ လိုကျတာ ကွောငျ့ ဖနျခှကျက အောကျကို ပွုတျကသြှားတယျ ။ဖနျခှကျက ကှဲမသှား ခွသေုတျခုံပျေါ ကို ကရြောကျသှားတယျ ၊။ ဝါဝါဦး ကို မငျးဇျော ဆှဲ ယူလိုကျတယျ ။ မငျးဇျော ရဲ့ ရငျခှငျ ထဲကို ဝါဝါ ကရြောကျတော့မလောကျထိ နီးကပျသှားတယျ ။ “ဟငျ…ကိုကွီးးး ဘာလုပျမလို့လဲ´´ မငျးဇျော ဝါဝါ ကို နဲနဲ ထပျဆှဲလိုကျတော့ အပျေါပိုငျး ဗလာ ဖွဈနတေဲ့ မငျးဇျော ရငျခှငျထဲကို ဝါဝါ ခေါငျးလေး ရောကျရှိသှားပီး မငျးဇျောက ဝါဝါ ကို တငျးကွပျစှာ ဖကျထားလိုကျတယျ “အို ..ကိုကွီး မလုပျ မလုပျပါနဲ့ မကောငျးပါဘူး ´´
“ကိုကွီးးးး မလုပျပါနဲ့ မမ သိသှားလို့ ဒုက်ခ ရောကျပါ့မယျ နျော ´´ “ဝလေေး မသိစရေပါဘူး ကှာ နျော ကိုကွီး စိတျတှေ ထိနျးမရ ဖွဈနပေီ ဝါဝါ လညျး တက်ကသိုလျ ကြောငျးသူတဈယောကျ ဖွဈနပေီ ဒီကိစ်စ နားလညျမှာပါနျော ´´ “ဟငျအငျးးးး မသိဘူး ဝါကွောကျတယျ ´´ ဝါဝါ တဈယောကျ မငျးဇျော ရငျခှငျထဲ ရောကျနပေမေယျ့ သူမ ရဲ့ ရငျသားတှေ ရှမှေ့ာ လကျနှဈဘကျကို ကာဆီးကာ မငျးဇျောရငျဘကျနဲ့ မထိ အောငျ ကွိုးစားထားတယျ။ မငျးဇျော ရငျဘကျ နဲ့ သူမ ပါး က ထိနပေီးတော့ မငျးဇျောထံမှ ခြှေးနံလိုလို ယောကငြ်္ား တဈယောကျ ရဲ့ ကိုယျနံ့ က ဝါဝါ နှာခေါငျးထဲ တိုးဝငျလာတယျ ။ ဝါဝါ ရငျဘကျထဲ က နှလုံး ခုနျသံတှကေလညျး မီတာ ၁၀၀ ပွေးထားသလို အရမျးခုနျနပေီ ။ ဝါဝါ့ မှာ ရီးစား ရှိပါတယျ ဒါပမေယျ့ အခုလိုမြိုးကွီးတော့ တခါမှ မနဖေူး ပနျးခွံမှာ ခြိနျးတှေ့ လကျကလေး ကိုငျ ပါးလေး နမျး ရုံ အဆငျ့သာရှိသေးတယျ ။
ရုနျးကွညျ့တယျ မရ ။ ရုနျးလိုကျတိုငျး ပိုမို တငျးကွပျလာတဲ့ လကျကွီးတှေ။ တငျပါးပျေါက လကျတှကေလညျး တဖွညျးဖွညျး ဖငျနှဈခွမျး အကှဲ ကွောငျး ထဲ ရောကျလာကာ ပှတျသပျလာတော့ ဝါဝါ ရဲ့ အတှငျးပိပိ နရော က ရှစိစိ လို ဖွဈလာပီး အရညျစိုလေး တှေ ထှကျလာသလိုလို စိတျထဲ ထငျမိတယျ ။ ဝါဝါ့ ဒူးတှေ ညှတျ ခငျြလာသလိုလို အသကျရှူ မဝတော့သလိုလို ဖွဈလာတယျ ။ ရုနျးကနျ ဘို့ အငျအား တှေ မရှိတော့ ။ ရငျဘကျ နှဈခုကွား ရောကျနတေဲ့ ဝါဝါ လကျတဈစုံ က တဖွညျးဖွညျး လြော့ကလြာပီး မငျးဇျော ရဲ့ ခါး ကို မသိမသာလိုလို ဖကျမိသှားတယျ ။ ဝါဝါ ကြော ကို ဖကျထားတဲ့ မငျးဇျော ရဲ့ လကျတဘကျကလညျး တဖွေးဖွေး ပွလြေော့လာပီး လကျနှဈဘကျလုံး ဝါဝါ့ ရဲ့ တငျပါးတှေ ဆီ ကရြောကျလာရငျး ပှတျသပျလာတယျ ။
ဝါဝါ မရုနျးတော့ ။ မငျးဇျော ရဲ့ ရငျဘတျထဲ မှ တဒုနျးဒုနျး ဖွငျ့ ရငျခုနျသံတှေ မွနျနတောကို လညျး ဝါဝါ ကွားနမေိသလို သူမရဲ့ ရငျခုနျသံတှေ ကလညျး မငျးဇျော နဲ့ အတူတူ အပွိုငျခုနျနတေယျ ။ “ကိုကွီးးး ဝါ ကွောကျလာပီကှာ မမ သိသှားမှာ စိုးတယျ ´´ “ မစိုးရိမျပါနဲ့ ဝါ ရယျ .. ဘယျသူမှ မသိစရေပါဘူးနျော စိတျခပြါနျော ကိုကွီး ဝါ့ ကို ခဈြတယျကှာ ´´ ဝါဝါ တဈယောကျ မငျးဇျော ရဲ့ ရငျခှငျထဲ က နေ မကျြနှာလေး ခှာလိုကျပီး မငျးဇျော ကို ကွညျ့လိုကျမိတယျ ။ မငျးဇျော နဲ့ ဝါဝါ မကျြလုံးခငျြ ဆုံပီး တခဏတာ အခိုကျအတနျ့ မှာ မငျးဇျော ရဲ့ နုတျခမျးတှေ က ဝါဝါ့ရဲ့ နုတျခမျးပါးပါးလေး တှေ အပျေါ ကြ ရောကျလာတယျ။ ဝါဝါ့ နုတျခမျးတှေ ကို မငျးဇျော အငမျး မရ စုတျနရေငျး နုတျခမျး လှာ ကွားထဲကို မငျးဇျော ရဲ့ လြှာ က တိုးဝငျလာပီး လြှာဖြားလေး အခငျြးခငျြး မှနှေောကျ ရဈသိုငျးလာတယျ ။
နိုငျငံခွား ကားတှေ ထဲက နမျးတာ မြိုး ဝါဝါ တဈယောကျ သိပီးသားမို့ သူမလညျး မငျးဇျော ရဲ့ နုတျခမျးသားလေးတှကေို ပွနျစုပျပေးလိုကျရငျး လြှာ ဖြားလေးတှေ အခငျြးခငျြး ထိုးမှပေေးလိုကျတယျ ။ မငျးဇျော ရဲ့လကျတှကေ ထမိနျပျေါ မှာ ပွေးလှား ပှတျသပျနရောမှ ဝါဝါ ရဲ့ ထမိနျ အထကျဆငျ စ ခညျြနှောငျထားတဲ့ နရောလေး ကို ကိုငျကာ ဖွခေလြိုကျတယျ ။ ထမိနျက ကွမျးပွငျပျေါ ကို ကှငျးလုံး ပုံကြ သှားပီးတဲ့ နောကျ ဝါဝါ တငျပါးပျေါမှာ ဇာပငျတီ အဖွူရောငျလေး သာ ကနျြတော့တယျ ။ ဝါဝါ ရဲ့ လကျတှေ က လညျး မငျးဇျော ရဲ့ ကြောကုနျးတလြောကျ ပှတျသပျ ရငျး အနမျးတှေ ပွနျလညျ ပေးနမေိတယျ ။ မငျးဇျော ရဲ့ လကျတှေ က ပငျတီ ပါးပါးလေး သာ ရှိတော့ တဲ့ ဝါဝါ ရဲ့ တငျပါးတှေ ပျေါ ပွေးလှား နရေငျး လကျတဘကျက ပငျတီ မြော့ကွိုးလေး ထဲ ထိုးဝငျကာ ဖငျ အကှဲ ကွောငျးကွားလေး မှ တဆငျ့ ဝါဝါ ရဲ့ အဖုတျနရောလေး ကို မမှီ မကမျးလှမျးနှိုကျလာတယျ ။ လကျခလယျ ခြောငျးလေး က ဝါဝါ ရဲ့ စိုစိစိ လေး ကို စမျးမိသှားတော့ ဝါဝါ ရှကျသှားရငျး နုတျခမျးတှေ နုမျးနတော ကို ရပျကာ မငျးဇျော ရဲ့ ရငျခှငျထဲ ကို ခေါငျးဝှကျထားမိတယျ ။
ဒူးတှေ ကှေးညှတျခငျြသလိုလို ဖွဈသှားတာ မို့ လကျနှဈဘကျကို မငျးဇျော ရဲ့ ခြိုငျး အောကျမှ လြှိုသှငျးကာ မငျးဇျော ပုခုံးကို လှမျးခြိတျ ကာ ဖကျထားလိုကျမိတယျ ။ “အားးး ကိုကွီးးးး ဖွေးဖွေး လုပျပါ အားးး´´ “ဝါ့ နရောလေး က တအား စိုနပေီနျော ´´ “အာ မပွောနဲ့ကိုကွီးရာ ရှကျတယျ ´´ “မရှကျပါ နဲ့ ဝါရယျ ကိုကွီး ဟာကွီး လညျး တအားတောငျမတျနပေီ ကိုငျကွညျ့ ´´ ဟု ဆိုကာ မငျးဇျောက ခါးမှာ ပတျထားတဲ့ တဘကျ ကို ဖွခေပြဈလိုကျတယျ ။ မငျးဇျော ရဲ့ လီးကွီး က ခကျြခငျြး ရူနျးကွှလာပီး ဝါဝါ့ ရဲ့ ဆီးခုံအထကျ ဝမျးဘိုကျနရောလေး ကို လာထိတယျ ။ လီးထိပျမှ အရညျ ကွညျလေးတှကေ ဝါဝါ့ ရဲ့ ခကျြနားလေး ကို လာစိုသှားတယျ ။ မငျးဇျော က ဝါဝါ ရဲ့ လကျတဘကျကို ယူကာ သူ့ လီးကွီး ပျေါ တငျပေးလိုကျတယျ ။ ဝါဝါ လကျကလေး တှေ တဆကျဆကျ တုနျရငျး မငျးဇျော လီးကွီး ကို ကိုငျထားမိတယျ ။
လကျဖဝါးထဲတှငျ အပွညျ့ ဖွဈသှားတယျ ။ မငျးဇျောလီးကွီး က ခန်ဒာကိုယျ ရဲ့ အပူခြိနျထကျ ပိုပူ ပိုနှေးနသေလို ခံစားမိတယျ ။ “ဝါ ကုတငျပျေါ သှားရအောငျနျော ´´ ဝါဝါ ဘာမှ ပွနျမဖွမေိ ။ မငျးဇျော ချေါဆောငျရာ ကို လိုကျသှားမိပီ ။ ကုတငျပျေါ ရောကျတော့ ပကျလကျလေး လှနျထားတဲ့ ဝါဝါ ရဲ့ ပငျတီ လေးကို မငျးဇျော လှမျးခြှတျလိုကျတယျ ။ အပြို စဖွဈကတညျး က ဘယျသူ့ ကိုမှ အမွငျ မခံဖူးသေးတဲ့ ဝါဝါ ရဲ့ စောကျဖုတျကို မငျးဇျော မွငျသှားပီ။ ဝါဝါ ရှကျတာကွောငျ ပေါငျနှဈခြောငျး ကို လိမျကာ အဖုတျလေး ကို ဖုနျးကှယျထားသေးတယျ ။ အဖုတျကို သခြော မမွငျ ရပမေယျ့ အဖုတျပျေါမှာ အမှေးတှေ ကို တော့ သခြော မွငျသှားပီ။ ရှကျလိုကျတာ ။ မငျးဇျောက ဝါဝါ ရဲ့ တီရှပျ အကြီ လေးကို ပါ ခေါငျးမှ နေ၍ ခြှတျပဈလိုကျတယျ ။ ဝါဝါ ပို လို့ ရှကျသှားတယျ ။
အိမျနရေငျး မို့ ဘျောလီ အဟောငျးလေး သာ ဝတျထားမိတဲ့ အဖွဈ ။ ဟုတျတယျလေ တခွားယောကငြ်္ားလေး မွငျသှားတယျ ထားဦး ဘျောလီ ဘရာဇီယာ အသဈကလေး နဲ့ ဆိုတျောသေးတယျ အခု က ခညျြသား ခပျနှမျးနှမျး ဘျောလီ လေး သာ ဝတျထားတာ မို့ ပိုပီး ရှကျသှား အားနာသှားသလိုပဲ။ မငျးဇျော လကျတှကေ ဘျောလီ အနှမျးလေး ပျေါ မှ နို့တှေ ကို ပှတျသပျလာတယျ ။ မငျးဇျော အတှကျ ကိစ်စ မရှိ ဘျောလီ နှမျးနှမျး ဟောငျးဟောငျး အသဈပဲ ဖွဈဖွဈ သူမွငျခငျြတာ က ဘျောလီ အောကျမှ နို့တှေ သာဖွဈတယျ ။ ဘျောလီ ခြိတျတှေ ကို လှမျးဖွူတျမယျလုပျတော့ ဝါဝါ ကြောလေး ကို မသိမသာ စောငျးပေးလိုကျမိတယျ ။ မငျးဇျော ဘျောလီ ခြိတျတှကေို ဖွုတျပီး ဘျောလီ ကိုခြှတျပဈလိုကျကာ ကုတငျဘေးသလို့ လှမျးပဈလိုကျတယျ “အားးးး ဝါ့ နို့လေးတှကေ လှလိုကျတာ ကှာ ´´ ပွောလညျး ပွော နို့သီး တဘကျကို ကိုငျပှတျရငျး နောကျတဘကျကို ကုနျးစို့တော့တယျ ။ နို့သီးခေါငျးလေးတှကေို လြှာလေး နဲ့ ရဈပတျကာ စို့လိုကျခြိနျမှာတော့ ဝါဝါ လကျမောငျးသားလေးတှေ မှာ ကွကျသီးလေးတှေ ပါ ထသှားတယျ ။
စို့ရငျးစို့ရငျး နဲ့ လကျတဘကျက ဝါဝါ့ ရဲ့ ပေါငျတှငျးသားလေးတှေ ကို လှမျးအပှတျ “အာ ကိုကွီး ယားတယျကှာ ခိခိ ဟိ အားးး ယားတယျလို့ အဲ့နရောကို မပှတျနဲ့ ´´ အဲ့လို ပွောလိုကျမှ မငျးဇျောလကျတှကေ ဝါဝါ ရဲ့ ဆီးစပျနားက အမှေးတှပေျေါ ကို ပွောငျးပှတျလိုကျတာ ကွောငျ့ ပိုဆိုးသှားတယျ “အားးး ကိုကွီးးးး ယားတယျ ဟိ..ဟိ..ဟီးးးး´´ ဝါဝါ တဈယောကျ တှနျ့တှနျ့လူး သှားရငျး မငျးဇျော ကို လှမျးဖကျထားမိသညျ ။ ဖီးလျ တကျနတော အရှိနျနဲနဲ လြော့သှားပမေယျ့ ဝါဝါ့ ရငျထဲ မှာတော့ ကွောကျစိတျတှေ နဲနဲ ပယျြသှားသလို ရှိကာ မငျးဇျော နဲ့ ပိုမိုရငျးနှီးကြှမျးဝငျသှားသလို ခံစားလိုကျရတယျ ။ မငျးဇျောကလညျး ဝါဝါ့ရဲ့ ခါးလေးတှေ ပေါငျတှငျးကွောလေးတှေ အဖုတျအမှေးနရောလေးတှေ လြောကျပှတျရငျး ကြီစားလိုကျတယျ ။
“ဟိဟိ ကိုကွီး ယားတယျလို့ အဲ့လို မစ နဲ့ကှာ..ခဈ ခဈ ခဈ ´´ ဝါဝါ တဈယောကျ မောလာတယျ မငျးဇျော ကလညျး ဝါဝါ တဈယောကျတှနျ့လူး နတော ကို ကွညျ့ပီး ပို သဘော ကသြှားတယျ ။ မငျးဇျော ဝါဝါ့ ရဲ့ နုတျခမျးလေး တှေ အသာ နမျးစုပျလိုကျတယျ ။ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ´´ “ပွှတျ ပွှတျ ´´ “ဝါ .. ကိုကွီး လီး ကို ကိုငျပေးထားနျော ´´ “အာ အဲ့လို ကွီး ထညျ့မပွော နဲ့ကှာ ကိုငျပေးထား ဆိုပီးရောပေါ့ ´´ “ အငျးး ပါ ကိုငျ ထားလိုကျနျော ´´ မငျးဇျော လီး ကို ကိုငျလိုကျတယျ ။ ဒဈထိပျနရော ကွီးက ဖုထဈနတေယျ ။ ပီးတော့ လီးတံကွီးကလညျး တဆကျဆကျ တုနျနသေလိုပဲ ။ “ကိုကွီးးး ဝါ အခု လို တခါမှ မနဖေူးဘူး အခုလို နမေိတာ ဝါ့ ကို အထငျသေးမှာလားနျော ´´ “အျော..ဝါ ရယျ ကိုယျ့ ခယျမလေး ကို အထငျသေးပါ့မလား လို့ ´´ မငျးဇျော စကားတှေ ပွောနရေငျး လကျတဘကျက ဝါဝါ့ ရဲ့ နို့သီး ခေါငျလေး တှေ ကို ဆော့ကစား ပေးလိုကျတယျ ။ အပြို နို့သီးခေါငျးလေး မို့ မာမာဆူဆူ လေး ဖွဈနတေယျ ။ နို့အုံလေးတှကေ အစ မာမာ တငျးတငျး ရှိလှတယျ ။
“ကိုကွီး စို့ပေးလေ ´´ “အငျး ´´ “ွပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ´´ “အငျးးးး အငျးးးဟငျးးး´´ ဝါဝါ တဈယောကျ သူမ နို့ တှေ ကို စို့နတော ကို ခေါငျးလေး အသာမတျကာ ကွညျ့မိတယျ။နို့သီးခေါငျးလေးတှေ ကို လြှာလေးနဲ့ ယကျလိုကျ နို့အုံကွီး ကို စို့လိုကျလုပျနသေော မငျးဇျော ပါးလေး ကို လကျဖဝါးလေး ဖွငျ့ အသာ ပှတျသပျပေးရငျး နို့စို့ ခံနမေိတယျ ။ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ´´ “အားးး အငျးးးး´´ “ကိုကွီး …ဝါ့ ရငျထဲမှာ ဘယျလို ကွီးလဲ မသိဘူး အဲ့လို မြိုး တခါမှ မခံစားဖူးဘူး ´´ “ပွှတျ ပွှတျ ´´ မငျးဇျော နို့စို့ပေးနရေငျး ဝါဝါ့ ပေါငျကွား ကို လကျလှမျးနှိုကျလိုကျတယျ ။ ဒီတဈခုတော့ ဝါဝါ ပေါငျကို စမေ့ထား အနညျးငယျ ကားထားပေးလိုကျတယျ ။
လကျခြောငျးလေးတှေ အဖုတျပျေါ ရောကျသှားတယျ ဆိုရငျပဲ မငျးဇျော လကျခြောငျးလေးတှမှော စေးကပျကပျ အထိ အတှေ့ ရလိုကျတယျ ။အရညျစိုစိုလေးမြားဖွငျ့ စေးကပျကပျ ဖွဈနတေဲ့ အဖုတျလေး ကို အသာ ပှတျခပြေေးနမေိတယျ ။ အစိက သိပျမသိသာ မကွီး ။ အဖုတျ ဘေး မှာ သူ့ မိနျးမလို မြား အဖတျကလေး တှေ တှဲနသေလား လကျခြောငျးလေးမြား ဖွငျ့ ဖွဲကွညျ့မိတယျ မရှိ ။အတှငျးသို့ လကျခလယျလေး တဈဆဈလောကျ နှိုကျလိုကျတော့ အရညျစိုစို တှေ ပိုမြားနတေယျ ။ စောကျဖုတျ အတှငျးထဲသို့ လကျခြောငျးလေး အား ဝငျထှကျ ဖွေးဖွေး ခငျြးလုပျပေးရာမှ တဖွညျးဖွညျး ပိုခြောမှလေ့ာတယျ “အားးး အငျးးး ကိုကွီး ဖွေးဖွေး အားးး´´ ဝါဝါတို့ ကြောငျးသူတှေ အခငျြးခငျြး လိငျကိစ်စ တှေ ပွောဖူးကွားဖူးနတော မို့ ဝါဝါ တဈယောကျ အလိုး ခံပေးရတော့မယျ ဆိုတာလဲ စိတျထဲ သိနတေယျ ။သူမရဲ့ အပြိုစငျ ဘ၀ ကို လညျး အဆုံးသတျရတော့မယျ ။ အခု အပြိုစငျဘ၀ အဆုံးသတျရနျအတှကျလညျး ဝါဝါ အသငျ့ဖွဈနပေီ ။နို့တှေ စုပျရငျး အဖုတျပှတျပေးနတေဲ့ မငျးဇျော ရဲ့ လီး ကွီး ကို ခပျကဈြကဈြ ဆုပျကိုငျထားမိပီ ။
“အားးး ကိုကွီးးး အားးး အငျးးးး´´ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ´´ “ဇှိ..ဇှိ …ဇှိ…´´ “အားးးကိုကွီးရယျ အားးးး´´ ဝါဝါ့ စောကျပတျ မှာ အရညျတှေ အမြားကွီး ထှကျနပေါပီ ။ စောကျဖုတျ ကွီး ကို ကော့ကော့ ပေးနမေိရငျး လကျတှကေ မငျးဇျော ရဲ့ ခေါငျးမှ ဆံပငျတှေ ကို ပါ ဆှဲစုပျကိုငျကာ နို့သီးတှပေျေါ ကို ဖိဖိ ထားမိတယျ ။တဖွေးဖွေးနဲ့ မငျးဇျော ရဲ့ လကျခြောငျး က တဈခြောငျးလုံး အဖုတျထဲမှာ ဝငျလိုကျထှကျလိုကျ ကလိနပေီ ။ အဖုတျရညျတှကေလညျး ပိုပို ရှဲလာတယျ ။ မငျးဇျောလညျး ဘေးတိုကျ အနအေထားမှ အဖုတျ နှိုကျနတော ကို ရပျလိုကျပီး ဝါဝါ့ ကိုယျပျေါ ကို အုပျမိုး ကာ ပေါငျကွားထဲ ခှဝငျလိုကျတယျ ။ နို့သီးလေး ကို စုပျကာစုပျကာ ဖွငျ့ ဖွေးဖွေး ခငျြးအောကျကို လြောဆငျးလာခဲ့ပီ ။တဖွညျးဖွညျး မငျးဇျော ခေါငျးက ဝါဝါ့ ရဲ့ အဖုတျနားလေး ကို ရောကျလာကာ မငျးဇျော လြှာ ကို အပွားလိုကျ ထုတျလိုကျရငျး စောကျဖုတျမှေးလေးတှအေပျေါ ကို ယကျပေးလိုကျတယျ “အားးးး ကိုကွီး မလုပျပါနဲ့ ငရဲကွီးလိမျ့မယျ အားးး´´ ဝါဝါ ရုနျးသလိုလုပျလိုကျကာမှ ဝါဝါ့ ပေါငျတှကေ မငျးဇျော ခေါငျး ကို ညှပျလိုကျသလို ဖွဈသှားကာ အဖုတျက လညျး ကော့ပေးလိုကျသလို ဖွဈသှားတယျ ။ မငျးဇျော နှာခေါငျးထဲ ခပျရှနျးရှနျး အနံတဈခု ရလိုကျတယျ ။ ဒါ အပြိုတဈယောကျ ရဲ့ အဖုတျအနံ့ ပဲလေ ။မငျးဇျော လကျနှဈဘကျ ဖွငျ့ ဝါဝါ့ ပေါငျတှေ ကို ဆှဲကား ပဈလိုကျတယျ ။ ဟစိစိ အဖုတျလေး အား သခြော တှမွေ့ငျလိုကျရပီ ။ ဝါဝါ့ စောကျပတျ မှာ ပွဲလနျမနေ ဖောငျးဖောငျးကားကားလေး ကွားထဲမှာ အကှဲခွမျးလေး နှဈခု က ဟစိစိ လေး ။ ဟစိစိ အဖုတျ အကှဲလေး ကွားထဲမှာ အစိလေး က မသိမသာ စှာ ပဲရှိနတေယျ ။
အဖုတျအရညျကွညျလေးတှေ ထှကျနတောကွောငျ့ အတှငျးသားလေးထဲမှာ ပွောငျခြောခြောလေး ဖွဈနတေယျ ။ မငျးဇျော လြှာ ကို အပွာလိုကျ ထုတျလိုကျပီး အဖုတျသားလေးတှကေို ယကျပေးလိုကျတယျ “အားးး ကိုကွီးးးးအားးး´´ “ပလကျ ..ပလကျ ပလကျ “ “အားးကိုကွီး ရယျ ဘယျလို ကွီးမှနျးမသိဘူးကှာ အားးးး´´ ဝါဝါ့ ပေါငျတှေ က အလိုလို ကားထားမိနပေီး အဖုတျကွီး ကိုလညျး ကော့ကော့ ပေးနမေိတယျ ။ အခု လို အဖုတျယကျခံရမယျလို စောစောကထိ တောငျ မတှေး ထားဘူး ။ မငျးဇျောလီးကွီး သာ ထိုးသှငျးမယျလို့ ထငျထားခဲ့တာ ။ ဝါဝါ့ အဖုတျ ကို မငျးဇျော ယကျစုပျလိုကျတိုငျး ဘိုကျထဲက ကလီစာတှေ အူတှပေါ ပွတျထှတျသှားသလား ခံစားမိတယျ ။
အဖုတျအယကျခံရတဲ့ အရသာ ကို ဝါဝါ ကွိုကျသှားပီ ။ တခကျြတခကျြ မငျးဇျော လြှာ ထိပျဖြား က အဖုတျအတှငျးသား ထဲ အထိပါ ရောကျရောကျလာတယျ ။ ဝါဝါ အဖုတျကို ကော့ကော့ ပေးရငျး အယကျခံနမေိတယျ ။ မကျြလုံးတှေ ကို မှိတျထားကာ နုတျဖြားမှ လညျး ညီးညူနမေိတယျ “အားးး ကိုကွီးးးးအားးး အငျးးးး´´ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ´´ “ ပလကျ ပလကျ ပလကျ ´´ “အားး ကိုကွီးရေ အားးးး ´´ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ´´ “အားးးးရှီးးးးအားးး ´´ ဝါဝါ မရှကျနိုငျတော့ ပါးစပျမှ လညျး ညညျးညူ ရငျး အဖုတျကို အယကျခံနမေိတယျ “အားးး ကိုကွီးးးး ကောငျးတယျကှာ´´ “အှနျးးးး ပွှတျွပွှတျ ပွှတျ ´´ “အားးး ဟုတျတယျ အထဲကို ယကျပေး အားးး´´ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ´´ မငျးဇျောလကျကလညျး အဖုတျကို ယကျပေးနရေငျး လကျတှကေ အဖုတျမှေးတှကေို ပှတျပေး ကစားပေးနလေိုကျတယျ ။ “အားးး ကိုကွီး ရအေားးး အားးး´´ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ´´ ခပျစိစိ အနအေထား မှ သသေခြောခြာ လေး ပှငျ့အာလာသော စောကျပတျ အား မငျးဇျော အားရပါးရ ယကျပဈလိုကျတယျ .။
စောကျပတျ တပွငျလုံး အရညျတှေ ရှဲနပေီး မငျးဇျော နုတျခမျးတှငျလညျး အရညျတှေ လညျခြောငျး ထိပါ စီးကနြပေီ ။ ဒီလောကျ ရှဲစို ပွောငျခြောနပေီ ဖွဈတဲ့ အတှကျ မငျးဇျော ဝါဝါ့ ကို ပါကငျ ဖောကျရနျ အခြိနျ တနျပွီ ဖွဈကွောငျး သိလိုကျသညျ ။ မငျးဇျော စကျပတျကုနျးယကျ နရော မှ ထကာ ဝါဝါ့ ဒူး နှဈခြောငျး ကို ဘေးသို့ထောငျကားလိုကျရငျး ပေါငျဂှကွားထဲ နရော ယူလိုကျသညျ ။ မငျးဇျော လီးကွီး ကလညျး အစှမျးကုနျ မတျထောငျနရေငျး ခေါငျးတညိမျ့ညိမျ့ ဖွငျ့ သူရဲ့ လားရာ ကို သှားရနျ အဆငျသငျ့ ဖွဈနပေီ ။ဝါဝါ့ အဖုတျ ၀ ကို လကျညိုးလကျခလယျလေး ဖွငျ့ အသာ ဖွဲလိုကျကာ မငျးဇျော လီးဒဈ ကို အသာ မွုပျလိုကျတယျ “အားးး ကိုကွီး ဖွေးဖွေးနျော ´´ ဒဈခေါငျး အား အဖုတျ အကှဲ ကွောငျး တဈလြောကျ စုနျခြီဆနျခြီ ဖွငျ့ လေးငါးဆယျခကျြ ပှတျဆှဲလိုကျသညျ ။ “အားးး ကိုကွီး အ အ အားး´´ လီးဒဈခေါငျး ဖွငျ့ ဖိဆှဲ မိလိုကျသညျ့ အခါတိုငျး ဝါဝါ့ အစိ လေး က ကဉျြခနဲ ကဉျြခနဲ ဖွဈသှားသညျ ။
ဘယျလို့ အရသာ မသိ ။ တခါတလေ ရသေောကျလိုကျတဲ့ အခြိနျ သှားကွားထဲ ကဉျြ တဲ့ အရသာလေးမြိုး ။ ခံစားလို့လညျး ကောငျးသညျ ။ နာကဉျြသလို ရှိနသေျောလညျး ဆကျပီး ခံစားခငျြနမေိတဲ့ အရသာမြိုး ။ဘယျအခြိနျ အတှငျးထဲ ကို တိုးဝငျလာမလဲ ဆိုတာ ကို မကျြစိမှိတျထားရငျး ဝါဝါ တဈယောကျ မြှျောလငျ့နတေုနျးမှာပဲ မငျးဇျော ရဲ့ လီးဒဈ ထိပျဖြားက ဗဈြကနဲ ထိုးခှဲ ဝငျရောကျလာသညျ “အ…အားးးး ´´ မငျးဇျော လကျမောငျး တှကေို လှမျးဆှဲရငျး ကိုငျထားလိုကျမိသညျ ။ ခန်ဒာ ကိုယျ ကလညျး တှနျ့ခနဲ ဖွဈသှားသညျ ။ မငျးဇျော ကလညျး ခကျြခငျြးကွီး အထဲ ထိ ထိုးမသှားပါ လီးဒဈ ကိုသာ သှငျးလိုကျထုတျလိုကျ ဖွငျ့လုပျနရေငျး အထဲကို ဖွေးဖွေး ခငျြး တိုးဝငျသညျ ။ တခကျြတညျး ဖွငျ့ အဆုံးထိ မဖွဈ နိုငျမှနျး သိတယျ ။ အထဲကို ကွပျကွပျညှပျညှပျ တိုးဝငျနရေ တာကွောငျ့ လီးဒဈဖြား နှငျ့ အရပွေား ကွားမှာ လဲ နာကဉျြမှု ဖွဈနတေယျ ။ အရညျတှေ တအား ထှကျနတော မို့ ခြော မှနေ့သေျောလညျး အဆုံးထိ မသှငျးနိုငျ။
ခါးကို အားစိုကျကာ နှဲ့နှဲ့ သှငျးနရောက တဖွေးဖွေး နှငျ့ လီးတဈဝကျကြျော ဝငျလာလပေီ။ “ဗဈြ ဗဈြ ဗဈြ “ “အ ..အာ..အားးး´´ “ဗဈြ ဗဈြ ဗဈြ ´´ “အားးး ကိုကွီး နဲနဲ နာတယျ ´´ “အငျးးး ဝါ ကိုကွီး ဖွေးဖွေး သှငျးနတေယျ နျော ´´ “ဗဈြ ဗဈြ “ “အားးး ကွပျလိုကျတာ ဝါရယျ ကိုကွီး အဆုံးထိ ထိုးထညျ့တော့မယျနျော ´´ “အငျးးးးအားးးးနာတယျ အားးးအမလေးးးအားးးကိုကွီး´´ နောကျဆုံး တဈခကျြ မငျးဇျော အားစိုကျပီး ခပျပွငျးပွငျးထိုးခှဲ ပဈလိုကျသညျ။ လီးဒဈနရောမှာ ပါ နာကဉျြသှားလိုပဲ “ဗဈြ ….. ဘှတျ ဖှတျ ´´ “အား နာတယျ နာတယျ အားးးးး´´ မငျးဇျော နဲ့ ဝါဝါ ဆီးခုံခငျြး ကပျဖိထားလိုကျသညျ ။ လီးက အဆုံး အထိ ဝငျသှားပီ ။
သူမြားတှပွေောသလို မြိုး အပြိုစငျ အမှေး ပါးကို ထိုးခှငျးလိုကျပီ ထငျသညျ ။ လီးတံ အဆုံးထိ မရောကျခငျမှာပငျ အထဲက ဒုတျခနဲ အသံ မြိုး ခံစားမိလိုကျတယျ ။ လီးခြောငျး ကို အထုတျအသှငျး မလုပျသေးပဲ အဆုံးထိ သှငျးကာ အမောဖွနေလေိုကျသညျ ။ ဝါဝါ ကလညျး မငျးဇျော ရငျဘကျ ကွီး တှေ ကို လှမျးကိုငျထားသညျ ။ ငါးမိနဈလောကျ အမောဖွပေီးသညျ့နောကျ “ ဝါ ..ကိုကွီး ဆကျလုပျမယျနျော ရရဲ့လား´´ “အငျးးး ဖွေးဖွေး နျော ကိုကွီး နဲနဲ နာနတေယျ´´ “အငျးးး ခနနေ လောကျ ဆို အနာ သကျသာ သှားမှာပါ ဝါက အပြိုမို့လို့ နာတာပါ ´´ မငျးဇျော ဝါဝါ့ ရဲ့ ခါးလေး ကို ကိုငျကာ လီးတံကို ဖွေးဖွေးခငျြး ဆှဲထုတျလိုကျသညျ ။ “ဘှတျ ဘှ..ဘှတျ´´ အတှငျးမှ လအေံသံ မြား ပါ ထှကျလာသညျ ။ ဝါဝါ့ အဖုတျမှ လအေံသံမြား ထှကျသှား သဖွငျ့ နဲနဲ တော့ ရှကျသှားသညျ ။မငျးဇျော လီးတံကို ထုတျလိုကျသှငျးလိုကျ ဖွေးဖွေး ခငျြး လုပျပေးနရော ဝါဝါ လညျး အတှငျးမှာ ခုနက စပျဖဉျြးဖဉျြး နာကဉျြမှု ကို မလြေ့ော့လာသညျ ခံစားမှုလညျး ကောငျးလာသညျ ။ခေါငျးလေး ကို အသာထောငျကွညျ့မိတော့ ဝါဝါ့ အဖုတျ ထဲ ကို လီး ထိုးထိုး ဝငျနတော ကို တဝကျတပွကျ လှမျးမွငျနရေသညျ ။
“ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ “ “ဖတျ ဖတျ ဖတျ ´´ “အ အ အာအားးး´´ “ကောငျးရဲ့လား ဝါ ´´ “ အငျး သိပျ မနာ တော့ဘူး ကောငျးလာပီ ´´ “ကိုကွီး မွနျမွနျ လုပျကွညျ့မယျနျော ဝါဝါ အဖုတျ ကို လှမျးဖွဲပေးထား နျော ´´ “အာ ကိုကွီးကလဲ´´ “ဝါ နာမှာ စိုးလို့ပါ ´´ မငျးဇျော က ဝါဝါ့ ရဲ့ လကျ ကို လှမျးယူကာ အဖုတျ ပျေါ တငျပေးလိုကျသညျ ။။ ဝါဝါ လညျး အဖုတျ နုတျခမျးသား နှဈဘကျကို သခြော လေး ဖွဲပေးလိုကျတယျ ။ “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ´´ “အားးးအားးး ကိုကွီးးး အားးး´´ နာကဉျြမှု ဝဒေနာ မှသညျ တဖွေးဖွေး ကောငျးလာပီ။ ဝါဝါလညျး အဖုတျကို ပွနျကော့ပေးနမေိပီ။ “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ “ “ဖတျ ဖတျ ဖတျ ´´ “အားး ကိုကွီး ကောငျးတယျ အားးး´´ တဖွညျးဖွညျး စောငျ့ခကျြတှေ က ပိုမို မွနျဆနျလာသလို ဆီးခုံ နဲ့ ပေါငျ နဲ့ ရိုကျသံ တဖတျဖတျ အသံတှေ လညျး ဆူညံလာသညျ ။ ဤ အသံကပငျ လိငျစိတျ ကို ပိုမို နှိုးစှ လာသလိုလို ထငျမိတယျ ။
“အားး ကိုကွီး စောငျ့ပေးတော့ ဝါ ခံနိုငျနပေီ အားးးကောငျးတယျ ´´ “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ´´ “ဖတျ ဖတျ ဖတျ ´´ “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ´´ မငျးဇျော လိုးနရေငျးက ပငျနို့တှကေို ပါ လှမျးလှမျးဆှဲသညျ ။ မငျးဇျော လကျက ပေါငျတံတှကေို ကိုငျပီး လိုးသညျ့ အခြိနျ ဆို ဝါဝါ ကလညျး သူမ နို့တှကေို သူမ လကျဖွငျ့ ပှတျခနြေပေီ “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ´´ “ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ “ “ဖတျ ဖတျ ဖတျ ´´ “အားးး အားးအ´´ “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ´´ ပကျလကျ လှနျ လိုးခံနသေော ဝါဝါ စောကျပတျထဲမှ လီးတံ ကို ခြှတျပဈလိုကျတယျ ။ “အာကိုကွီး လုပျလကှော ဘာလိုခြှတျပဈတာလဲ ´´ “ဝါ့ ဖငျကိုကွညျ့ပီး လိုးခငျြလို့ ဖငျကုနျးပေးပါလားနျော လေးဘကျထောကျလိုကျလေ ´´ “အာ အဲ့လို ကွီး မလုပျပေးခငျြဘူးကှာ ´´ “လုပျပါ ဝါ ရယျ ဝါ့ ဖငျကွီး ကို ကွညျ့ပီး လိုးခငျြတယျနျော ´´ မငျးဇျော ဝါဝါ့ ကို ခါးမှ ကိုငျကာ မှောကျပေးလိုကျပီး တငျပါးကွီး ကို အပျေါ ကို ဆှဲယူလိုကျတယျ ။
ဝါဝါ တဈယောကျ ညငျးနသေျောလညျး ဖငျကုနျးလြှကျ သား ဖွဈသှားပီ ။ ရှငျးရှငျး ပွောရလြှငျ ဝါဝါ အလိုးခံနရေပမေယျ့ ဖငျကွီး ကုနျးမထားခငျြ ။ ရှကျလညျး ရှကျနသေေးသညျ ။ တသကျလုံး ဘယျသူမှ မမွငျအောငျ ဖုံးကှယျ ထားတဲ့ ဖငျကွီး တပါးသူ ရှမှေ့ာ လေးဘကျကုနျးကွီး ဖွဈနသေညျ ။ အပြိုတဈယောကျမို့ အရှကျတော့ မကုနျသေးပါ။ သို့ပမေယျ့ အခုတော့ ဖငျကုနျးလြှကျသား ဖွဈနပေီ ။ မငျးဇျောကလညျး ဝါဝါ့ ဖငျ နောကျ မှ ကကြ နန နရောယူပီး လီးဒဈ တံကွီး ကို အဖုတျဝမှ တလေို့ကျသညျ ။ လုံးဝနျးသော ဖငျလုံးကွီး ကို ကိုငျထားရသညျမှာလညျး အနှဈအရသာ ရှိလှသညျ ။အရငျနတှေ့ကေ ဝါဝါ့ ဖငျကို ထမိနျပျေါမှာ ခိုးခိုး ပီး ကွညျ့နရေသညျ အခုတော့ ဖငျအဖှေးသား မွငျနရေပီး အခုလိုးနရေသညျမှာ မိမိ ရဲ့ ခယျမခြောခြော လေး ဖွဈနတော ကွောငျ့ မငျးဇျော စိတျတှေ ပိုထနျနမေိသညျ တငျပါး နှဈခွမျး ပျေါကို လကျဖွငျ့ အသာ ပှတျပေးနရေငျး လီးတံ ကို အဖုတျ ထဲ ထိုးသှငျးလိုကျသညျ ။ အဖုတျ မှာ ရှဲစိုနတော မို့ ခြောခြောခြူခြူ ပငျ ဝငျသှားသညျ။ “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ´´ “အ အ အားး ကိုကွီး ဖွေးဖွေး ´´ “အားးးး ဝါ့ ဖငျကွီး တှေ က မိုကျတယျကှာ တုံးခဲနတောပဲ ´´ “ဖတျ ဖတျ ဖတျ ´´ “အားးး ကိုကွီး နာတယျ အရမျးမစောငျ့ နဲ့ အဲ့လောကျ မခံနိုငျဘူး “ “အားးး ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ´´ “ဖတျ ဖတျ ဖတျ ´´ “ဘှတျ ဘှတျ ´´ “အားးး ကိုကွီး ကောငျးတယျ အားးး နာတယျ ´´ “အငျးး ကိုကွီး စောငျ့လိုးပီနျော အားးး´´ “အငျးး ကိုကွီး လိုး အားးးလိုးးးးကှာ´´ “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ´´ ခယျမလေး ရဲ့ ဖငျတုံးကွီး ကို ကိုငျပီးလိုးနရေသဖွငျ့ မငျးဇျော မထိနျးနိုငျတော့ သုတျရညျတှေ ထုတျခငျြလာပီ။ အထုတျအသှငျး တအား မွနျလာသညျ ရှမှေ့ ဝါဝါ ကလညျး တအား အျောနသေညျ။
“ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ ´´ “ဖတျ ဖတျ ဖတျ ´´ “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ´´ “အားးး ဝါဝါ ကိုကွီး ပီးတော့မယျ အားးးး´´ “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ´´ “အားးး ထှကျ …ထှကျကုနျပီ အားးးး´´ နောကျဆုံး တဈခကျြ အားကုနျ စောငျ့လိုကျကာ လီးထိပျမှ အရညျတှကေို စောကျဖုတျထဲသို့ ပနျးထညျ့လိုကျတော့တယျ ။။ “အားးး ကိုကွီး အားးးးး´´ မငျးဇျော ရဲ့ ရှိသမြှ အားတှေ အကုနျ ဝါဝါ့ အဖုတျထဲ ထိုးထညျ့လိုကျရသလို အားအငျမြား ကုနျခမျးသှားကာ လေးဘကျ ကုနျးထားသော ဝါဝါ ပျေါ ကို မှောကျလြှကျ ကြ သှားတယျ ။ လီးတံ ကွီး ကတော့ အဖုတျထဲမှာ ရှိနဆေဲ လီးတံကို ဝါဝါ အဖုတျ အတှငျး မှ ဆှဲ ညှဈနသေလိုမြိုး ဝါဝါ့ အဖုတျ အတှငျး နံရံမြား မှ လှုပျစိ လှုပျစိ ဖွဈနတေယျ ။ ဝါဝါ ကတော့ တတောငျဆဈ ထောကျကာ မငျးဇျော ကိုယျလုံးကွီး ကို ထိနျးထားရငျး ပီးဆုံးသှားတဲ့ အရသာ ကို ကောငျးကောငျးခံစားနတေယျ ။ အဖုတျအတှငျး ထဲမှာ လညျး ပူနှေးနှေး အထိ အတှေ့ က ဘယျအရာနှငျ့မြှ မတူသော အထိ အတှမြေို့း ။ ငါးမိနဈလောကျ ငွိမျနအေပီးမှာတော့ ဝါဝါက “ကိုကွီး ဆငျးတော့ကှာ ဝါ လေးလာပီ´´ မငျးဇျော ဘေးသို့ခန်ဒာကိုယျ ကို လှဲခလြိုကျသညျ ။ အဖုတျထဲ မှ လီးတံကွီးက ပလှတျ ကနဲမွညျသံ နဲ့ ကြှတျထှကျသှားတယျ ။ ဘေးမှာ ပကျလကျလနျလြှကျ အနအေထား ဖွဈသှားတော့ မှ ဝါဝါ စောငျးငဲ့ကွညျ့မိသညျ ။
လီးတံ ထိပျမှာ လဲ အရညျတှေ ရှဲစို ပွောငျလကျနသေညျ ။ ဝါဝါ အဖုတျကို လိုးပဈလိုကျတဲ့ လီးကွီး ဝါဝါ အခု မှ သသေခြောခြာ ကွညျ့မိသညျ ။ မနဲမနော ကွီး လှသညျ ။ ဒီလီး ကွီး အဖုတျထဲမှာ အဝငျအထှကျခြောမှတျနတောကို ဝါဝါ အံ့သွ မိတယျ ။ ဝါဝါ ကုတငျပျေါမှာ ဆငျးကာ ရခြေိုးခနျးမှာ သနျ့ရှငျးရသှေားလုပျဘို့ ပွငျလိုကျသညျ ။အခနျးထဲမှာ ရှိတဲ့ ရခြေိုးခနျးမှာပဲ ပဲ သနျ့စငျလိုကျတယျ ။ အဖုတျအား ရထေိလိုကျတော့ စပျဖဉျြးဖဉျြး ခံစားရသညျ။ သူမ အပြို မဟုတျတော့ ။ မှနျထဲမှ ဝါဝါ့ မကျြနှာ ကို ကွညျ့မိရငျး ဝမျးနညျးသလိုလိုလညျး ဖွဈမိသလို အထိအတှေ့ မှာ လညျး သာယာမိသညျ ။ ရခြေိုးခနျးမှ တဘကျအဖွူ ကွီးကို ကိုယျမှာ ပတျ ကာ အခနျးထဲ ပွနျဝငျလိုကျတော့ မငျးဇျောက မှေးနတေုနျး “ကိုကွီး ထတော့လေ ရခြေိုးတော့ ထမငျးပွငျထားလိုကျမယျနျော အတူတူ စားမယျ နလေ့ညျး ၁နာရီတောငျ ထိုးတော့မယျ ´´ ဝါဝါ က မငျးဇျော ကို လှုပျနှိုးလိုကျတယျ “အငျးးးး ´´ မငျးဇျော မကျြစိ ကို ဖှငျ့ကွညျ့လိုကျပီး “ဝါ အရမျးလှတာပဲ ခဈြတယျ ´´ လကျမောငျးလေး ကို အသာဆှဲယူကာ ပါးလေးအနမျးတဈခကျြ လှမျးပေးလိုကျတယျ ။ ဝါဝါ အခနျးထဲမှ အဝတျအစားမြား ကို ကောကျယူကာ ထှကျသှားတယျ ။ မငျးဇျောလညျး အိပျနရောမှ ထကာ ရခြေိုးခနျးထဲ ဝငျရငျး ရပေနျးအောကျမှာ ဆယျမိနဈလောကျရခြေိုးလိုကျတယျ ။
ထမငျးစားခနျးထဲကို ထှကျလာလိုကျတော့ ဝါဝါက ထမငျးစားပှဲ မှာ အသငျ့စောငျ့နတေယျ ။ “မိနျးမ ဘာဟငျးတှေ ခကျြထားတုနျး ခဈြလေး ´´ “ကိုကွီး နျော ဘာမိနျးမ လဲ မမကွီး သိသှားမှ ဟုတျပနေ့ျော အနအေထိုငျ ဆငျခွငျ ´´ “ကိုကွီး နဲ့ ဝါဝါ တူတူ နပေီးသှားပီ ဆိုတော့ ဝါဝါလညျး ကိုကွီး မိနျးမ ဖွဈသှားပီလေ´´ “သှားပါ လာ ဝါလညျး ဘိုကျဆာနပေီ စားတော့ ´´ ထမငျးစားရငျး တဈယောကျတလဲ ခှငျ့ကြှေးလိုကျကွသေးသညျ။ ဘာပဲ ဖွဈဖွဈ ဝါဝါ လညျး ပြျောပါတယျ ။ စိုးရိမျစိတျတော့ ရှိတာပေါ့ အခု လို အပြိုစငျ ဘ၀ ကို ပေးလိုကျရတာက တအိမျတညျးနတေဲ့ မိမိ ရဲ့ ခဲအိုလေ ။ ထမငျးစားပီး တော့ ဧညျ့ခနျးမှာ တီဗီ ထိုငျကွညျ့ကွတယျ ။ ဝမောလှိုငျက လေး နာရီလောကျမှ ပွနျရောကျမှာ ဆိုတော့ အေးအေးလူလူ ပဲ နဖွေဈတယျ ။ မငျးဇျောက နို့သီးလေးတှေ ကို ပှတျခပြေေးရငျး စကားတှေ ပွော ၊ ဝါဝါ ကလညျး မငျးဇျော ရငျခှငျထဲမှာ အသာ မှီထားတယျ ။
“ဝါ နာနသေေးလား ´´ မငျးဇျော က ဝါ့အဖုတျနရောလေး ကို ကိုငျကာမေးသညျ “အငျး သိပျတော့ မနာတော့ပါဘူး ခုန ကတော့ တအားနာတယျ ´´ “အငျးး နောကျဆို လုပျရငျးလုပျရငျး မနာတော့ဘူးလေ ´´ “ဟငျ ..ကိုကွီးက ခနခန လုပျမှာလား မမ သိသှားရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ´´ “မသိအောငျ လုပျမှာပေါ့ မမ ကြောငျးသှားတဲ့ အခြိနျ ဝါ အတနျးအားတဲ့ အခြိနျ တှမှောလုပျမယျနျော ´´ “ကိုကွီး ဝါလကွေောကျနတေယျ မမသိသှားရငျ ပွသနာပဲနျော ´´ “အငျး ပါ မသိစရေပါဘူး ဝါ တခါမှ အလိုးမခံဘူးသေးဘူးထငျတယျနျော ကွပျနတောပဲ ဝါ့ အဖုတျလေးက ´´ ဝါဝါ မကျြစောငျးလှလှ တခကျြထိုးရငျး မငျးဇျောပေါငျကို လကျသညျး နှငျ့ ဆိတျလိုကျကာ “ခုန က အတူတူ နပေေးတာ မသိဘူးလား လုပျဖူးလားမလုပျဖူးလား ဆိုတာ အခု ကိုကွီးက ပထမဆုံးပဲ ´´ “အငျး သိပါတယျ ဝါ့ ရဲ့ အပြို ရညျကို ယူလိုကျရလို့ ကိုကွီး အရမျးဝမျးသာတယျ အရငျကတညျး က ဝါ့ ဖငျကွီး တှကေို ကွညျ့ပီး လုပျခငျြနခေဲ့တာ ကွာပီ ခိုးခိုးကွညျ့နရေတာ ´´ “သှား ကိုကွီး မကောငျးဘူး တျောတျော ဆိုးတယျ ´´ လကျသညျးဖွငျ့ မငျးဇျော ရဲ့ လီးတံလေး ကို သာသာ လေး ပုဆိုးပျေါ မှ ဆှဲ ဆိတျလိုကျတယျ “အားးးး နာလိုကျတာ ´´ “သူကတြော့ နာတတျတယျ သူမြားကတြော့ တအားလုပျတယျ ထပျဆိတျဦးမယျ ရော့ ရော့ရော့ ´´
“အားးးး မလုပျနဲ့ အားးးနာတယျ နာတယျ ´´ ဝါဝါ့ လကျကိုဖမျးဆှဲ ရငျး ပုဆိုးကို ဖွလေိုကျကာ လီး တံ ကိုကွညျ့လိုကျတယျ လကျသညျး နဲ့ ဆိတျလိုကျကာမှ လီးတံ က ထောငျလာတယျ ။ “ဝါ လုပျလိုကျလို့ ခကျြခငျြး ထလာပီနျော ပီး မှ အဆိုး မဆို နဲ့ ´´ “ကိုကွီး နာသှားလား ´´ မငျးဇျော လီးတံ ကို လာကိုငျရငျး ဝါဝါ မေးလိုကျတယျ “မနာပါဘူး စတာပါ “ “ကိုကွီး လီးကွီးက အကွီးကွီးပဲနျော ´´ ရငျခှငျထဲမှ နေ၍ ဝါဝါ မငျးဇျော လီး ကို သခြော ကွညျ့မိလိုကျတယျ ။ ဒဈကွီး က လညျး ကားထှကျနတောပဲ လီးတံ ကွီးက သူမ လကျထဲမှာ အပွညျ့ ။ ခုနက တုနျးက ဒီလီးကွီး သူမ စောကျဖုတျထဲကို ဝငျသှားခဲ့တာ အံသွမိတယျ ။
ထိုငျနတောတောငျ လီးတံကွီး က အပျေါ ကို ထိုးထောငျ ထှကျနတေယျ ။ လီးတံပျေါမှာ အရပွေားလေးတှကေ ပြော့ပြော့လေး မို့ ဝါဝါ ဖွေးဖွေး လေး ဆှဲကွညျ့ရငျးဆော့ကစားကွညျ့လိုကျတယျ။ “အဲ့လို မဆှဲရဘူး ဝါ ရဲ့ လီးတံကို သခြောကိုငျဆုတျထားပီး အပျေါအောကျ ဆှဲရတယျ အပျေါ ကို ဆှဲလိုကျရငျ လီးဒဈ ကို အရပွေား က ဖုံးသှားအောငျဆှဲ ပီးရငျ အောကျကို ပွနျဆှဲခြ လီးဒဈ ပျေါ လာတဲ့ အထိ ဆှဲခြ အဲ့လို လုပျပေးရတယျ အဲ့ဒါ ကို ဂှငျးတိုကျတယျလို့ ချေါတယျ ´´
“အျော အျော … ယောကငြ်္ားတှေ ဂှငျး တိုကျတယျ ဆိုတာတော့ ကွားဖူးတယျ ဘယျလိုလုပျတာ လဲ မသိတာ အခု မှ သဘော ပေါကျတယျအဲ့လို လုပျတော့ ကောငျးလို့လားဟငျ ကိုကွီး ´´ “ကောငျးတာ ပေါ့ ဝါကလဲ ကိုကွီး တို့ စိတျထဲ ရှိတဲ့ မိနျးမ တဈယောကျ ကို မှနျးပီး အဲ့လို ရှတေို့း နောကျဆုတျ ဂှငျးတိုကျရငျး အဲ့ဒီမိနျးမ ကို လိုးရတယျလို့ မှနျးပီး လုပျတာ ကွာကွာလုပျလိုကျရငျ ခုနက ဝါ နဲ့ လိုးသလို ပဲ လီးရေ တှေ ပနျးထှကျသှားတာပေါ့ ´´ “အျော အဲ့လိုလားးးး ´´ “အငျး အခု ဝါ ကိုကွီး ကို အဲ့လို လုပျပေးကွညျ့လေ ´´ “အငျးးးလုပျပေးကွညျ့မယျနျော ´´ ဝါဝါ က မငျးဇျော လီး ကို ကိုငျကာ ရှေ့ တိုး နောကျဆုတျ သူမလကျကလေး နဲ့ ဂှငျးတိုကျပေးတော့တယျ ။
“အားးး ကောငျးတယျ ဝါရယျ အားးးး ဖွေးဖွေး အောကျထိ တအားကွီး မဆှဲ နဲ့ ´´ “အငျးးး ဒီလိုလားး´´ “အငျး ဟုတျတယျ ဖွေးဖွေး မှနျမှနျလေး အားးးဟုတျတယျ ´´ ကွာကွာ မသငျပေးလိုကျရ ဝါဝါ ဂှငျး သခြော တိုကျပေးတတျလာတယျ “ဝါ ဒီအတိုငျးကွီး ဆိုတော့ ပူတယျ နာတယျ တံတှေး လေး နဲနဲ လကျမှာ စှတျပီးလုပျ ´´ “အာ ကိုကွီးကလဲ ရှံ့စရာကွီး ´´ “ရှံ့ စရာ မဟုတျပါဘူး ဝါ ရဲ့ သူမြားတှေ ဆို လီးတောငျ စုပျပေးကွသေးတာပဲ ဝါ့ မမ ဆိုလညျး ကိုကွီး လီး ကို စုပျပေးတာပဲ ဝါ့ အဖုတျ ကို လညျး ကိုကွီး ယကျပေးတာပဲလေ ´´ “ဟငျ တကယျ ကိုကွီး လီးကွီး ကို မမ က စုပျပေးတယျပေါ့ ´´ “အငျး ပေါ့ မယုံလို့လား မယုံ ရငျ ညကြ ရငျ ကိုကွီး အခနျး တံခါးလေး ဟ ထားမယျ လာကွညျ့ ´´ “အာ ကွညျ့ရဲဘူး မမ သိသှားမှာ စိုးတယျ ´´ “မသိအောငျ တိတျတိတျလေး လာပေါ့ ကိုကွီး အခနျးမီး ဖှငျ့ပီး လုပျမယျ လာကွညျ့နျော ´´ “အငျးးး ´´ မငျးဇျော လီးကို ကိုငျကာ ဂှငျး ဆကျထုပေးလိုကျသညျ ။ “ကိုကွီး ဟာကွီးက တဖွညျးဖွညျး ပိုပို ကွီးလာသလိုပဲနျော မာတောငျ့တောငျ့ကွီး “ “အငျးး စုပျကွညျ့ပါလား ဝါ “ “ဟာ….. ကိုကွီးကလဲ ဝါမှ မစုပျတတျတာ “ “လာ ကိုကွီးသငျပေးမယျ ပေး ဝါ့လကျလေး “ မငျးဇျော က ဝါဝါ ရဲ့ လကျခြောငျးလေး ကို ဆှဲယူလိုကျပီး သူ့ ပါးစပျထဲ ထညျ့လိုကျတယျ ။ ပီးတော့ လြှာလေး နဲ့ပှတျလိုကျ စုပျပွလိုကျ လုပျပွလိုကျတယျ ။ လီးတံကို စုပျနတေဲ့ ပုံစံမြိုး ဝါဝါ့ လကျလေး ကို စုပျပေးလိုကျတယျ ။ “အဲ့လိုလေး စုပျ ရလား လုပျတတျလား “ “အငျး စမျးကွညျ့မယျလေ “ “အငျး .. လာ ထ ဝါ က အောကျကနေ ထိုငျ ကိုကွီး က ဆကျတီပျေါ မှာ ထိုငျပေးမယျ “ ဝါဝါ လညျး မငျးဇျော ရငျခှငျထဲမှ ဆငျးကာ အောကျမှာ ထိုငျလိုကျသညျ ။
မငျးဇျော လီးတံ နဲ့ ဝါဝါ နုတျခမျး နဲ့ တဈတနျး တညျး ဖွဈသှားတယျ ။ မငျးဇျော လီး ကို စုပျပေးဘို့ မဝံ့မရဲ ဖွဈနသေညျ ။ “ငုံ့ လိုကျလေ ဝါ “ “အငျးးးး …“ ခေါငျးလေး ငွိမျ့ပွလိုကျရငျး မငျးဇျော လဒဈခေါငျးကွီးအား ဝါဝါ နုတျခမျးလေး အသာဖှငျ့လိုကျကာ ငုံကွညျ့လိုကျသညျ “အားးး နှေးသှားတာပဲ ဝါ ရယျ ခုနက ကိုကွီး လုပျပွသလိုလေး စုပျကွညျ့လိုကျ “ ဝါဝါ က ခေါငျးလေး တဈခကျြ ငွိမျ့ပွလိုကျက လဒဈကို တပွှတျ ပွှတျ ဖွငျ့ စုပျကွညျ့လိုကျသညျ လီးဒဈ တဈဝိုကျကို လြှာဖြားလေး နဲ့ ရဈသပျ ပေးလိုကျသညျ “အားးးး ကောငျးတယျဝါ ဝါက တတျလှယျသားပဲ ကောငျးတယျ စုပျ လကျတဈဘကျက ကိုကွီး ဥတှကေို ကိုငျထား လီးတံ အရငျး ထိ ဆှဲ စုပျပေး အားးး ကောငျးတယျ “ သူမ စုပျပေးနတော ကို ကနြေပျကာ ကောငျးနသေညျကို တှလေို့ကျတော့ ဝါဝါ ပြျောသလိုလို ခံစားမိတယျ ဒီထကျကောငျးအောငျ စုပျပေးလိုကျပဈတယျ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အငျးးး အငျးးး ကောငျးတယျဝါ အားးးးရှီးးးးး “ အောကျကို ဝဲကနြတေဲ့ ဝါဝါ့ ဆံပငျတှေ ကို စုပီး ကိုငျပေးလိုကျကာ ဝါဝါ လီးစုပျနတောကို သခြောခြာ ကွညျ့လိုကျမိတယျ ။ လရဝေငျရငျ အသခေငျတယျ ။ မိနျးမ စကျပတျ တဈကွိမျ လီးဝငျ နောကျထပျ တဈသကျစားမကုနျ ။ ခယျမ ဆိုတာ လိုကျပှဲ ။ ဆိုတာလေးတှေ တှေးကွညျ့လိုကျတော့ လညျး ဟုတျသလိုလို ပဲ လို့ မငျးဇျော တှေးမိလိုကျတယျ ။
အကွိမျကွိမျ လိုးခငျြစိတျတှကေို ထိနျးခဲ့ရတာ ဒီနတေ့ော့ ခယျမလေး ဝါဝါ အလိုးခံရုံတငျမဟုတျ သူ့လီးကို အားရပါးရ စုပျပေးနပေီ ။ ဝါဝါ စုပျပေးနမှေ လီးတံ ကွီးကလညျး ပိုပို တောငျလာသလိုလို ရှိလာသညျ ။ “ကောငျးတယျဝါ …အားးး အောကျက ဥလေးတှကေို ပါ ယကျကွညျ့ “ ပါးစပျထဲ မှ လီးတံကို ခြှတျလိုကျပီး အောကျက ဥလေးတှကေို ယကျကွညျ့လိုကျသညျ ။ ပြော့စိစိလေး နဲ့ အသညျးယားစရာ ။ လြှာဖြားလေး နဲ့ အလြားလိုကျ ယကျကွညျ့သညျ ။ ဥလေးတှကေို ငုံစုပျကွညျ့သညျ “ပလကျ ပလကျ ပလကျ ပွှတျ “ “အားးးး “ “ကောငျးလား ကိုကွီး “ ဝါဝါက ခေါငျးလေး အသာမော့ပီး မေးလိုကျသညျ ။ “အရမျးကောငျးတယျ ဝါ … ဝါ့ အကြီတှေ ခြှတျလိုကျကှာ ကိုယျလုံးတီးလေး နဲ့ ကိုကွီး လီး စုပျနတောလေး ကွညျ့ခငျြတယျ “ ကိုယျပျေါက စှပျကယျြလေးကို ခြှတျလိုကျရငျး ပွောလိုကျသညျ “ကိုကွီး ခြှတျပေး ….“ “အငျးး… ထ “ ဝါဝါ ကို ဆှဲ ထူလိုကျပီး အကြီရော ထမိနျရော ခြှတျပေးလိုကျသညျ ။
ဝါဝါက နို့တှကေို လကျတဈဘကျနဲ့ ကာထားပီး နောကျလကျတဘကျက အဖုတျလေး ကို အုပျထားသညျ “လကျကွီး မကာထားပါနဲ့ ဝါရယျ “ “ရှကျတယျ “ “မရှကျပါနဲ့ ဝါ ရယျ ခန က ပဲ တခါ လိုးပီးသား ကို ဝါ့ ကို အခုလို ကိုယျလုံးတီးလေး နဲ့ စိတျထဲ မှာ ခနခန မွငျယောငျကွညျ့နခေဲ့တာ အခု လို မွငျရတော့ စိတျထဲ တှေးထားတာ ထကျတောငျ လှနသေေးတယျ “ “တကယျလားးး အာ့ ဆို ဝါ ကနြေပျတယျ …“ လကျလေးတှေ ကို ဖယျပေးလိုကျပီး မငျးဇျော နုတျခမျးလေး ကို ဝါဝါ လှမျး နမျးပေးလိုကျတယျ ။ နှဈယောကျသား မတျတပျရပျရငျး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျဖကျကာ အနမျးတှေ ဖလှယျလိုကျကွညျ ။ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ ထို့နောကျ မငျးဇျောက ဝါဝါ ရှမှေ့ာ ထိုငျခလြိုကျတော့ မငျးဇျောမကျြနှာနဲ့ ဝါဝါ အဖုတျက တဈတနျးတညျး ဖွဈသှားသညျ ။
တငျပါး နှဈဘကျကို လှမျးကိုငျကာ အဖုတျကို လြှာနဲ့ ယကျပေးလိုကျသညျ “အားးး ကိုကွီး ရယျ “ ပေါငျလေး အနညျးငယျ ကားလိုကျကာ မငျးဇျော ခေါငျးကို ကိုငျလိုကျရငျး အဖုတျလေး ကို ကော့ပေးလိုကျမိသညျ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အားးးး ရှီးးးး ကိုကွီးးးး “ “ပွှတျ ပွှတျ ပလကျ ပွှတျ “ “အားးး အမလေးးးး အားးးး“ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အ အ အ အ ကောငျးတယျကိုကွီး အ ဟူးးးးး အားးးး“ “ပွှတျွ ပှတျ ပွှတျ“ “အားးး ကိုကွီး အားး ခဈြတယျကှာ အားးးး“ မငျးဇျောက အဖုတျကို ယကျနရေငျးမှ ဝါဝါ့ ကို ကိုယျတဈပါတျ လှညျ့စလေိုကျကာ ဝါဝါ့ တငျပါးနှဈခွမျး ကို နရော အနှံ နမျးပေးလိုကျသညျ ။
ထို့နောကျ တငျပါး နှဈခွမျးကို ဖွဲလိုကျကာ တငျပါး နှဈခွမျးကွား လြာ အပွားလိုကျ ထညျ့ရငျး အထကျအောကျ ယကျပဈလိုကျသညျ “အားးး ကိုကွီး အာ့ ဖငျ …ဖငျကွီး အားးးး“ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ ဝါဝါ့ ဒူးတှေ မခိုငျခငျြသလို ဖွဈလာကာ ရှမှေ့ ဆကျတီ စားပှဲ ပျေါ လကျလှမျးထောကျလိုကျသညျမို့ မတျတပျရပျကာ ဖငျကုနျးပေးလိုကျသညျ့ အနေ အထားဖွဈသှားသညျ ။ ပေါငျကလညျး ပိုကား လာပီး နောကျမှ မငျးဇျောက တငျပါး နှဈခွမျးကွား အသားကုနျ ယကျပေးတော့သညျ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပလကျ ပလကျ ပွှတျ “ “အားးး ကိုကွီး ရယျ ခဈြတယျကှာ အားးးး“ ညိုတိုတို စအိုပေါကျလေးမှာ လညျး ပှစိပှစိဖွငျ့ မငျးဇျော ရဲ့ လြာအောကျ ရောကျနရေသညျ “အားးး ကိုကွီး တကျလိုးပါတော့ အားးး ဝါ မနတေတျတော့ဘူး အားးး အမလေးးးး “ “အငျးးး ဝါ အဲ့ဒီအတိုငျးနေ ခါးလေး နဲနဲခှကျထား ဆကျတီစားပှဲကို သခြောကိုငျထားနျော ကိုကွီး နောကျက နေ မတျတပျရပျပီး လိုးမယျ “ “အငျးးး ကိုကွီးးး “ မငျးဇျောလညျး ဝါဝါ နောကျမှ နရော ယူလိုကျပီး လီးတံကို အဖုတျ ၀ မှာ တလေို့ကျသညျ ။
အိမျရှေ့ ဧညျ့ခနျးမှာ တငျ နှဈယောကျသား ကိုယျလုံးတီး ခြှတျပီး ခယျမလေး ရဲ့ ဖငျကို ကကြ နန ကိုငျကာ အဖုတျထဲ လီး ထိုးသှငျးလိုကျသညျ အရညျတှေ ထှကျနတေယျ ဆိုပမေယျ့ အဖုတျထဲ လီးဝငျသှားသညျမှာ စီးစီးပိုငျပိုငျ ရှိလှသညျ ။ မန်တလေးထိုးမုနျ့ကို ရခေဲသတ်ေတာထဲ ထညျ့ထားပွီးမှ ကိုကျဝါးလိုကျသညျ့ပမာ အိစိစိ ဖွငျ့ သှားဖုံးမွုပျသှားသလို ခံစားလိုကျရသညျ ။ “အားးး ဝါ့ အဖုတျလေး က ကွပျကွပျလေး အီးးးး အားးးးး “ “အားးး ကောငျးတယျ ကိုကွီး ခုနက လိုးတာ ထကျကောငျးတယျ ဝါ ခံနိုငျတယျ ဆောငျ့ပေး“ “အငျ့ အငျ့ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ “ “ဗဈြ ဗဈြ ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ “ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ ရော့ ရော့ အားးးး “ မိနျးမ မရှိစဉျ အိမျမှာ ခယျမ နဲ့ ခဲအို ရဲ့ လိုးသံတှေ အျောသံတှကေ ဆူညံထှကျနသေညျ တငျပါးတှကေို ဖဈြညှဈလိုကျ နို့တှေ ကို လှမျးဆှဲလိုကျဖွငျ့ စညျးခကျြ ညီညီ ဆောငျ့လိုးပေးနလေိုကျသညျ ။ “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ “ “ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ “ “အအ အ အ အ အားးး ရှီးးး“ ခယျမလေး ကို ကိုယျလုံးတီး ခြှတျပီး လိုးနရေတဲ့ အရသာ ကွောငျ့ မငျးဇျောလီးက အပွတျအသတျ မာထနျနသေညျေ ။ “ဒုတျ ဒုတျ ဖုတျ ဖုတျ ဖတျ ဖတျ “ “အ အ အားးး ကောငျးတယျ အားးး ဆောငျ့ပါ အားးးး“ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ အငျ့ “ “အားးး အားးးးးးး အမလေးးးး “ အခကျြ နှဈဆယျကြျောလောကျ ထပျဆောငျ့လိုကျပီး လီးတံကို ခြှတျလိုကျသညျ ။
ထို့နောကျ ဝါဝါ့ကို ဆှဲ ထူလိုကျကာ မငျးဇျောရှမှေ့ာ ဒူးထောကျခိုငျးလိုကျပွနျသညျ ။ “ခဈြလေးး လီးစုပျပေးကှာ “ “အာ ကိုကွီး လီးမှာ အရညျတှေ နဲ့“ “ဝါ့ စောကျဖုတျက အရညျတှပေဲ ဘာလဲ ရှံလို့လား ကိုကွီး ဝါ့ အဖုတျကို ယကျတော့တောငျ အရညျတှေ ပသေေးတာပဲ ယကျပေးနျော “ မငျးဇျော ပွောလိုကျတော့လညျး ဟုတျသလိုလို ။ ဟုတျတယျ ကိုယျ့ အဖုတျက ထှကျတဲ့ အရညျ ဘာရှံ့ ရမှာလဲ လို့ စိတျထဲ တှေးလိုကျပီး မငျဇျော လီး ကို ဆှဲ စုပျပဈလိုကျသညျ ။ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အားးး ကောငျးတယျ ခဈြလေး ရယျ “ “အားးးး “ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “ကွိုကျလား ခဈြလေး “ “အု အု “ ခေါငျးလေးငွိမျ့ပီး ပွနျဖွသေညျ ။ ပါးစပျထဲ လီး ရောကျနသေညျမို အု ..အု ဖွငျ့သာ အသံထှကျလာသညျ ။ မငျးဇျောလညျး ဝါဝါ့ ခေါငျးလေးကို ကိုငျလိုကျပီး ပါးစပျထဲကို အဖုတျလိုးသလို ဖွေးဖွေးလေး အသှငျး အထုတျလုပျပေးလိုကျသညျ ။
“ပလှတျ ပလှတျ ပလှတျ ပလှတျ “ “အားးးရှီးးးး “ “အားးး ကောငျးလိုကျတာ ဝါ ရယျ “ “ပလှတျ ပလှတျ “ ပါးစပျထဲမှ လီးကို ဆှဲထုတျလိုကျပီး ဝါဝါက မော့ ကွညျ့ကာ “အသကျရှူကွပျလာပီ ကိုကွီး … “ မစေ့မှေ့ာ လရတှေရေော သှားရေ တှရေော ပကြေံနသေညျ ။ ဝါဝါ့ ကို ဆှဲထူလိုကျပီး နုတျခမျးလေး ကို အသာ စုပျနမျးလိုကျသညျ ။ ထို့နောကျ ဝါဝါ့ ပေါငျတဈခြောငျး ကို လကျတဈဘကျ ဖွငျ့ မလိုကျသညျ ။ ခွထေောကျတဈခြောငျးက ခပျကှေးကှေးလေး အပျေါသို့ ပါလာသလို နောကျတဈဘကျက ခွဖြေားလေး ထောကျလာသညျ ။ လကျတှကေ မငျးဇျော လညျဂုတျကို သိုငျးဖကျထားလြှကျသား ။ မငျးဇျော လညျး လီးတံကို အဖုတျထဲ ထိုးသှငျးလိုကျက လကျကို တငျပါးတှပေျေါ တငျထားလိုကျပီး ထိနျးပေးကာ မတျတပျလိုးသညျ့ အနအေထား ဖွဈအောငျလုပျကာ ဖွေးဖွေးခငျြး ညှောငျ့ပေးလိုကျသညျ “အားးး ကိုကွီးးး “ တငျပါးတှကေို ဖဈြညှဈပေးရငျး ဆောငျ့ဆောငျ့ လိုးပေးလိုကျသညျ “အငျ့ အငျ့အငျ့အငျ့ “ “အားးး ကောငျးတယျ ကိုကွီးရယျ “ မကျြလုံးလေး မှေးစငျးကာ မငျးဇျော နုတျခမျးတှကေိုမမှီ တမှီ လှမျးဆှဲစုပျသညျ ။
မတျတပျရပျလိုးတာ ကွာကွာတော့ မလိုးနိုငျ ဆယျမိနဈလောကျ နတေော့ ဒူးတှေ ညှတျခငျြလာသညျမို့ ဝါဝါက ကွမျးပွငျမှာ လေးဘကျကုနျးလိုကျပီး မငျးဇျောက နောကျမှ ဒူးထောကျ အနအေထားဖွငျ့ ဆကျလိုးသညျ ။ အပြိုဖွနျးလေး ဝါဝါ မှာ မငျးဇျောရဲ့ လီး အရသာ ကို တှရှေိ့သှားပီး ဖငျကွီးကို ထောငျနအေောငျ ကုနျးပေးရငျ အလိုးခံသညျ ။ မငျးဇျောကလညျး ဝါဝါ အဖုတျကို လိုးနရေငျးမှ ဖငျပေါကျလေးကို လညျး လကျမလေး ဖွငျ့ ပှတျပေးနသေဖွငျ့ ဝါဝါတဈယောကျ လူးလှိမျ့ ခံစားနရေသညျ ။ “ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ “ “အ အ အ အ အားးး“ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဖတျ ဖတျ “ “အားးးးး ကိုကွီး ဝါ ပီးတော့မယျ အရမျးကောငျးနပေီ ဆောငျ့လိုးပေး အ အ အားးးး“ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ “ “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ “ “အ အ အ အ အားးးးး “ အခကျြနှဈဆယျလောကျ ဆကျတိုကျ ဆောငျ့လိုးပေးလိုကျပီး ဝါဝါ့ဖငျကွီးတှကေို မငျးဇျောလီးတံ အဆုံး ဖိသှငျးကပျထားလိုကျကာ လရတှေဖွေောကနဲဖွောကနဲ ပနျးထုတျလိုကျလတေော့သညျ ။ ဝါဝါ အပျေါမှာ မငျးဇျောက ထပျလြှကျ ကွမျးပွငျပျေါ လဲကသြှားလသေညျ ။ မငျးဇျောလီးတံကွီးက ဝါဝါ့ ဖငျကွားထဲမှာ ကပျလြှကျ နှဈယောကျ အသကျရှူသံတှကေ မွနျဆနျနကွေပီး အတိုငျးသား ကွားနရေသညျ ။ အပြိုမလေး ဝါဝါ .. ခဲအိုဖွဈသူ အား ပနျးဦးခြှခှေငျ့ ပွုလိုကျသလို ခယျမလေးအား မယားငယျအဖွဈသို့ ဆှဲဆောငျနိုငျခဲ့သဖွငျ့ မငျးဇျော အကနြေပျကွီး ကနြေပျမိလသေညျ
နောကျရကျတှေ မှာ အလုပျတှလေညျး ရှုပျ ဝမောလှိုငျ လညျး မလဈ သညျမို့ ဝါဝါ နဲ့မငျးဇျော တှေ့ ဘို့ အဆငျမပွဖွေဈနခေဲ့သညျ ။ အိမျမှာ ဝမောလှိုငျ ရှိနခြေိနျတှမှော တဈယောကျနဲ့တဈယောကျစကားအပွောအဆိုက အစ ထိနျးထိနျးသိမျးသိမျးနဲ့ မရိပျမိအောငျ နနေေ ရသညျ ။ မကျြလုံးခငျြး ဆုံခြိနျမှာ ဝါဝါ ရဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြ မကျြဝနျးလေးတှေ ကို တှနေ့ရေသေးသညျ ။ တဈရကျတညျးသာ လိုးခဲ့ ပီး နောကျရကျတှေ တှေ့ ဘို့ အခှငျ့မသာသညျမို့ မခငျြ့မရဲ ဖွဈနရေသညျ ။ နီးလြှကျနဲ့ ဝေးနရေသညျ ။နလေ့ညျပိုငျးတှေ မှာလဲ မငျးဇျောက အလုပျရှုပျနသေညျမို့ အခွအေနေ မသာ ခဲ့ ။ ည ဘကျတှမှော တော့ ဝမောလှိုငျ နဲ့ပဲ တဈရကျကြျော တခါလောကျ လုပျဖွဈသညျ ။ သူတို့ လိုးနကွေသညျကို လညျး ဝါဝါ လာလာ ခြောငျးကွညျ့သညျ ။ တံခါးပိတျထားလြှငျ အပွငျမှာ လိုးသံတှကေို နားထောငျ နမေိသညျ ။ ဘယျနေ့ အခှငျ့သာမလဲ စောငျ့ဆိုငျး ရငျး ဝါဝါ တဈယောကျ မြှျောလငျ့ နမေိသညျ ။ ဒီလို နဲ့ သာ တဈပတျ ကြျောသှားသညျ ။ ဘာမှ မထူး ။ ကြောငျးမှာ စာသငျနလေညျး ဒီစိတျပဲ အမွဲ တောငျ့တ နမေိသညျ ။ ကြောငျးမှာ ဝါဝါ့ ကို လိုကျနတေဲ့ ကောငျလေး တှကေို လညျး အခု တလော ဘယျလို မှ စိတျထဲ မထားနိုငျ ။ ယခငျက ဆို သူ့ နောကျ လိုကျစကားပွောတဲ့ ကောငျလေးတှကေို ပွပွေပေဈြပဈြ ပွနျပွောတတျခဲ့ပမေယျ့ အခုတလော ရှောငျနမေိသညျ ။ မငျးဇျောကို ပဲ စိတျ ထဲ စှဲနမေိသညျ ။
ဒီနေ့ မနကျ ရှဈနာရီ အတနျး စ ခြိနျ ကတညျး စိတျထဲ မှာ မငျးဇျော အကွောငျးသာတှေး မိနတေယျ ။ ရှကေ့ တီခယျြ စာသငျနတော ကို လညျး စိတျမဝငျစား ။ စာသငျဘို့လညျး စိတျမပါတော့ သညျမို့ ကိုးနာရီလောကျကတြော့ အိမျပွနျမယျ စိတျကူးကာ အတနျး ထဲက ထှကျလာခဲ့လိုကျသညျ ။ အတနျးအပွငျရောကျတော့ လှယျအိတျထဲမှ ဟနျးဖုနျးလေး ထုတျကွညျ့လိုကျမိတော့ မှ စိတျလှုပျရှားသှားရသညျ ။ ကိုကွီး မငျးဇျော ထံမှ miss call တှေ အမြားကွီး ဝငျထားသညျ ။ ခုနက ဖုနျး အသံ ပိတျထားသညျမို့ မသိလိုကျ ။ စိတျလှုပျရှားမှု နဲ့ အတူ ခကျြခငျြး ဖုနျးပွနျချေါလိုကျသညျ ။ ဖုနျးက တျောတျော နဲ့ မဝငျ ။ “လူကွီးမငျးချေါဆိုသော ဖုနျးမှာ မအား သေးပါ သဖွငျ့ “ နဲ့ခညျြး တိုးနသေညျ ။
ဆကျတိုကျ ပွနျချေါနရေငျး “တူးးးးးးးးး တူးးးးးးးးး “ “ဟဲလို ဝါလား “ “ဟုတျ ကိုကွီး “ “ဝါ ကိုကွီး ဒီနေ့ အားတယျ ဝါ ကော အားလား အပွငျမှာ တှမေ့ယျ ကြောငျးကို လာချေါမယျ အတနျး ဖကျြခဲ့လို့ရမလား “ “အခု ပဲ ကိုကွီး ကို လှမျးနတော စာထဲ စိတျမပါတာ နဲ့ အိမျပွနျမယျဆိုပီး နမေကောငျးဘူး အကွောငျးပွပီး အတနျးထဲက ထှကျလာတာ ပြျောလိုကျတာ ကိုကွီးရယျ ဝါ လညျး သတိရနတော “ “ဒါဆို ကိုကွီး ခန နေ လာချေါမယျနျော ကြောငျး နားမှာ စောငျ့နေ“ “ဟုတျ ကိုကွီး ခဈြတယျ စောငျ့နမေယျနျော မကွာနဲ့ “ “အငျးပါ ခဈြလေးရဲ့ မကွာဘူး ဒါပဲနျော အာဘှား… ခဈြတယျ “ “ဟုတျ ကိုကွီး အာဘှား “ “တူ တူ တူ တူ “ တဈဘကျက မငျးဇျော ဖုနျးခသြှားသညျ အထိ နားနဲ့ ကပျပီး နားထောငျနမေိသေးတယျ ။ ဝါဝါ ပြျောသှားသညျ ။ ခုနကလို မှိုငျတိုငျတိုငျ မဟုတျတော့ ပြျောရှငျ သှကျလကျကာ ကြောငျးအပွငျသို့ လှမျးထှကျလာလိုကျသညျ ။ ကြောငျးအပွငျ ခရပေငျနားမှ အုတျခုံလေးမှာ ထိုငျလိုကျရငျး လှယျအိတျထဲမှ နုတျခမျနီဘူးလေး ထုတျကာ ဆိုးလိုကျသေးသညျ ။
အိပျဆောငျမှနျလေး ဖွငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကွညျ့ရငျး ဆံပငျတှကေို လညျး သပျရပျစှာ ပွငျဆငျလိုကျသေးသညျ ။ သိပျမကွာလိုကျပါ မငျးဇျော ရဲ့ ကားလေး ဝါဝါ့ ရှေ့ ထိုးစိုကျလာသညျမို့ ကားပျေါ ခကျြခငျြး တကျခဲ့လိုကျသညျ ။ ကားပျေါသို့ ဝါဝါ ရောကျလာသညျ နှငျ့ ဝါဝါ့ လကျကလေး ကို မငျးဇျောက လှမျးဆှဲ ကိုငျလိုကျပီး “လှမျးလိုကျတာ ဝါ ရယျ နီးလြှကျနဲ့ ဝေးနရေတယျ ဒီနေ့ ကိုကွီး အလုပျတှေ တမငျ ဖကျြခဲ့ပီး ဝါ့ ဆီ ဖုနျးဆကျနတော ဝါက ဖုနျးမကိုငျတော့ စိတျထဲ တမြိုးကွီး ဖွဈနတေယျ “ “စာသငျနလေို့ ဖုနျးပိတျထားတာကိုကွီးရဲ့ ဝါလညျး သတိရနတောပါ ကဲပါ တဈနရော သှားလေ “ “ကိုကွီး ဟျောတယျ ဘိုကငျယူထားတယျ ဒီနေ့ တဈနလေုံ့း နမေယျ စိတျကူးထားတယျ “ “ဟုတျကိုကွီး မောငျးလေ “ ကားလေး ကြောငျးရှမှေ့ မောငျးထှကျလာလိုကျသညျ ။
“ဝါ …“ “ရှငျ … ကိုကွီး “ “ခဈြရဲ့လား “ “ကိုကွီးကလဲ ခဈြတာပေါ့လို့ “ “နဦေးဝါ မေးစရာရှိသေးတယျ ဝါတို့ မိနျးကလေး အဝတျအထညျဆိုငျ ကောငျးကောငျး တဈနရော လမျးညှနျပေး“ “ဘာလုပျမလို့လဲ ကိုကွီးကလဲ “ “ဝါ့ အမ ဝေ နဲ့ ကိုကွီး လိုးတဲ့ အခါ သူ့ကို ကြောငျးဆရာမ ဝတျစုံလေး ဝတျခိုငျးပီး ခနခန လိုးဖွဈတယျ အခု ဝါ့ ကို ကတြော့ စိတျထဲ အခွားဝတျစုံတဈခု နဲ့ အာသီသ ရှိနတေယျ “ “ဟငျ .. ဝါ က ဘယျလို ဝတျရမှာလဲ “ “ဘဈကနီလေး နဲ့ မွငျခငျြတယျ အောကျခံပငျတီလေးကို တဈခြောငျးကွိုး ဂြီစတငျးလေး နဲ့ ဝတျရမယျ “ “အျော … အဲ့လိုလား ဝတျပွမယျလေ *** လမျးထိပျနားက *** ဆိုငျကိုမောငျး “ “အငျးးး ကားဒကျရှဘုတျထဲမှာ ကိုယျကွီး ပိုကျဆံအိတျရှိတယျ ယူသှား နှဈစုံလောကျ ဝယျခဲ့ “ “ဟုတျ … “ “အနီတဈစုံ အမဲ တဈစုံ ဝယျလာခဲ့နျော “ “ဟုတျကဲ့ ပါ ရှငျ … “ ဝါဝါ လမျးညှနျပေးသော ဆိုငျရှေ့ ရောကျတော့ ကားရပျပေးလိုကျပီး ကားပျေါကပဲ စောငျ့နလေိုကျသညျ ။ ဆယျမိနဈလောကျနတေော့ အထုတျကလေး ဆှဲပီး ဝါဝါ ပွနျထှကျလာကာ ကားပျေါ တကျလိုကျသညျ ။
ကားပျေါရောကျတော့ အထုတျကလေး ကို လကျနဲ့ မွှောကျပွလိုကပီး “ အနီအနကျ နှဈစုံဝယျလာတယျ အဆဈ အနနေဲ့ ဇာစတျောကငျလေး နှဈထညျပါ ဝယျလာတယျနျော ကိုကွီး “ “ဟုတျလား မိုကျတာပေါ့ “ ပါးလေး ကို သာသာလေး လိမျဆှဲလိုကျပီး ကားကို ဆကျမောငျးလာကာ ဘိုကငျ ယူထားသော ဟျောတယျ သို့ ရောကျလာခဲ့တော့သညျ ။ ဟျောတယျ အခနျး သော့ယူကာ ပိုကျဆံရှငျးပီး ဝါဝါ့ ပုခုံးလေး ကို ဖကျကာ အခနျးရှိရာသို့ တကျလာခဲ့လသေညျ ။
အခနျးထဲ ရောကျတာနဲ့ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျဖကျကာ အနမျးတှေ ဆကျတိုကျပေးကွသညျ ။ ငါးမိနဈကြျောကြျောလောကျ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ နမျးနရေငျးမှ နှဈယောကျသား ခှာလိုကျသညျ ။ ထို့နောကျ ဝါဝါက ရခေဲသတ်ေတာထဲမှာ ဘီယာပုလငျးလေး ထုတျပေးလိုကျပီး “ကဲ ကိုကွီး ဘီယာသောကျရငျး ထိုငျစောငျ့ အဝတျအစားလဲလိုကျဦးမယျနျော “ “အိုခေ ပါ ခဈြလေးးး “ ခုနက ဝယျလာသော အထုတျလေး ယူကာ ရခြေိုးခနျးထဲ ဝငျသှားလသေညျ ။ မငျးဇျောလညျး ဘီယာသောကျလိုကျရငျး တီဗီ ကို ဖှငျ့ကာ လိုငျးပွောငျးလိုကျသညျ ။ ဒီဟျောတယျမှာ မငျးဇျော ခနခန တညျးဖူးနကြေ ။
ရှငျးရှငျး ပွောရလြှငျ ကတေီဗီ က စျောလနျးလနျးလေးတှေ ဘာတှေ ကို တခါတခါ ညှို့ပီး ဒီဟျောတယျ မှာ တညျးနကြေ ။ ဟျောတယျ ရဲ့ တီဗီ လိုငျးထဲမှာ အောကား ပွတဲ့ မူဗီ လိုငျး တဈခု ဖှငျ့ပေးထားသညျ ။ အောကားမူဗီလိုငျး သို့ ခြိနျလိုကျတော့ ဂပြနျ အောကား ပွနသေညျ ကို တှလေို့ကျသညျ ။ အသံ ကို တိုးထားလိုကျရငျး စီးကရကျလေး ခဲရငျး ဘီယာသောကျကာ ထိုငျစောငျ့နလေိုကျသညျ ။ မကွာပါ ရခြေိုးခနျး တံခါးလေး ပှငျ့သှားပီး အထဲမှ ဝါဝါ ထှကျလာသညျ ။
“အိုးးးးး မိုကျတယျ ခဈြရယျ “ ဝါဝါက ရှကျပွုံးလေး ပွုံးလိုကျရငျး “လှ လား ကိုကွီး “ “အငျးး အရမျးလှတယျ “ အနီရောငျ ဘရာဆီယာ အနီရောငျ ကွိုးတဈခြောငျးဂြီစတငျးလေး နှငျ့ အောကျမှ ခွထေောကျမှာတော့ အနကျရောငျ ဇာ စတျောကငျလေး ဝတျထားပီး အင်ျဂလိပျအောကားတှေ ထဲ မှ ဆျောတှေ ဝတျထားသလိုမြိုးလေး ဖွဈကာ လှပနသေညျ ။ ဝါဝါ က ကိုယျကို တဈပတျ နှဈပတျ လှညျ့ပွလိုကျသေးသညျ “တကယျ့ ဆကျဆီပဲ ခဈြလေး ရယျ “ မငျးဇျော ထိုငျနရောသို့ ကွှကွှရှရှ လမျးလြောကျလာကာ မငျးဇျောပျေါသို့ ခှထိုငျလိုကျသညျ ။ ထို့နောကျ မငျးဇျော လကျထဲ မှ သောကျလကျစ စီးကရကျလေး ကို လှမျးယူလိုကျကာ မငျးဇျော နုတျခမျးမှာ တပေ့ေးလိုကျသညျ ။ မငျးဇျောကလညျး စီးကရကျကို ရှိုကျဖှာလိုကျကာ မီးခိုးတှကေို ဝါဝါ့ ရငျဘကျဆီသို့ မှုတျထုတျပေးလိုကျသညျ “ဖူးးးးးးးးးးး “ “ဒီနေ့ ကိုကွီး စိတျကွိုကျ ဝါ့ ကို ခဈြပေး ကိုကွီးခဈြသလောကျ ဝါ အခဈြခံမယျနျော “ “ဒီနမှေ့ မဟုတျဘူး နောငျအခြိနျတှလေညျး ခဈြပေးမှာပေါ့ ဝါ ယောကငြ်္ား မယူနဲ့ ကိုကွီး တို့ နဲ့ပဲနေ ဝေ မသိအောငျ ဝါ့ ကို တဈသကျလုံးခိုးခဈြပေးမယျ “ “ဟှနျးးးး ပွောတာပဲ တဈပတျတောငျကြျောပီ အိမျမှာ ဝါ့ နားတောငျ မကပျပဲနဲ့မြား “ “ဝေ ရိပျမိသှားမှာ စိုးလို့ပါ ခဈြရဲ့ ကိုယျ့ခယျမလေး ကို ခဈြပေးခငျြတာပေါ့ အမြားကွီး ခဈြခငျြတာပေါ့ ဒီမှာ ကွညျ့ပါလာ လီးတောငျနပေီ “ “ဟုတျ ဝါ့ ကို တော့ မမေ့ထား ပါနဲ့နျော “ “မမပေ့ါဘူး ခဈြလေး ရယျ “ “ဝါ ကိုကွီး ကိုခဈြတယျ “ ဝါဝါ့ နုတျခမျးလေး ကို စှဲ စုပျလိုကျရငျး လကျတှကေ တငျပါးပျေါ ဖဈြညှဈလိုကျတယျ ။
တဈခြောငျးကွီး ဘောငျးဘီလေး ဝတျထားတာမို့ တငျပါးတှကေ အတိုငျးသား ။ ဖငျနှဈခွမျးကွားထဲမှာ ကွိုးလေးက မွုပျနသေညျ ။ “မနကျဖွနျ ကြောငျးသှားရငျ ဒီ ဒီလိုလေးပဲ အတှငျးက ဝတျသှား ဝတျထားလား မဝတျထားလား ကြောငျးသှားခါနီး ဝေ့ အလဈမှာ စမျးကွညျ့မှာနျော “ “အငျးပါ ကိုကွီးရဲ့ ကိုကွီး ဝတျစခေငျြရငျ ဝတျသှားမှာပေါ့ “ “ကဲ ကိုကွီး ကို ဖငျလေး လှုပျပီး လမျးလြောကျပွပါဦး မျောဒယျလေး လိုပေါ့ “ “လြောကျပွမှာပေါ့ “ မငျးဇျော ပျေါမှ ဆငျးလိုကျကာ တငျပါးလေး လှုပျပီး လမျးလြောကျပွသညျ ။ အပြို မို့ ဘိုကျသားလေးတှကေလညျး ခပျြရပျနသေညျ ။ မငျးဇျောက သူ့ အဝတျအစားတှေ ကို ခြှတျပဈလိုကျပီး လီးတံကို ဂှငျးထုရငျး ဝါဝါ့ရဲ့ အလှတှကေို ခံစားနသေညျ ။ စောကျဖုတျ နရောတှငျ တွိဂံ လေးသာ ဖုံးနပေီး တငျပါးနရောမှာတော့ ကွိုးလေး သာ နရောယူထားသညျမို့ ဝါဝါ့ရဲ့ အလှအပတှကေ ပျေါလှငျလှနျးလှနသေညျ ။ ရငျသား ထှားထှားတှမှောလဲ ဘရာဇီယာ အတှငျးမှ လြှံထှကျကတြော့မလား ထငျရသညျ ။ ဝါဝါ့ ထံသို့ လြောကျသှားလိုကျပီး တငျပါးလေး ကို ကိုငျလိုကျသညျ ။ ဝမောလှိုငျကို ဆရာမ ဝတျစုံလေး နဲ့ လိုးခဲ့သလို ဝါဝါ့ ကိုတော့ ဘဈကနီလေး နဲ့ လိုးမညျ ။ ဝါဝါ့ ကို နောကျမှ သိုငျးဖကျလိုကျပီး လကျတှကေ ရငျသားတှကေို ကိုငျလိုကျကာ နောကျမှ ဖငျကွားထဲတှငျ လီး တံ ကို အမွှောငျးလိုကျ ကပျထားလိုကျသညျ ။
လညျဂုတျသားလေးကို “ပွှတျ “ကနဲနမျးစုပျလိုကျပီး “ခဈြ … ကုတငျပျေါ တကျပီး ဒီဘကျလှညျ့ လေးဘကျကုနျးလိုကျ “ ဝါဝါ ကလညျး မငျးဇျော ခိုငျးသမြှ တသှမေတိမျး လိုကျလုပျသညျ ။ ကာမဆန်ဒတှေ တကျကွှနသေညျမို့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ အပြိုလေး ဆိုတာကိုပငျမနေ့သေလိုပငျ ။ မငျးဇျောက ဝါဝါကုနျးနတေဲ့ ရှမှေ့ာ ရပျလိုကျတော့ လီးတံနဲ့ ဝါဝါ့ မကျြနှာ နဲ့ က တဈတနျးတညျး ဖွဈသှားတယျ ။ ခေါငျးလေး မော့လာတဲ့ ဝါဝါ့ မကျြနှာရှမှေ့ာ မငျးဇျောလီးကွီး တရမျးရမျးလှုပျခါနတေယျ ။ လီးဒဈဖြားလေး ကို နုတျခမျး ၀ မှ တပေ့ေးလိုကျတာနဲ့ နုတျခမျးဖူးလေးက ပှငျ့အာလာပီး ဒဈဖြားလေးကို ငုံစုပျလိုကျတယျ “ပွှတျ ပွှတျ “ “အားးးး “ ဒဈဖြားကို လြာနဲ့ရဈသပျကာ ဖငျကုနျးပီး စုပျတော့သညျ ။ “အားးး ကိုကွီး ခယျမလေး က ဘယျဆိုးလို့လဲ တဈခါပဲ အတှေ့ အကွုံရှိသေးပမေယျ့ စုပျတတျလာပီ အားးး ကောငျးတယျ “ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ ဖငျသားလေး ကို လှမျး ပှတျပေးလိုကျရငျး လကျဖဝါးလေး နဲ့ စပျကနဲ ရိုကျလိုကျတယျ “ဖနျးးး “ “အု ……“ ဖငျလေးကော့သှားပီး လူကရှသေို့ တိုးလိုကျသလို ဖွဈသှားတာမို့ လီးတံကလညျး ပါးစပျထဲ တိုးဝငျလာတယျ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “နောကျ တခါ အလိုးခံရငျလညျး အခုလိုပဲ ဝတျပီး အလိုးခံရမယျနျော “ ဝါဝါ လီးစုပျရငျး ခေါငျးငွိမျ့ပွသညျ ။
ဂြီစတငျး ကွိုးလေးကို လှမျးဆှဲလိုကျပီး ကွိုးကို လြော့လိုကျတငျးလိုကျလုပျပေးလိုကျတော့ ဖငျပေါကျနရောလေးကို ကွိုးလေးက ပှတျပေးနသေလိုဖွဈသှားတာမို့ ဖငျလေး ကော့ကော့ တတျလာသညျ ။ ဝါဝါ့ စိတျထဲ တှငျ အမဖွဈသူ ဝမောလှိုငျ လီးစုပျနသေညျကို မွငျယောငျမိကာ စိတျတှေ ပိုမိုကွှတကျလာပီး မငျးဇျောလီးကို အဆကျမပွတျ စုပျပေးနမေိသညျ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အားးး ကောငျးတယျကှာ “ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အားးး ကောငျးလိုကျတာ ဝါ ရယျ ဝါတို့ ညီအမနှဈယောကျလုံး လီးစုပျတာ ကောငျးတယျ “ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပလကျ အု အု အု ပွှတျ “ “လီးကွိုကျလား ခဈြလေး “ ပါးစပျမအားသဖွငျ့ မေးသမြှ ခေါငျးပဲ ငွိမျ့ ပွနမေိသညျ ။ ပါးစပျထဲ မှ လီးတံ ကို ဆှဲခြှတျလိုကျတော့ ဝါဝါ့ မေးစမှေ့ာ အရညျတှေ ရှဲနဈနသေညျ “ခဈြလေး ဟိုဘကျလှညျ့လိုကျ “ လေးဘကျထောကျရငျး ဖငျကိုမငျးဇျောဘကျကိုလှညျ့ကာ ကုနျးထားလိုကျသညျ ။
မငျးဇျောက ဒူးထောကျလိုကျပီး ဝါဝါ့ တငျပါးတှေ အနှံ့ လြာနဲ့ လိုကျယကျသညျ ။ “အားးးး ရှီးးးး“ “ပလကျ ပလကျ ပလကျ ပွှတျ “ ထို့နောကျ ဖငျကွားထဲမှ ကွိုးလေးကို ဘေးသို့ ဆှဲဖယျလိုကျကာ စအိုပေါကျလေးကို လြာနဲ့ အပွားလိုကျယကျပေးလိုကျသညျ ။ စအိုပေါကျမှာ အေးခနဲ ခံစားလိုကျရသညျမို့ အတှထေူ့း တဈခု ရရှိလိုကျပီး ဖငျလေး ကော့တကျသှားသညျ “အားးး ကိုကွီးးး အီးးး ဟငျ့ အငျ့ အငျးးးး“ “ပလကျ ပလကျ ပလကျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အားးး ကိုကွီးရေ အားးးး “ “ဝါ ရှကေ့ တီဗီမှာတှလေ့ညျး ဂပြနျမလေး ဖငျအယကျခံနတော အခု ဝါ့ ကို အဲ့လို လုပျပေးနတေယျ ကောငျးလား ခေါငျးလေးထောငျကာ ရှကေ့ တီဗီ ကို လှမျးကွညျ့မိတော့ တီဗီထဲမှ ဂပြနျမလေး ကလညျး ဖငျလေး ကုနျးပီး အယကျခံနသေညျ ကို တှလေို့ကျရသညျ ။ “ပလှတျ ပလှတျ ပလကျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အားးးကိုကွီးးး အားးးးရှီးးး အမလေးးးး အားးး လားးလားးး “ “ပလကျ ပလကျ ပွှတျ “ “အားးး ကိုကွီး ရယျ လိုးပါတော့ မခံစားနိုငျတော့ဘူး အားးး“ “ပွှတျွ ပှတျ “ “ကဲ လိုးတော့မယျ အခဈြလေး ဖငျကော့ထား ခါးလေး ခှကျထား အငျးးး ဟုတျတယျ အဲ့လိုမြိုးးး “ ပငျတီကွိုးလေးကို ဘေးသို့ ဆှဲဖယျလိုကျပီး လီးတံ ကို အဖုတျမှာ တလေို့ကျသညျ ။ ဖွဈနိုငျရငျတော့ ခုနက ယကျပေးထားတဲ့ စအိုပေါကျလေးကို ပါကငျဖှငျ့လိုကျခငျြတာ ။ဝါဝါ ကွောကျသှားမညျစိုးတာကွောငျ့ အဖုတျမှာပဲ လီးတပျလိုကျသညျ ။ မိမိလကျခုပျထဲက ရေ ဖွဈနသေညျမို့ ဘယျအခြိနျ ဖွဈဖွဈ ဖှငျ့လို့ရနပေီမို့ နောကျတခါမှ ဖငျခမြညျ စိတျကူးလိုကျသညျ ။
“ထညျ့ပီနျော ဝါ “ “အငျးးးး “ “ဘှတျ …. ပလှတျ “ “အားးးးးး ဝငျသှားပီ ကိုကွီးးး အားးး အ အမလေးးးး ကောငျးလိုကျတာ “ “အှနျ့ အှနျ့ အှနျ့ ဝါ့ စောကျပတျကို ကိုကွီးလီးနဲ့လိုးနပေီ အားးး ကောငျးလိုကျတာ ညီမလေးးး အားး အခဈြလေး အားးး အငျ့ အငျ့ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ “ “အားး ကွိုကျတယျကိုကွီးးး လိုးပါ ဝါ့ အဖုတျကို လိုးပါ ကိုကွီး ခဈြတယျ အားးး ကိုကွီး စိတျကွိုကျ ဝါ့ အဖုတျ ပွဲတဲ့ အထိ လိုးကှာ အားးး အမလေးးး “ “ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ “ လကျတဈဘကျကလညျး ကဈြကဈြလဈလဈ လုံးလုံးဝနျးဝနျး နို့အုံလေး ကို လှမျးခလြေိုကျသေးသညျ “အားးး ကိုကွီးရယျ ကောငျးလိုကျတာ “ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ “ “ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ “ “အားးး အီးးး အားးး အမလေးးး “ “ဖှတျ ဖှတျ ဘှတျ ဖှတျ “ “အားးး အခဈြလေး ထလိုကျ နံရံမှာ လကျထောကျပီး ဖငျကော့ပေး ဘရာဇီယာတှေ ဘောငျးဘီတှေ ခြှတျလိုကျ “ “အငျး ကိုကွီး “ ဝါဝါ လညျး မတျတပျရပျကာ ဘရာဇီယာ နဲ့ ပငျတီ ကို ခြှတျလိုကျပီး အခနျး နံရံမှာ လကျထောကျပီး ဖငျကော့ပေးလိုကျသညျ ။ မငျးဇျောလညျး နောကျမှ နရော ယူပီး နို့ အုံတှကေို ဆှဲကိုငျက ဆောငျ့လိုးတော့သညျ “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ “ “အားးး ထိတယျ ကိုကွီးရယျ အားးး“ “ကိုကွီးလီး ကွိုကျလား အငျ့အငျ့ အငျ့“ “အားး ကွိုကျတယျ လိုး အားး မညှာနဲ့တော့ကှာ ဆောငျ့လိုးပေး“ “အငျ့ကှာ အငျ့ အငျ့ အငျ့ကှာ ရော့ အငျ့ “ “ဘှတျ ဖှတျ ဖှတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ “ “ဖုတျ ဖုတျ ဖုတျ ဖုတျ “ အခကျြလေးငါးဆယျ ဆောငျ့လိုးပေးလိုကျပီး ညှောငျးလာတာနဲ့ “ဝါ ထိုငျလိုကျ လီးစုပျဦး “ ဝါဝါလညျး မငျးဇျောဘကျကို လှညျ့ပီး ဒူးထောကျထိုငျလိုကျတယျ ။
အို … မငျးဇျောလီးမှာ အရညျတှေ ရှဲနဈနတေယျ ဖွူပဈြပဈြ အရညျတှေ ဒါ… သူမစောကျဖုတျမှ အရညျတှပေေါ့ အားးး “ပလှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ ဝါဝါ အရညျတှေ စိုနတေဲ့ လီးတံကွီးကို စုပျပေးလိုကျတယျ “အားးး ကောငျးတယျကှာ “ “ပလကျ ပလကျ ပွှတျ “ “ဝါ .. လြာထုတျစမျး လီးနဲ့ လြာ ကို ရိုကျပေးမယျ “ “အငျးးး “ ဝါဝါ လြာလေး ထုတျပေးလိုကျတော့ မငျးဇျောက လီးတံကို ကိုငျပီး ဝါဝါ့ လြာ ကို တဖတျဖတျ နဲ့ရိုကျသညျ ။ ပါးနှဈဘကျကိုလညျး လီးတံနဲ့ ဘယျပွနျညာပွနျ ရိုကျလိုကျသေးသညျ “ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ “ “အားးး ရှီးးးး “ “လရသေောကျခငျြလား ဝါ “ မငျးဇျော အပွောကွောငျ့ သူ့အမဝမောလှိုငျ လရတှေေ မြိုခခြဲ့သညျကို ပွနျမွငျယောငျသှားပီး ခေါငျးငွိမျ့ပွလိုကျသညျ “ပါးစပျ ဟ ထား ဝါ ကိုကွီး ဂှငျးထုပီး လရေ ထညျ့ပေးမယျ “ “အငျးးး “ ပါးစပျ ဟထားသော ဝါဝါ့ ရှမှေ့ာ မငျးဇျော သူ့လီးသူ ကိုငျပီး အဆကျမပွတျ ဂှငျးထုလိုကျသညျ “အ အ အ အ အ “ “အငျးးး အားးး ရှီးးးး အားးးး “ လြာလေးထုတျကာ ပါးစပျလေး ဟ ပီး မငျးဇျော ဂှငျးထုနတော ကို ကွညျ့နလေိုကျသညျ “အ အားးအားး ထှကျတော့မယျ ဝါ အားးးး“ “အငျးးး အငျးးး အားးး“ “ဗဈြ ဗဈြ ဗဈြ ဗဈြ ဗဈြ “ “အားးး ရှီးးးး အားးးဟားးးးးးး“ မငျးဇျောလီးထိပျမှ ဖွူပဈြပဈြလရတှေေ ဝါဝါ့ ပါးစပျအတှငျးသို့ တဖြောဖြော ပနျးထုတျပဈလိုကျသညျ “အားးး ကောငျးတယျကှာ “ ပါးစပျထဲ ဝငျလာတဲ့ လရတှေကေို မြိုခလြိုကျပီး လီးထိပျမှာ ကပျကနျြနတေဲ့ လရတှေကေိုပါ လီးတံကို ကိုငျပီး စုပျယကျပေးလိုကျသညျ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “ကောငျးလား ဝါ ကွိုကျလား “ “အငျးး ကွိုကျတယျ “ “မရှံ့ဘူးလား “ “ရှံ့ပါဘူး ကိုယျ့ယောကငြ်္ား လရပေဲ ဟုတျဘူးလား ယောကငြ်္ားးး“ “ဒါပေါ့ ဝါဝါက ကိုကွီး အလိုးခံပီးပီ ဆိုတော့ ကိုယျ့ မိနျးမပေါ့ ကိုကွီးက ဝါ့ယောကငြ်္ားပေါ့နေျာ့ ခဈြမိနျးမလေး “ “ဟုတျ ယောကငြ်္ား“ “ရော့ ဒီမှာ ကနျြသေးတယျ စုပျလိုကျဦး “ ဆိုပီး မငျးဇျော လကျမှာ ပကြေံနတေဲ့ လရတှေကေိုပါ ယကျစရေနျ လကျခြောငျးလေးတှကေို ဝါဝါ့ ပါးစပျထဲ ထိုးထညျ့ပေးလိုကျတော့ လကျက လရတှေကေို ပါ တပွှတျပွှတျ နဲ့ စုပျပီး မြိုခလြိုကျတော့သညျ ။ ဟျောတယျမှာ တဈနလေုံ့း သောငျးကနျြးကွပီး ညနစေောငျးမှ ပွနျထှကျလာသညျ ။
ဟျောတယျ ရှေ့ ရောကျတော့ ရုံးမှ မနျနဂြော လငျမယားနှငျ့ ဆုံဖွဈအောငျ ဆုံလိုကျသေးသညျ “ဟာ ညီလေး ဘယျလာတာတုနျး ဒါ ညီလေး အမြိုးသမီးလား “ “အျော … ဟို ဟို ဒီနားပါ ဒါက ကြှနျနေျာ့ အမြိုးသမီး ညီမ ပါ သူ့ သူငယျခငျြး ဆီ လာတှေ့ ခငျြတယျ ဆိုတာ နဲ့ လိုကျပို့တာပါ “ “အျော အျော အေးး ဒါ ကိုယျ့ အမြိုးသမီးပါ ဒျေါ နန်ဒာဦး တဲ့ မှတျထား ဦး ညီလေး “ “ဟုတျ ကဲ့ ခငျဗြ … “ ဒျေါနန်ဒာဦးက ပွုံးပွလိုကျပီး နှဈယောကျသားထှကျသှားကွသညျ ။ ခယျမနဲ့ခဲအို နှဈယောကျထဲ ဟိုတယျလျ က ထှကျလာတာ သူငယျခငျြးလာတှတေ့ာတဲ့လား လို့ တောငျ တှေးလိုကျသေးတယျ ။ မငျးဇျောက ဂြာကွီး နဲ့ သူ့မိနျး မ ကြောပွငျကို ကွညျ့နမေိတယျ ။ ဟှနျးးး ဒီအမြိုးသမီး တျောတျော တောငျ့တာပဲ အသကျက လေးဆယျကြျောလောကျပဲ ရှိဦးမယျ ။ ဒီလို ဆျောကွီး မြိုး မဖွုတျဖူးသေးဘူး ကွညျ့ပါဦး ဖငျအိုးကွီးတှကေ အယျ ထှကျနတောပဲ ဒီလို ဆျောမြိုး ဖငျကုနျးခိုငျးပီး လိုးခှဲလိုကျရလို့ကတော့ ဟှနျးးးးးးးးး “ကိုကွီး … သှားမယျလေ … အခုပဲ ညီမလေး နဲ့ နလောတယျ သူမြားမိနျးမ ကို သှားငမျးနတောမြား မကျြလုံးတှပေါ ပေါကျထှကျကုနျဦးမယျ ဟှနျးးးး “ဟငျ… မဟုတျပါဘူး ဝါ ရယျ ကဲလာ သှားကွမယျလေ ……. “နှဈယောကျသား ကားပျေါတကျကာ ထှကျလာလိုကျကွလသေညျ ။ ဝါဝါ တဈယောကျ မငျးဇျော လကျခုပျထဲက ရေ ဖွဈသှားလပွေီ ။ ကွိုကျတဲ့ အခြိနျ ကွိုကျသလို ချေါဖွုတျလို့ရပီလေ ။ ခယျမလေး ရဲ့ ဖငျဟာ ခဲအိုလီး အတှကျ အဆငျသငျ့ ဖွဈနပေီလေ ။
ခယျမရဲ့ ပေါငျတဈခွမျး ခဲအိုပိုငျတယျတဲ့ ။ ဟှနျးးဟှနျးးး အခုတော့ ပေါငျတဈခွမျးတငျမက တကိုယျလုံး ပိုငျနပေီလေ ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ခယျမလေး ဝါဝါ တဈယောကျ ခွံထဲက ဘဲမလေး တဈကောငျလို ခဲအိုရဲ့ အသုံးခတြျောခံ အဖွဈ ရှိနခေဲ့သညျ ။ ဝမောလှိုငျ လဈသညျ့ အခြိနျ အိမျမှာ တဈမြိုး အခြိနျရလြှငျရသလို အပွငျမှာ တဈမြိုး ချေါအလိုးခံဖွဈနသေညျ ။ ဝမောလှိုငျကို လိုးလိုကျ ခယျမလေး ဝါဝါ ကို လိုးလိုကျနဲ့ ကာမအရသာ အပွညျ့အ၀ ရနပေမေယျ့ လိငျကိစ်စ ပွငျးထနျလှနျးတဲ့ မငျးဇျော တဈယောကျကတော့ အပွငျမှာ လဲ လဈရငျ လဈသလို ကဲနမေိသေးသညျ ။ သောကျလေ သောကျလေ ငတျမပွေ ဆားငနျရေ လိုပါပဲ ။ ဒီအပေါကျထဲ ဒီအခြောငျး ထိုးထညျ့တာ မှနျပမေယျ့လညျး တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ မတူညီတဲ့ က်ကတ်ထိယတှရေဲ့ အထိအတှေ့ ကို ရှာမွဲရှာဆဲ ။ဒီလို နဲ့ပဲ ….. ဒီတဈခါ အထိအတှေ့ အတှအေ့ကွုံက မငျးဇျောအတှကျ ထူးခွားသညျလို့ ဆိုနိုငျသညျ ။ မငျးဇျောအတှကျ စိုးထိတျမှု ရငျခုနျမှု အံ့သွမှု တှေ ဖွဈနမေိသလို တကယျ့ကိုပဲ ခံစားမှု အသဈ ဖွဈနသေညျ ။ ကုတငျပျေါမှာ ခွထေောကျတှဲလောငျး ခထြိုငျထားရငျး အောကျမှ လီးစုပျပေးနသေူရဲ့ ဆံနှယျလေးတှကေို ပှတျသပျပေးလိုကျသညျ ။ အသားဖွူဖွူ ခန်ဓာကိုယျ မဝတ၀ ။ ဆံနှယျတှကေ ခါးလယျကြျောကြျောလောကျရှညျသညျ ။
မငျးဇျော ရဲ့ လီးတံကို သခြောကိုငျကာ အရငျးမှအဖြားထိ လြာနဲ့ပှတျသပျ ယကျပေးလိုကျ အောကျမှ ဥလေးတှကေို လြာထိပျလေးနဲ့ထိုးလိုကျ ဥ အလုံးလေးတှကေို ငုံစုပျလိုကျ လီးဒဈကို ပွနျငုံစုပျလိုကျဖွငျ့ ကြှမျးကငျြစှာ စုပျပေးယကျပေးနသေူကို သသေခြောခြာ ကွညျ့နမေိသညျ ။ မငျးဇျော ပေါငျတှငျးသားတှကေို ပါ လြာအပွားလိုကျ လြှကျနသေေးသညျ ။ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အားးးးးးးးးး ကောငျးလိုကျတာ “ မငျးဇျော အသံတိုးတိုးလေး ညညျးမိလိုကျသညျ မငျးဇျောကို ခေါငျးမော့ကွညျ့လိုကျရငျး “တကယျပဲ ကောငျးတာလား “ မငျးဇျော ခေါငျးငွိမျ့ပွလိုကျတော့ နုတျခမျးလေး မှ အပွုံးတဈခကျြသနျးသှားရငျး လီးတံ ကို ဆကျစုပျပွနျသညျ ။ သူမရဲ့ ဆံနှယျတှကေို မငျးဇျော စုပီး ကိုငျပေးလိုကျသညျ ။ ပါးလေးတှေ ခြိုငျ့ ဝငျ သှားအောငျ စုပျပေးနသေညျ ကို တှလေို့ကျရသညျ ။ မငျးဇျော လိုးခဲ့ဖူးသမြှ မိနျးကလေး မြားသညျ အမြားစု အားဖွငျ့ အသကျ သုံးဆယျအောကျတှခေညျြးဖွဈသညျ ။ ယခု မငျးဇျောရှမှေ့ာ ထိုငျကာ လီးစုပျပေးနသေူမှာတော့ အသကျ လေးဆယျကြျော လေးဆယျ့ငါး အမြိုးသမီးတဈယောကျ ။ အသကျလေးဆယျ့ငါးလောကျရှိနပေမေယျ့ အလှအပတှကေနျြတုနျး တဏှာခိုးတှထေနျတုနျးဆိုတာ ကို မငျးဇျောသိလိုကျရတဲ့အပွငျ ငယျငယျရှယျရှယျ မိနျးကလေးတှေ ထကျကြှမျးကငျြမှုရှိတယျဆိုတာ သိလိုကျသညျ ။ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ လီးဒဈနဲ့ လရပွေားကွား နရောလေးကို လြာနဲ့ရဈသပျပီး ဆော့ကစားလိုကျတာမြား မငျးဇျော အသညျးခိုကျမိသညျ ။
“ပလကျ ပလကျ ပွှတျ “ “အားးး ကောငျးတယျဗြာ အားးး“ လီးစုပျပေးရငျးမှ အမြိုးသမီးက လီးတံကို ခြှတျကာ ထရပျလိုကျသညျ ။ ထို့နောကျ အပျေါအကြီရငျဖုံးမှ နှိပျစိလေးမြား ကို တဗွုတျဗွုတျ ဆှဲ ဖွုတျပဈလိုကျသညျ ။ စှံ့ငှားစှာ ပျေါလာသညျ့ ရငျသားတှကေို အသားရောငျ ဘျောလီဖွငျ့ မနိုငျ့တနိုငျ ထိနျးပေးထားသညျ ။ဘျောလီပျေါမှ နို့အုံကို သူမ ဘာသာ ပှတျပွညှဈပွလိုကျရငျး မငျးဇျော ဘကျကို ကြောပေးကာ တဘကျသို့လှညျ့လိုကျရငျး ဘျောလီးခြိတျလေးမြားကို လကျနောကျပွနျ ဖွုတျကာ ခြှတျခလြိုကျသညျ ။ သူမရငျသားတှေ ဘယျလို ရှိမယျဆိုတာကို သိခငျြလှနျးလှသညျ ။ တဘကျသို့ လှညျ့ထားသဖွငျ့ ကြောပွငျကိုသာမွငျနရေသညျ ။ ခါးက နဲနဲ တုတျနတေယျ ဆိုပမေယျ့လညျး အောကျမှ စှံ့ထှားလှသော တငျပါးကွီးတှကွေောငျ့ ခါးတုတျသညျ မထငျရသလို ဖွဈနသေညျ ။ နောကျသို့ ဖွနျ့ကနြသေော ဆံနှယျတှကေို စုစညျးကာ ရှသေို့ ပို့လိုကျသညျ ။ ထိုနောကျ အမြိုးသမီးက သူမရဲ့ အနကျရောငျထမိနျစကပျ ရှိ ခါးဘေးမှ ခြိတျလေးကို ကြှမျးကငျြစှာ ဖွုတျလိုကျပွနျသညျ ။ “ဇှိ…………..“ ခြိတျအောကျမှ ဇဈလေးအား ဖွေးညှငျးစှာ ဆှဲခလြိုကျသညျ့ အသံက တိတျဆိတျနသေညျ့ အခနျးအတှငျး သိသာစှာကွားလိုကျရသညျ ။ ထမိနျစကပျ အနားသားလေးတှကေို လကျနှဈဘကျနဲ့ကိုငျကာ ရှသေို့ခါးလေးညှတျခလြိုကျရငျး ခြှတျခလြိုကျလသေညျ ။
အို … ကွီးမားလိုကျတဲ့ တငျပါးကွီးတှကေို အသားရောငျ ပငျတီကွီးက ထိနျးသိမျးထားသညျ ။ ဖွူဖှေးလုံးခဲနသေော ပေါငျတံ နှဈဖကျကလညျး တငျပါးကွီးတှနေဲ့ လိုကျဖကျညီစှာ လှပနသေညျ ။နောကျသို့ ဖငျလေး ကုနျးပေးထားသလို ဖွဈသှားတာကွောငျ့ တငျပါးကွီးတှကေ လုံးတငျးပီး ကားထှကျလာသလိုပငျ ။ ထမိနျစကပျလေး ခြှတျခလြိုကျပီးနောကျ အမြိုးသမီးက မငျးဇျောဘကျသို့ ဖွေးဖွေးခငျြး ပွနျလှညျ့လာသညျ ။ လကျတဈဘကျက နို့အုံကို လကျဖြံဖွငျ့ မလုံတဈလုံ ဖုံးအုပျထားပီး နောကျတဈဘကျက အဖုတျနရောလေးမှာ လကျဝါးလေး အုပျထားကာ မငျးဇျော ကို ပွုံးပွလိုကျသညျ ။ အသားရောငျ ပငျတီရဲ့ အလယျတညျ့တညျ့ အဖုတျနရောလေးနားမှာ အနကျရောငျနှငျးဆီပှငျ့ခညျြထိုးလေးထိုးထားသညျက လညျး တမြိုး ရငျခုနျစရာ ။ မငျးဇျော ထိုငျနရောမှ အမြိုးသမီး ဆီ ထသှားကာ ရငျခှငျထဲ ဆှဲသှငျးလိုကျရငျး နုတျခမျးတှကေို အငမျးမရ စုပျပေးလိုကျသညျ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “ဟငျးး ဟငျးးဟငျးးးး“ အမြိုးသမီးထံမှ ရမ်မကျရှိုကျသံကို အတိုငျးသားကွားနရေသညျ ။ အမြိုးသမီးက သူမရဲ့ လကျတှကေို မငျးဇျော နောကျကြောအား သိုငျးဖကျလိုကျသညျမို့ သူမရဲ့ နို့အုံနှငျ့ မငျးဇျောရငျဘကျက ဂဟဆေကျသှားသလို မငျးဇျောရဲ့ ထောငျမတျနတေဲ့လီးကလညျး နှငျးဆီနကျလေးအား နုတျခှနျးဆကျသနသေညျ ။
“ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “ဟငျးးးး အငျးးး ပွှတျ ပွှတျ “ နုတျခမျးခငျြး ပွနျခှလိုကျပီး အမြိုးသမီးအား ကုတငျပျေါသို့ ပကျလကျလှနျ အနအေထား ပဈခလြိုကျသညျ ။ “အို………..“ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ ပကျလကျလှနျ အနအေထား အမြိုးသမီးပျေါကို ခပျမွနျမွနျတကျခှလိုကျကာ လုံးဝနျးကွီးမားတဲ့ နို့ အုံကွီးတှကေို ဘယျပွနျညာပွနျ စို့ပေးလိုကျသညျ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အားးးး မောငျရယျ …..“ နို့အုံကွီးတှကေို လကျဖွငျ့ အားသနျသနျ ညှဈပေးလိုကျမိသညျ “အားးးး ကြှတျ ကြှတျ အားးးး “ နို့သီးခေါငျးတှကေို လကျညိူးလကျမနှဈဘကျပူးကာ ခပြေေးလိုကျသညျ “အားးး ကြှတျ ကြှတျ အားးး မောငျရယျ အားးး “ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အားးး ရှီးးးး အငျးးး အားးး ဟုတျတယျ အားးး အမလေးးးး“ ထို့နောကျ အောကျဘကျသို့ ဖွေးဖွေးခငျြး လြောဆငျးလာကာ ဘိုကျသားလေးတှကေို နမျးရငျး နှငျးဆီနကျလေး ရှိရာနရောသို့ ရောကျလာတော့ အမြိုးသမီးက ပေါငျးလေး ခပျဟဟ ကားပေးလာသညျ ။ အမြိုးသမီး ရဲ့ နှငျးဆီဖူးလေး ရှိမယျ့ နရောကို ဖုံးအုပျထားတဲ့ နှငျးဆီနကျနရောလေးကို နမျးလိုကျသညျ ။ စိမျးရှငျရှငျ အနံတဈခုက နှာခေါငျးထဲ တိုးဝငျလာသညျ “အားးး “ ခါးတဈဘကျတဈခကျြရှိ ပငျတီ မြှော့ကွိုးလေးအား လကျနှဈဘကျဖွငျ့ ဆှဲယူလိပျခလြိုကျပီး အောကျသို့ ဆှဲခြှတျရနျကွိုးစားလိုကျသညျ ။ အမြိုးသမီး က တငျပါးကွီး ကို ကွှပေးလိုကျမှ ပငျတီလေး ကြှတျသှားလသေညျ ။ စောကျဖုတျအထကျ ဆီးခုံနရောမှ ကှေးကောကျကောကျ မဲမဲသဲသဲ စောကျမှေးအုံကွီးမှာ ထူလှနျးလှပီး စောကျဖုတျကို ဖုတျကှယျထားသညျ ။ အမှေးဆံလေးတှမှော စိုရှဲရှဲ အရညျတဈခြို့က ကပျလို့နသေေးသညျ ။
အမှေးအုံထူထူထဲထဲ အဖုတျလိုကျကွီး ဖွဈနသေညျမို့ “စောကျဖုတျ “ အောကျမှ ပကျကွားအကျ အကှဲကွောငျးလေး ရှိသညျမို့ “ စောကျပတျ “ လို့ ချေါသညျ လို့ တှေးမိလိုကျသေးသညျ ။ တျောတျော ထူထဲ တဲ့ စောကျဖုတျအုံကွီး ။ မငျးဇျော လကျဖဝါးဖွငျ့ အမှေးအုံနရောကို ပှတျဆှဲလိုကျရငျး စောကျပတျနရောလေး ကို စမျးကွညျ့လိုကျတော့ အရညျတှေ တျောတျော ထှကျနသေညျ ။ လကျညိုးလေး ဖွငျ့ စောကျပတျလေး အား ပှတျဆှဲလိုကျရငျး အတှငျးထဲသို့ ထိုးထညျ့လိုကျပီး “အရညျတှေ တျောတျော လာနပေီပဲ “ “အငျးးးးး “ အပွုံးလေး ဖွငျ့ ခေါငျးငွိမျ့ပွသညျ ။ အမြိုးသမီး က ဒူးနှဈဘကျကို ထောငျကာ နဲနဲ ကားပေးလိုကျပီး “မှုတျပေးးးး လေ “ “နဦေး မမှုတျခငျ သခြော ဖွဲကွညျ့ဦးမယျ “ ဟု ဆိုကာ မငျးဇျောက သူမ စောကျပတျကို ဖွဲကွညျ့လိုကျသညျ။ အတှငျးသား နီနီရဲရဲမှာ အရညျကွညျတှေ အိုငျထှနျးနသေညျ ။ စောကျပတျဘေးသားတှကေတော့ နဲနဲ ညိုတိုတိုရှိသညျ ။ စောကျပတျနုတျခမျးသား ပှငျ့ခပျြလေး နှဈခပျြမှာ ဘေးသို့ အာတာတာလေး ပှငျ့လနျးနသေညျ ။ “မမွငျဖူးတာ ကနြတောပဲ ဟငျးဟငျးးးး“ “မွငျဖူးသမြှထဲ အလနျးဆုံးပဲ ပှငျ့ဖတျ အာအာကွီးတှနေဲ့ အတှငျးသားနီနီရဲရဲ အမှေးထူထူကွီး အရမျး ခိုကျတယျဗြာ “ “ဟငျးးဟငျးးးဟငျးဟငျးးးးး “ အမြိုးသမီးက သဘောကစြှာ ရယျနလေသေညျ ။
အတှငျးသားထဲ ရောကျနသေော လကျညိုးကို ပွနျထုတျလိုကျပီး လကျညိုးနဲ့လကျခလယျ နှဈခြောငျးပူးကာ ပွနျသှငျးလိုကျသညျ “အားးးး ရှီးးးးးး “ အတှငျးသားတှကေ ခြောမှတျနသေညျ ။ လကျထိုးထဲထားရငျးပငျ စောကျစိကို ကုနျးစုပျပေးလိုကျသညျ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အားးးးရှီးးးးး အငျးးးး“ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အားးး အမလေးးး ကောငျတယျကှယျ အားးးး “ အမြိုးသမီး မှ ပေါငျကို အစှမျးကုနျ ကားပေးလာသညျ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အားးး ရှီးးးးး အိုးးးး ဟငျးးးး“ ပေါငျကွားထဲမှ မငျးဇျောရဲ့ ခေါငျးကိုလှမျးကိုငျကာ ဆံပငျတှကေို ဆှဲကုတျထားရငျး စောကျပတျကွီး ကို ကော့ကော့ထိုးပေးနမေိသညျ ။
စောကျပတျထဲမှ အရညျတှကေ ဖငျကွားထဲ ထိ စီးကလြာသညျ “ပွှတျ ပွှတျ ပလကျ ပွှတျ “ “ဇှပျ ဇှပျ ဇှပျ ဇှပျ “ လကျညိုးလကျခလယျ နှဈခြောငျးပူးကလညျး စောကျခေါငျးထဲ ထိုးမှနေသေညျ “အားးး အမလေးးး အိုးးးး “ အမြိုးသမီးရဲ့ ညီးတှားသံက သူမရဲ့ ရမ်မကျတှကေို ဖျောညှနျးနသေညျ ။ မငျးဇျောက အမြိုးသမီးရဲ့ ခါးအောကျကို ခေါငျးအုံး တဈလုံး ထိုးခံပေးလိုကျသညျမို့ တငျပါးက ကွှတကျလာသညျ “ပွှတျွ ပှတျ ပလကျ ပလကျ ဇှပျ ဇှပျ “ “အားးး ရှီးးးး ကောငျးလိုကျတာ မောငျရယျ အားးး“ မငျးဇျော ခေါငျး ပွနျကွှလိုကျပီး အဖုတျထဲသို့ လကျဖွငျ့ ခပျကွမျးကွမျး အထုတျအသှငျး လုပျပေးလိုကျသညျ “ဇှပျ ဇှပျ ဇှပျ ဇှိ ဇှိ … “ “အားးး ရှီးးးး ဟူးးးး “ ထိုးထညျ့ထားသော လကျခြောငျးနှဈခြောငျး ကို အထဲမှာ လကျဆဈလေးတှေ ကှေးပေးပီး ခပျကွမျးကွမျး ပှတျဆှဲလိုကျပွနျသညျ “အားးးး အို … ရှီးးးးးးးးးး“ ထို့နောကျ လကျခြောငျးတှကေို ပွနျဆှဲထုတျလိုကျတော့ အရညျတှကေ လကျခြောငျးတှမှော အမြှငျအတနျးလိုကျပါလာသညျ ။ မကျြလုံးလေး မှေးစငျးကာ အမှုတျခံနရေငျးမှ မငျးဇျောကို လှမျးကွညျ့လိုကျသညျ ။ မငျးဇျောက လကျခြောငျးမှာ ပါလာသော အရညျတှကေို ပွလိုကျရငျး အမြိုးသမီး ရဲ့ နုတျခမျးပျေါသို ထိုလကျခြောငျးလေးမြားဖွငျ့ ပှတျပေးလိုကျသညျ ။
အမြိုးသမီးကလညျး ပါးစပျဟကာ မငျးဇျောရဲ့ လကျခြောငျးမှ အရညျတှကေို လှမျးစုပျယူလိုကျသညျ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “ထ… ဖငျကုနျးလိုကျနျော “ “အငျးးးး “ အမြိုးသမီးက ထထိုငျးလိုကျရငျး မငျးဇျောဘကျသို့ ဖငျပေးကာ လေးဘကျကုနျးလိုကျသညျ တငျးမာပီးကားထှကျနသေော ဖငျလုံးကွီးတှကေို မငျးဇျော လကျနှဈဘကျဖွငျ့ ဖဈြညှဈလိုကျသညျ “အားးးး “ “ဖငျကွီးက ဖှေးပီး တငျးကားနတောပဲဗြာ ….“ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ….. “ “ဖွောငျးးးး“ “အ … “ အားမလို အားမရဖွငျ့ တငျပါးကွီးတှကေို လြာနဲ့ ယကျနမျးကာ လကျနှဈဘကျလကျဖဝါးဖွငျ့ တငျပါးနှဈခွမျးလုံး ကို ပွိုငျတူ ရိုကျခလြိုကျသညျ “ဖွောငျးးး “ “အားးးး မောငျ အားးး“ တငျပါးကွီးက ကွှတကျလာသလို ခါးလေးပါ ခှကျသှားသညျ ။
တငျပါးနှဈခွမျးကို ဆှဲဖွဲလိုကျတော့ အလယျမှာ ညိုတိုတို ခရပှေငျ့လေး ။ မငျးဇျော ကုနျးယကျလိုကျသညျ “အို …….. “ စအိုကို အယကျခံလိုကျရသဖွငျ့ အမြိုးသမီး အသညျးထဲ အေးခနဲ ခံစားလိုကျရသညျ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အားးးးး အမလေးးးး ဟူးးးးဟငျးးးဟီးးးးးးး “ စအိုဘေးဖငျသားလေးတှကေို ဖွဲလိုကျပီး အတှငျးသို့ လြာဖြားလေးကို တောငျ့ကာ ထိုးသှငျးလိုကျသညျ “အားးး “ “မနတေတျတော့ဘူးကှာ တကျလိုးတော့ အားးးး “ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ အားးး“ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ အမြိုးသမီးက လေးဘကျထောကျထားတဲ့ လကျတဈဘကျကို ဖွုတျလိုကျပီး အောကျမှ သူမ အဖုတျသို့ လှမျးကိုငျကာ အစိကို ကိုယျ့ဘာသာ ပှတျခနြေမေိသညျ “အားးး အားးး အားးးး“ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ အမြိုးသမီး အနဖွေငျ့ အလိုးခံရနျ အသငျ့ ဖွဈနပေီ တျောတျောလညျး ဆာလောငျပှတျသိပျလာသညျ “လိုးတော့ကှာ မနတေတျတော့ဘူး “ မငျးဇျောလညျး အမြိုးသမီး ရဲ့ နောကျမှာ ဒူးထောကျကာ ကကြ နန နရော ယူလိုကျပီး လီးဒဈကို စောကျပတျဝမှာ တလေို့ကျပီး ဆောငျ့ထိုးသှငျးလိုကျသညျ “ဘှတျ …“ “အားးးးးး အီးးး“ သူမ စောကျရညျတှေ နဲ့ ခြောမှတျနတောမို့ လီးက အဆုံးထိ တခါတညျး ဝငျသှားသညျ ။
မငျးဇျောလညျး သူမ တငျပါးစပျခါးနရော ကို ကိုငျကာ နောကျမှ ဆောငျ့လိုးပေးလိုကျသညျ “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဘှံတျ “ “အမလေးးး ထိလိုကျတာ အားးး ကောငျးတယျ မောငျ အားးး “ “ဖုနျးးး ဖုနျး ဖုတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ “ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ အငျ့ “ “အားးးး အားးး အမလေးးးး ဆောငျ့ အားးး ဆောငျ့ ပေး “ “အငျ့ အငျ့ ဘှတျ ဘှတျ “ “အားးး ထိတယျ အားးး ကောငျး ကောငျး အားးးး“ လီးမှာ အဆုံးထိ ခြောခြောမှတျမှတျ ဝငျလိုကျထှကျလိုကျဖွဈနသေလို ဥတှကေလညျး အမြိုးသမီးရဲ့ဆီးခုံနားသို့ မထိတထိ သှားသှား ရိုကျပေးနသေလို ဖွဈနသေညျ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ “ “ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ “ မငျးဇျောက ခါးကိုငျထားတဲ့ သူ့ရဲ့ ညာလကျကို တငျပါးနှဈခွမျးကွားတငျလိုကျပီး လကျမကို စအိုပေါကျထဲသို့ ထိုးထညျ့လိုကျသညျ ။ “အားးး အမလေးးးး“ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ “ “ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ “ လကျမ က စအိုပေါကျကို တဆုံးထိုးထညျ့ထားပီး အတှငျးမှာ လကျမ ကို ကှေးလိုကျဆနျ့လိုကျမှထေိုးပေးရငျး အောကျမှာ စောကျပတျကို လီးက အခကျြမပွတျ ဆကျတိုကျလိုးပေးနသေညျ “အမလေးးးကှယျ အားးး ကောငျးတယျအားးးမညှာနဲ့ ဆောငျ့လိုး အားးးး “ အတှငျးမှာ လီးတံကို စောကျပတျနုတျခမျးအတှငျးသားတှေ က ဆှဲဆှဲ စုပျယူနသေလို ခံစားရသညျ ။ မြော့ဆိုတာဒါလား ။
မငျးဇျောလီးကို ညှဈညှဈပေးနသေလိုပငျ ။ ပိုပီး လိုးလို့ ကောငျးလာသညျ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ “ “ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ “ “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ “ “အားးးး ကောငျးတယျ အားးး ဆောငျ့ ဆောငျ့ ဆောငျ့ကှာ အငျးးး အားးး“ အရညျတှကေလညျး တအား စိုရှဲနသေညျ ။ သူမ ဖငျကွီးတှကေလညျး မငျးဇျောထံ နောကျပွနျဆောငျ့ပေးနပွေနျသညျ ။ မငျးဇျောက သူ့ လီး ကို ဆှဲထုတျလိုကျတော့ ဆောကျရညျတှေ တျောတျော စိုရှဲနတော တှလေို့ကျရသညျ ။ အမြိုးသမီးရဲ့ ဖငျနှဈခွမျးကို ဖွဲလိုကျပီး စအိုပေါကျနရော ကို လီးနဲ့ အခြောငျးလိုကျ ရိုကျလိုကျသညျ “ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ “ ထို့နောကျ စအိုပေါကျပျေါသို့ လီးကို အလြားလိုကျတငျပီး ဖိကပျကာ ပှတျဆှဲပေးလိုကျသညျ “အားးးး ရှီးးးးး “ ထို့နောကျ စအိုခရလေေးအား လီးဒဈဖွငျ့ ဝလုံးဝိုငျးသဖှယျ ဝိုကျကာ ဝိုကျကာ ဖွငျ့ ပှတျပေးလိုကျပွနျသညျ “အားးး “ ထို့နောကျ ဖငျပေါကျပျေါ လီးဒဈကို ကကြ နန သခြောခြိနျလိုကျပီး လီးဒဈကို လကျဖွငျ့ဖိလိုကျကာ စအိုပေါကျထဲသို့ ဖိသှငျးလိုကျသညျ “အ အ မောငျအအ ဖငျ အားးးး အားးးလားးးလားးး ဖငျ “ “ဗဈြ ဗဈြ ဗဈြ “ လီးဒဈက စအိုပေါကျထဲ ဝငျသှားလသေညျ ။
မငျးဇျော ခါးကို ခပျမတျမတျလုပျကာ လူကို ကွှလိုကျသညျ “ကွိုကျလား ဒီထဲထညျ့တာ “ “အငျးးး ဖွေးဖွေး မောငျ အားးး နာတယျ ဖွေးဖွေး “ “အငျ့ အားး “ “ဗဈြ ဗဈြ “ “အဆုံးထိ ဝငျတော့မယျ တဈဝကျရောကျပီ ဖငျလြော့ထား “ “အငျးးး အားး အီးးးး ဖွေးဖွေး အားးး“ မငျးဇျောရဲ့ လိငျတံက အမြိုးသမီး ဖငျပေါကျအတှငျးသို့ တအိအိဖွငျ့ အဆုံးထိ ရောကျသှားသညျ “အားးး အဆုံးထိ ဝငျနပေီ ပွနျထုတျကွညျ့မယျနျော “ ဖွေးဖွေး ခငျြး ပွနျထုတျလိုကျတော့ ဖငျနုတျခမျးသားလေးတှကေ လီးနဲ့ အတူ ခပျစူစူလေး ကပျပါလာလသေညျ “ဘု ဘု ဘု….“ အထဲမှ လတှေပေါ အံကလြာသညျ ။ လထေိုးတံဖွငျ့ လတှေေ စုပျထုတျလိုကျသညျ့နှယျ “ဘု ဘု ဘု…..“ “အားးးးး“ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ “ ဖွေးဖွေးခငျြး ပွနျထိုးသှငျးလိုကျပွနျသညျ ။
“ဘု ဘု ဘှတျ ဘှတျ “ “အားးး “ ဖွေးဖွေးခငျြး အထုတျအသှငျး လုပျလိုကျသဖွငျ့ စအိုပေါကျက ခြောမှလေ့ာသညျ “နဲနဲ ဆောငျ့ကွညျ့မယျနျော ဖွဈလာ “ “အငျးးး လုပျ “ “ဘှတျ ဘှတျ ဘု ဘု “ “ဗဈြ ဗဈြ “ “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ “ “အားးးး “ “ဖငျမခရြတာ ကွာပီ အခုမှပဲ ခရြတော့တယျကောငျးလိုကျတာ ကွပျထုတျနတောပဲ “ “အငျးးး မောငျ လိုးးး အားးး “ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ အငျ့ “ “ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ ဘု ဘု ဘု ဘု “ “အားးးး ကောငျးတယျ အားးးး “ “အားးး ရလာပီ မောငျ လိုးးး အားးး သှငျးပါ အမလေးးး “ မငျးဇျောလညျး အမြိုးသမီး ရဲ့ ခါးပျေါ လကျနှဈဘကျတငျလိုကျကာ ဒူးကှေး လူကို ထ လိုကျရငျး အပျေါမှ မောငျးထောငျးသလို ဆောငျ့လိုးတော့သညျ ။ အောကျမှ မငျးဇျော ရဲ့ လကျထောကျထားတာကို တောငျ့ပေးထားသညျ့ အပွငျ ဖငျကို ပါ ကော့ပေးထားလသေညျ “ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ “ “အငျး အငျးး အားးး ကောငျးနပေီ “ “အားးး ရှီးးးး “ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ ရော့ “ “အားးး အမလေးးး “ နှဈယောကျစလုံး ရဲ့ ရမ်မကျမီးတှကေ အဆုံးစှနျထိ တောကျလောငျနကွေပီ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ “ “ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဖတျ “ “အားးး လိုးပါ မောငျ အားးး အမလေးးးး “ အခကျြလေးငါးဆယျ ဆောငျ့လိုကျတာမို့ မငျးဇျောရော အမြိုးသမီး ပါ မောဟိုကျသံတှေ ထှကျလာသလို ခြှေးတှလေညျး ရှဲနဈလာသညျ ။ မငျးဇျော စိတျတှေ လညျး တအား ထနျလို့ နသေညျ ။
မငျးဇျော သူမ ပျေါ မှ ဆငျးလိုကျသညျ ။ “ကွိုကျလား ဖငျခံလို့ ကောငျးလား “ “ကောငျးတယျ အားးး တအားကောငျးတယျ “ “ရော့ ဒီမှာ ဖငျလိုးထားလို့ ပနေတေဲ့ လီး စုပျပေး “ “အငျး အငျး ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ အမြိုးသမီးက ထထိုငျကာ လီးကို အငမျးမရ စုပျသညျ ။ လီးတံ ပျေါသို့ တံတှေးထှေးခပြေးလိုကျပွနျသညျ “ပဈြ …..“ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “ထပျလိုးဦးမယျ ကုနျးထား “ “အငျးး“ အမြိုးသမီး က ထပျကုနျးပေးပွနျသညျ ။ မငျးဇျောက ခုနက ခြှတျထားသော အမြိုးသမီး ရဲ့ ပငျတီ အသားရောငျလေး ကို လှမျးယူလိုကျပီး နှာခေါငျးနဲ့ ရှုလိုကျသေးသညျ ထို့နောကျ “ရော့ ပါးစပျဟ ကိုကျထား “ ပငျတီလေး ရဲ့ အနကျရောငျနှငျးဆီ နရောလေး ကို ရှေးကာ အမြိုးသမီး ပါးစပျထဲ ထိုးထညျ့ပေးလိုကျတော့ အမြိုးသမီးကလညျး ကိုကျထားရငျး ဖငျကုနျးထားလိုကျလသေညျ မငျးဇျောက နောကျမှ သူမ ကိုယျကို ဆှဲယူလိုကျပီး ကုတငျဇောငျးတှငျ ကုနျးခိုငျးလိုကျပီး နောကျမှ မတျတပျရပျနရောယူကာ ဖငျပေါကျမှာ လီး တပေီ့း ထိုးသှငျးလိုကျသညျ ။ အမြိုးသမီးမှာ ကုတငျဇောငျးတှငျ လကျထောကျကာ တငျပါးကွီး ကော့ပေးရငျး ပငျတီလေး ကို ပါးစပျနဲ့ ကိုကျကာ အလိုးခံနရေသညျ ။ “ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ “ “ဘု ဘု ဘု ဘှတျ ဘှတျ ဘှတျ “ “အားးး ကောငျးတယျ အငျ့အငျ့အငျ့ “ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ ငါလိုးမ ဖငျ အငျ့ကှာ အငျ့ “ “ဖနျြးးးး ဖနျြးးး “ “ဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ “ ရှသေို့ ဝဲကနြသေော ဆံပငျတှေ လှမျးဆှဲကိုငျထားရငျး ဆောငျ့လိုးနသေညျ ။
စညျးခကျြညီညီ တဘုနျးဘုနျး တဘှတျဘှတျ အလိုးခံရငျး နှဈယောကျသားရဲ့ ရမ်မကျမီးတောကျတှေ က အဆုံးစှနျထိ တောကျလောငျနခြေိနျ ……. “ကြီ…… “ အခနျးတံခါး ပှငျ့ဟ သှားသံနှငျ့ အတူ “အို…… ဟာ…….“ “ဟငျ…“ ဝမျးနညျးခွငျး စိတျတိုခွငျး ဒေါသထှကျခွငျး မီလြှံမြားတောကျလောငျနသေညျ့ မကျြဝနျးတဈစုံ “အားးးးးး “ ငယျသံပါအောငျ အျောလိုကျသော အသံတဈခု က ပတျဝနျးကငျြကို လှမျးမိုးသှားတော့သညျ …… “ဗိုလျကွီး ………“ အလေးပွုရငျး ဝငျလာတဲ့ ရဲဘျောကို အလေး တဈခကျြ ပွနျပွုလိုကျကာ ရဲအုပျ အောငျခိုငျ မှ “အေးးး ပွော ဘာထူးလဲ “ “တရားခံ အမြိုးသမီး က ခှငျ့တောငျးခိုငျးလို့ပါ … နာရေး ကို သူလိုကျပို့ ခငျြပါတယျတဲ့ “ “အျော ……… အငျးးးးးးးး “ ရဲအုပျအောငျခိုငျ တဈခကျြ စဉျးစားလိုကျသညျ ။
“အေးကှာ အစောငျ့ သခြော ထညျ့ပီး ခှငျ့ပေးလိုကျပါ “ “ဒါနဲ့ဗိုလျကွီး တရားခံ အမှုက ဘယျလို ဖွဈတာလဲ ကြှနျနျောက မနကေ့ မှ ခှငျ့က ပွနျလာတာမို့ သခြော မသိလိုကျလို့ပါ “ “အငျးး တရားခံ အမြိုးသမီး နရောမှာ အခွားသူ ဆိုရငျလညျး အခု လို လူသတျမှု ဖွဈမှာ သခြောပါတယျ အခု တရားခံ အမြိုးသမီးက သူကိုယျတိုငျ ဖွောငျ့ခကျြပေးပီး စခနျးမှာ လာဝနျခံခဲ့တာ သဆေုံးသူ နဲ့ တရားခံအမြိုးသမီးက လငျမယားတှေ သူ့ အမြိုးသားက ပီးခဲ့တဲ့ လ က တရားခံရဲ့ ညီမ နဲ့ ဖောကျပွနျခဲ့တာ ကို တရားခံ အမြိုးသမီး ဆရာမဝမောလှိုငျက သိခဲ့တယျ ။ အရှကျကှဲမှာ စိုးတာကွောငျ့ သူ့ညီမ ကို လညျး တခွား ကို ပွောငျးခိုငျးလိုကျပီး သူ့ အမြိုးသား သဆေုံးသူ မငျးဇျောကို ဖွောငျးဖွခဲ့တယျ နောကျမလုပျဘို့ တားဆီးခဲ့တယျ နောကျပိုငျး နဲနဲ ပွနျအဆငျပွလောကာမှ အခု လိုကိစ်စ ထပျဖွဈတာပဲကှာ တရားခံ အမြိုးသမီး ဆိုတာကလဲ ငါ့သမီးရဲ့ ကြောငျးဆရာမကှာ ဟူးးးးးးးး“ “အျော … ဘယျလို ထပျဖွဈတာလဲ ဗိုလျကွီး ……..“
“အေးကှာ လူ့ အသိုငျးအဝိုငျး ပတျဝနျးကငျြမှာ ပွောလို မထှကျခငျြတဲ့ ကိစ်စပေါ့ “ “ဘယျလို ဖွဈရတာလဲ “ “သဆေုံးသူက ခယျမ နဲ့ ဖွဈပီး နောကျထပျ အမှားကွီး တဈခု ထပျဖွဈတယျ ပွောရမယျဆို ဘယျကနေ ဘယျလို ငွိသှားကွလဲ မသိပမေယျ့ မဖွဈသငျ့တဲ့အရာတဈခု ဖွဈတဲ့ တရားခံရဲ့ အမေ ဒျေါစိုးစိုးဦး သူ့ယောက်ခမ တျောသူ နဲ့ ဖောကျပွနျကွတယျကှာ ဆရာမ နရောမှာ ငါသာ ဆိုရငျလညျး ဟူးးးးးးးးးး“ “ဟာ …. ခယျမ နဲ့လညျး ဖွဈတယျ ယောက်ခမ ကိုတောငျ မရှောငျဘူး ဒီကောငျ သသေငျ့တာပါပဲ “ “အေးးးကှာ …နရောမှာတငျ ပှဲခငျြးပီး ကတျကွေးနဲ့ ၁၈ ခကျြ ထိုးသတျခဲ့တာ အေးးး ထားပါကှာ …. တရာခံ ကို သခြော အစောငျ့ပေးပီး နာရေး ပို့ပေးလိုကျပါ ………“ “ဟုတျ ဗိုလျကွီး …. လေးစားပါတယျ “ “လေးစားပါတယျ “ မီးခိုးခေါငျးတိုငျမှ မီးခိုးလုံးမြားလှငျ့တတျသှားတာကိုကွညျ့ရငျး အစောငျ့ ရဲမေ နှဈယောကျကွားမှ လကျထိပျလေး ခပျထားရငျးဝမောလှိုငျ တဈယောကျ အံကို တငျးတငျးကွိတျထားလိုကျလသေညျ ။
နှရောသီရဲ့ လပေူ တဈခြို့က ဝမောလှိုငျ့ ဆံနှယျတှကေို တိုးဝှသှေ့ားသညျ “မောငျ …. ဝေ မောငျ့ကို ခဈြပါတယျ … မောငျ့ ဆန်ဒတှကေို လညျး အဆုံးစှနျထိလိုကျလြောခဲ့ပါတယျ မောငျ့ရဲ့ ပွငျထနျလှနျးတဲ့ ရမ်မကျမီးတောကျတှကေ အခု လှငျ့စငျသှားတဲ့ မီးခိုးတှနေဲ့ ပဲ ထိုကျတနျပါတယျ မောငျ … နောငျဘ၀ မြား လူ့ဘ၀ ကို ပွနျရောကျခဲ့ရငျ ဖွူဖွူစငျစငျ အခဈြတှေ ရမ်မကျမရှိတဲ့ အခဈြတှေ နဲ့ တှခေ့ငျြပါသေးတယျမောငျ …. မောငျ့ကို ခဈြသလို စိတျလညျး နာတယျ နာကွဉျးတယျ မောငျ …. သှားတော့မောငျ … ဘယျတော့ မှ ပွနျမလာနိုငျတော့တဲ့ ရမ်မကျရဲ့ လမျးဆုံး ကို တဈယောကျတညျးသာ သှားတော့မောငျ ……… ပွီးပါပွီ
မင်းဇော် တစ်ယောက် အလုပ်တာဝန် ပြီးပီ မို့ အိမ်ကို ပြန်လာခဲ့တယ် ။ လေးရက်လုံးလုံး မိမိ အထက်လူကြီး နဲ့ ခရီးစဉ် တလျောက် ပါသွားခဲ့တာ အခု မနက်ပိုင်း ပြန်ရောက်ခဲ့တာ မို့ နေ့လည်ပိုင်း ရုံးပြန်မတက်ချင်တော့ ။ မိမိ အထက်လူကြီးမှလည်း ပြန်နားပါတော့ ဆိုတာနဲ့ အိမ်ကို တန်းပြန်လာခဲ့တယ် ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အိမ်ရှေ့ တခါး ပိတ်ထားတာ နဲ့ တခါးခေါက်လိုက်ပီး စောင့်နေလိုက်တာ ခနနေတော့ မင်းဇော် ရဲ့ခယ်မ ဝါဝါ တစ်ယောက် တံခါးလာဖွင့်ပေးတယ် ။ အိမ်မှာက မင်းဇော်ရယ် မိန်းမ ဝေမာလှိုင်ရယ် ခယ်မလေး ဝါဝါဦး ရယ် သုံးယောက် နေကြတယ် ။ မင်းဇော်မိန်းမ ဝေမာလှိုင်က ဆရာမ ။ ဝါဝါဦးကတော့ အခု မှ တက္ကသိုလ် တက်နေတုန်း ဒုတိယ နှစ် ။ ကျောင်းတက်ရင်းနဲ့ မင်းဇော် တို့ အိမ်မှာ ပဲ နေနေတယ် ။ အိမ်က ကျယ်ကျယ်လွင့်လွင့် ရှိပီး အခန်းသုံးခန်း ပါတော့ ဒီမှာပဲ ခယ်မလေး ဝါဝါဦး ကလိုက်နေတယ် ။ တခါတခါတော့ သူတို့ အမေ မင်းဇော် ယောက္ခမ ဒေါ်စိုးစိုးဦး လာတယ် ။ တစ်လ တခါလောက်တော့လာတယ် ။ မင်းဇော် ယောက္ခမ ဒေါ်စိုးစိုးဦးက အခု မှ အသက်လေးဆယ်ကျော်ကျော်သာ ရှိသေးတယ် ။ အိမ်ထောင်ပြုတာ စောပီး သမီးနှစ်ယောက် ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် မွေးခဲ့တယ် ။ ယောက္ခထီးကတော့ သူတို့ ငယ်ငယ် မှာ ပဲ ဆုံးပါးသွားခဲ့တော့ သမီး နှစ်ယောက် အရွယ်ရောက် တဲ့ အထိ ဒေါ်စိုးစိုးဦး ပဲ ရှာဖွေကျွေးမွေး ခဲ့ရတာ ။ မင်းဇော်နဲ့ ဝေမာလှိုင် အိမ်ထောင် ပြု တာ လည်း မကြာလေး တစ်နှစ်ကျော်ကျော် သာရှိသေးတယ် ။
… .. ဝါဝါ က တံခါးဖွင့်ပေးအပီး အိမ်ထဲလှမ်းဝင်ခဲ့လိုက်တယ် ။ ဝေမာလှိုင် ရှိပုံ မရ ။ ကျောင်းဖွင့်ရက်မို့ ကျောင်းသွားသည်ထင်တယ် “ဝါဝါ နင် အတန်းမရှိဘူးလား ကျောင်းမသွားဘူးလား ´´ “အတန်းက မနက်က တချိန် ရှိတယ် တက်ပီး ပီ အခုက နေ့လည်ပိုင်းနောက်ဆုံးချိန်တစ်ချိန်ပဲ အတန်းရှိတာ မို့လို့ မတက်ချင်တာနဲ့ ပြန်လာလိုက်တာကိုကြီး ´´ “အော် အေးအေး ´´ “ကိုကြီး ထမင်းစားတော့မလား ညီမ ပြင်လိုက်မယ်လေ ´´ “အေးးး နေပါဦး ရေမိုးချိုးလိုက်ပါဦးမယ်ဟာ´´ “ဟုတ်ကဲ့ ကိုကြီး .. ဒါဆို ရေချိူးပီး စားလိုက်ပေါ့ ညီမလေးလဲ မစားရသေးဘူး အတူတူ စားရအောင်နော်´´ “အင်းးးအင်းးး´´ လှည့်ထွက်သွားတော့ ဝါဝါ ကို တချက်ကြည့်လိုက်မိတယ် ။ အင်းး နောက်ပိုင်း အလှက တော့ သူ့အမ အတိုင်းပဲ တင်းရင်းနေတာများ ထမိန် အပျော့သား ဝတ်ထားတာမို့ အောက်ခံပင်တီ ကြိုးရာလေး က တင်ပါး အစပ်နားမှာ ပေါ်နေတယ် ။ အိမ်နောက်ခန်း ထဲ ဝင်သွားတာ ကြည့်ပီးတော့မှ မင်းဇော်လည်း အိပ်ခန်းထဲ ဝင်ကာ ရေချိုးရန် အဝတ်တွေ ချွတ်ပီး အောက်ပိုင်း ကို တဘက် အဖြူဖြင့် ပတ်ထားလိုက်တယ် ။
ခုန က ခယ်မလေး ရဲ့ နောက်ပိုင်း အလှကို မြင်ပီး အောက်က ညီတော်မောင်က ဖောင်းကြွနေတော့ တဘက် အဖြူပတ်ထားတဲ့ ပေါင်ဂွကြားနေရာက ဖောင်းဖောင်းကြီး ထနေတယ် ။ လေးငါးရက် ကျော် ငတ်ပြတ်နေတဲ့ ညီတော်မောင် ကို ညကျမှ ဝေမာလှိုင် နဲ့ အစာကျွေးရဦးမယ် ရေချိုးခန်း ဝင်မယ် အလုပ် “ဒေါက် ဒေါက် ´´ တံခါး ခေါက်သံကြားလိုက်ပီး ဝါဝါ ရဲ့ အသံလေး ထွက်လာတယ် “ကိုကြီး ..ညီမလေး ပါ ဝင်ခဲ့မယ်နော် ´´ “အော် ..အေးအေးးး´´ တံခါးဖွင့်ပီး လှမ်းဝင်လာတဲ့ ဝါဝါ ရဲ့ လက်ထဲမှာ သောက်ရေဖန်ခွက်လေး တစ်ခွက် ကျွန်နော် အပေါ်ပိုင်းဗလာ နဲ့ အောက်က တဘက်ပတ်ထားတာကြီး မြင်တော့ အခန်းဝ မှာ တွေတွေ လေး ရပ်သွားတယ် “ကိုကြီး ရေသောက်ဘို့ပါ အပြင်က တအားပူလို့ အပူရှပ်မစိုးလို့ သောက်ရေ လာတိုက်တာ ´´ ကျွန်နော့် ကို သေချာ မကြည့်ပဲ ခေါင်းငုံကာ ပြောလာတယ် ။ တော်တော် အလိုက်သိတဲ့ ခယ်မလေး ။ “ကျေးဇူးနော် ဝါဝါ ´´အပေါ်ပိုင်း စပို့ရှပ် လေး ဝတ်ထားတဲ့ ဝါဝါ ရဲ့ နို့သီးလေးတွေက စပို့ရှပ် အကြပ်လေး ပေါ်မှာ ငေါထွက်နေတယ် ။လက်တဘက်က အခြားလက်တဘက် ကိုင်ထားပီး လက်ချောင်းလေး တွေ မသိမသာ တဆက်ဆက် တုံနေတုန်းပဲ ။ရေကို ခပ်ဖြေးဖြေး သောက်ရင်း ဝါဝါ ရဲ့ အလှတွေ ကို သေချာ ကြည့်မိနေတယ် ။
ထမိန် အပျော့သားလေး ကို တင်းတင်းရင်းရင်း ဝတ်ထားပီး အောက်ဆုံးမှာ တော့ ဖွေးဥတဲ့ ခြေထောက် နုနုလေး ခြေသည်းနီအနီရောင်လေး ဆိုးထားပီး ပန်းပွင့်ပုံလေးတွေ ပုံဖော်ထားတဲ့ ခြေချောင်းလေးတွေက လည်း ချစ်စရာ ရေသောက်ပီး ဖန်ခွက်ပြန်ပေးလိုက်တော့ လှမ်းလာတဲ့ လက်ကလေး တွေမှာလည်း လက်သည်းနီ အနီရောင် လေး တွေ ဆိုးထားတယ် ။ ဖန်ခွက်ကို လှမ်းလိုက်တဲ့ လက်ကလေးကို မင်းဇော် အသာ ဖမ်းဆုပ်လိုက်တော့ ဝါဝါ တစ်ယောက် ခေါင်းမော့လာတယ် “ဝါဝါ အရမ်းလှလာတယ်နော် လက်ကလေးတွေ ခြေချောင်းလေးတွေ ကလည်း ချစ်စရာလေး လက်သည်းနီရောင်လေးနဲ့လည်း လိုက်တယ် ´´ ရှက်ကိုးရှက်ကန်း အမူအရာလေးဖြင့် “အာ ကိုကြီး ကလည်း လျောက်ပြောနေတယ် ´´ “တကယ်ပြောတာပါ ဝါဝါ အရမ်းလှလာတယ် ကျောင်းမှာ ရီးစားတွေ ရနေပီလား ´´ “အာ ကိုကြီးကလဲ ပြောဘူး ရှက်တယ် ´´ “မပြောလဲ သိပါတယ် ဒီလောက် ချောလှတဲ့ ငါ့ခယ်မ နားမှာ ကောင်လေးတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေမှာပဲ ဟုတ်တယ်မလားး´´ “အာ သိဘူး သိဘူး ´´ ဖန်ခွက်ကို ယူပီး လှည့်ထွက်မယ် အလုပ် မင်းဇော် ဝါဝါ ရဲ့ လက်ဖျံကို လှမ်းဆွဲ လိုက်တာ ကြောင့် ဖန်ခွက်က အောက်ကို ပြုတ်ကျသွားတယ် ။ဖန်ခွက်က ကွဲမသွား ခြေသုတ်ခုံပေါ် ကို ကျရောက်သွားတယ် ၊။ ဝါဝါဦး ကို မင်းဇော် ဆွဲ ယူလိုက်တယ် ။ မင်းဇော် ရဲ့ ရင်ခွင် ထဲကို ဝါဝါ ကျရောက်တော့မလောက်ထိ နီးကပ်သွားတယ် ။ “ဟင်…ကိုကြီးးး ဘာလုပ်မလို့လဲ´´ မင်းဇော် ဝါဝါ ကို နဲနဲ ထပ်ဆွဲလိုက်တော့ အပေါ်ပိုင်း ဗလာ ဖြစ်နေတဲ့ မင်းဇော် ရင်ခွင်ထဲကို ဝါဝါ ခေါင်းလေး ရောက်ရှိသွားပီး မင်းဇော်က ဝါဝါ ကို တင်းကြပ်စွာ ဖက်ထားလိုက်တယ် “အို ..ကိုကြီး မလုပ် မလုပ်ပါနဲ့ မကောင်းပါဘူး ´´
“ကိုကြီးးးး မလုပ်ပါနဲ့ မမ သိသွားလို့ ဒုက္ခ ရောက်ပါ့မယ် နော် ´´ “ဝေလေး မသိစေရပါဘူး ကွာ နော် ကိုကြီး စိတ်တွေ ထိန်းမရ ဖြစ်နေပီ ဝါဝါ လည်း တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူတစ်ယောက် ဖြစ်နေပီ ဒီကိစ္စ နားလည်မှာပါနော် ´´ “ဟင်အင်းးးး မသိဘူး ဝါကြောက်တယ် ´´ ဝါဝါ တစ်ယောက် မင်းဇော် ရင်ခွင်ထဲ ရောက်နေပေမယ့် သူမ ရဲ့ ရင်သားတွေ ရှေ့မှာ လက်နှစ်ဘက်ကို ကာဆီးကာ မင်းဇော်ရင်ဘက်နဲ့ မထိ အောင် ကြိုးစားထားတယ်။ မင်းဇော် ရင်ဘက် နဲ့ သူမ ပါး က ထိနေပီးတော့ မင်းဇော်ထံမှ ချွေးနံလိုလို ယောင်္ကျား တစ်ယောက် ရဲ့ ကိုယ်နံ့ က ဝါဝါ နှာခေါင်းထဲ တိုးဝင်လာတယ် ။ ဝါဝါ ရင်ဘက်ထဲ က နှလုံး ခုန်သံတွေကလည်း မီတာ ၁၀၀ ပြေးထားသလို အရမ်းခုန်နေပီ ။ ဝါဝါ့ မှာ ရီးစား ရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် အခုလိုမျိုးကြီးတော့ တခါမှ မနေဖူး ပန်းခြံမှာ ချိန်းတွေ့ လက်ကလေး ကိုင် ပါးလေး နမ်း ရုံ အဆင့်သာရှိသေးတယ် ။
ရုန်းကြည့်တယ် မရ ။ ရုန်းလိုက်တိုင်း ပိုမို တင်းကြပ်လာတဲ့ လက်ကြီးတွေ။ တင်ပါးပေါ်က လက်တွေကလည်း တဖြည်းဖြည်း ဖင်နှစ်ခြမ်း အကွဲ ကြောင်း ထဲ ရောက်လာကာ ပွတ်သပ်လာတော့ ဝါဝါ ရဲ့ အတွင်းပိပိ နေရာ က ရွစိစိ လို ဖြစ်လာပီး အရည်စိုလေး တွေ ထွက်လာသလိုလို စိတ်ထဲ ထင်မိတယ် ။ ဝါဝါ့ ဒူးတွေ ညွတ် ချင်လာသလိုလို အသက်ရှူ မဝတော့သလိုလို ဖြစ်လာတယ် ။ ရုန်းကန် ဘို့ အင်အား တွေ မရှိတော့ ။ ရင်ဘက် နှစ်ခုကြား ရောက်နေတဲ့ ဝါဝါ လက်တစ်စုံ က တဖြည်းဖြည်း လျော့ကျလာပီး မင်းဇော် ရဲ့ ခါး ကို မသိမသာလိုလို ဖက်မိသွားတယ် ။ ဝါဝါ ကျော ကို ဖက်ထားတဲ့ မင်းဇော် ရဲ့ လက်တဘက်ကလည်း တဖြေးဖြေး ပြေလျော့လာပီး လက်နှစ်ဘက်လုံး ဝါဝါ့ ရဲ့ တင်ပါးတွေ ဆီ ကျရောက်လာရင်း ပွတ်သပ်လာတယ် ။
ဝါဝါ မရုန်းတော့ ။ မင်းဇော် ရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲ မှ တဒုန်းဒုန်း ဖြင့် ရင်ခုန်သံတွေ မြန်နေတာကို လည်း ဝါဝါ ကြားနေမိသလို သူမရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေ ကလည်း မင်းဇော် နဲ့ အတူတူ အပြိုင်ခုန်နေတယ် ။ “ကိုကြီးးး ဝါ ကြောက်လာပီကွာ မမ သိသွားမှာ စိုးတယ် ´´ “ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ဝါ ရယ် .. ဘယ်သူမှ မသိစေရပါဘူးနော် စိတ်ချပါနော် ကိုကြီး ဝါ့ ကို ချစ်တယ်ကွာ ´´ ဝါဝါ တစ်ယောက် မင်းဇော် ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲ က နေ မျက်နှာလေး ခွာလိုက်ပီး မင်းဇော် ကို ကြည့်လိုက်မိတယ် ။ မင်းဇော် နဲ့ ဝါဝါ မျက်လုံးချင် ဆုံပီး တခဏတာ အခိုက်အတန့် မှာ မင်းဇော် ရဲ့ နုတ်ခမ်းတွေ က ဝါဝါ့ရဲ့ နုတ်ခမ်းပါးပါးလေး တွေ အပေါ် ကျ ရောက်လာတယ်။ ဝါဝါ့ နုတ်ခမ်းတွေ ကို မင်းဇော် အငမ်း မရ စုတ်နေရင်း နုတ်ခမ်း လွှာ ကြားထဲကို မင်းဇော် ရဲ့ လျှာ က တိုးဝင်လာပီး လျှာဖျားလေး အချင်းချင်း မွှေနှောက် ရစ်သိုင်းလာတယ် ။
နိုင်ငံခြား ကားတွေ ထဲက နမ်းတာ မျိုး ဝါဝါ တစ်ယောက် သိပီးသားမို့ သူမလည်း မင်းဇော် ရဲ့ နုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို ပြန်စုပ်ပေးလိုက်ရင်း လျှာ ဖျားလေးတွေ အချင်းချင်း ထိုးမွှေပေးလိုက်တယ် ။ မင်းဇော် ရဲ့လက်တွေက ထမိန်ပေါ် မှာ ပြေးလွှား ပွတ်သပ်နေရာမှ ဝါဝါ ရဲ့ ထမိန် အထက်ဆင် စ ချည်နှောင်ထားတဲ့ နေရာလေး ကို ကိုင်ကာ ဖြေချလိုက်တယ် ။ ထမိန်က ကြမ်းပြင်ပေါ် ကို ကွင်းလုံး ပုံကျ သွားပီးတဲ့ နောက် ဝါဝါ တင်ပါးပေါ်မှာ ဇာပင်တီ အဖြူရောင်လေး သာ ကျန်တော့တယ် ။ ဝါဝါ ရဲ့ လက်တွေ က လည်း မင်းဇော် ရဲ့ ကျောကုန်းတလျောက် ပွတ်သပ် ရင်း အနမ်းတွေ ပြန်လည် ပေးနေမိတယ် ။ မင်းဇော် ရဲ့ လက်တွေ က ပင်တီ ပါးပါးလေး သာ ရှိတော့ တဲ့ ဝါဝါ ရဲ့ တင်ပါးတွေ ပေါ် ပြေးလွှား နေရင်း လက်တဘက်က ပင်တီ မျော့ကြိုးလေး ထဲ ထိုးဝင်ကာ ဖင် အကွဲ ကြောင်းကြားလေး မှ တဆင့် ဝါဝါ ရဲ့ အဖုတ်နေရာလေး ကို မမှီ မကမ်းလှမ်းနှိုက်လာတယ် ။ လက်ခလယ် ချောင်းလေး က ဝါဝါ ရဲ့ စိုစိစိ လေး ကို စမ်းမိသွားတော့ ဝါဝါ ရှက်သွားရင်း နုတ်ခမ်းတွေ နုမ်းနေတာ ကို ရပ်ကာ မင်းဇော် ရဲ့ ရင်ခွင်ထဲ ကို ခေါင်းဝှက်ထားမိတယ် ။
ဒူးတွေ ကွေးညွှတ်ချင်သလိုလို ဖြစ်သွားတာ မို့ လက်နှစ်ဘက်ကို မင်းဇော် ရဲ့ ချိုင်း အောက်မှ လျှိုသွင်းကာ မင်းဇော် ပုခုံးကို လှမ်းချိတ် ကာ ဖက်ထားလိုက်မိတယ် ။ “အားးး ကိုကြီးးးး ဖြေးဖြေး လုပ်ပါ အားးး´´ “ဝါ့ နေရာလေး က တအား စိုနေပီနော် ´´ “အာ မပြောနဲ့ကိုကြီးရာ ရှက်တယ် ´´ “မရှက်ပါ နဲ့ ဝါရယ် ကိုကြီး ဟာကြီး လည်း တအားတောင်မတ်နေပီ ကိုင်ကြည့် ´´ ဟု ဆိုကာ မင်းဇော်က ခါးမှာ ပတ်ထားတဲ့ တဘက် ကို ဖြေချပစ်လိုက်တယ် ။ မင်းဇော် ရဲ့ လီးကြီး က ချက်ချင်း ရူန်းကြွလာပီး ဝါဝါ့ ရဲ့ ဆီးခုံအထက် ဝမ်းဘိုက်နေရာလေး ကို လာထိတယ် ။ လီးထိပ်မှ အရည် ကြည်လေးတွေက ဝါဝါ့ ရဲ့ ချက်နားလေး ကို လာစိုသွားတယ် ။ မင်းဇော် က ဝါဝါ ရဲ့ လက်တဘက်ကို ယူကာ သူ့ လီးကြီး ပေါ် တင်ပေးလိုက်တယ် ။ ဝါဝါ လက်ကလေး တွေ တဆက်ဆက် တုန်ရင်း မင်းဇော် လီးကြီး ကို ကိုင်ထားမိတယ် ။
လက်ဖဝါးထဲတွင် အပြည့် ဖြစ်သွားတယ် ။ မင်းဇော်လီးကြီး က ခန္ဒာကိုယ် ရဲ့ အပူချိန်ထက် ပိုပူ ပိုနွေးနေသလို ခံစားမိတယ် ။ “ဝါ ကုတင်ပေါ် သွားရအောင်နော် ´´ ဝါဝါ ဘာမှ ပြန်မဖြေမိ ။ မင်းဇော် ခေါ်ဆောင်ရာ ကို လိုက်သွားမိပီ ။ ကုတင်ပေါ် ရောက်တော့ ပက်လက်လေး လှန်ထားတဲ့ ဝါဝါ ရဲ့ ပင်တီ လေးကို မင်းဇော် လှမ်းချွတ်လိုက်တယ် ။ အပျို စဖြစ်ကတည်း က ဘယ်သူ့ ကိုမှ အမြင် မခံဖူးသေးတဲ့ ဝါဝါ ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို မင်းဇော် မြင်သွားပီ။ ဝါဝါ ရှက်တာကြောင် ပေါင်နှစ်ချောင်း ကို လိမ်ကာ အဖုတ်လေး ကို ဖုန်းကွယ်ထားသေးတယ် ။ အဖုတ်ကို သေချာ မမြင် ရပေမယ့် အဖုတ်ပေါ်မှာ အမွှေးတွေ ကို တော့ သေချာ မြင်သွားပီ။ ရှက်လိုက်တာ ။ မင်းဇော်က ဝါဝါ ရဲ့ တီရှပ် အကျီ လေးကို ပါ ခေါင်းမှ နေ၍ ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ ဝါဝါ ပို လို့ ရှက်သွားတယ် ။
အိမ်နေရင်း မို့ ဘော်လီ အဟောင်းလေး သာ ဝတ်ထားမိတဲ့ အဖြစ် ။ ဟုတ်တယ်လေ တခြားယောင်္ကျားလေး မြင်သွားတယ် ထားဦး ဘော်လီ ဘရာဇီယာ အသစ်ကလေး နဲ့ ဆိုတော်သေးတယ် အခု က ချည်သား ခပ်နွမ်းနွမ်း ဘော်လီ လေး သာ ဝတ်ထားတာ မို့ ပိုပီး ရှက်သွား အားနာသွားသလိုပဲ။ မင်းဇော် လက်တွေက ဘော်လီ အနွမ်းလေး ပေါ် မှ နို့တွေ ကို ပွတ်သပ်လာတယ် ။ မင်းဇော် အတွက် ကိစ္စ မရှိ ဘော်လီ နွမ်းနွမ်း ဟောင်းဟောင်း အသစ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူမြင်ချင်တာ က ဘော်လီ အောက်မှ နို့တွေ သာဖြစ်တယ် ။ ဘော်လီ ချိတ်တွေ ကို လှမ်းဖြူတ်မယ်လုပ်တော့ ဝါဝါ ကျောလေး ကို မသိမသာ စောင်းပေးလိုက်မိတယ် ။ မင်းဇော် ဘော်လီ ချိတ်တွေကို ဖြုတ်ပီး ဘော်လီ ကိုချွတ်ပစ်လိုက်ကာ ကုတင်ဘေးသလို့ လှမ်းပစ်လိုက်တယ် “အားးးး ဝါ့ နို့လေးတွေက လှလိုက်တာ ကွာ ´´ ပြောလည်း ပြော နို့သီး တဘက်ကို ကိုင်ပွတ်ရင်း နောက်တဘက်ကို ကုန်းစို့တော့တယ် ။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လျှာလေး နဲ့ ရစ်ပတ်ကာ စို့လိုက်ချိန်မှာတော့ ဝါဝါ လက်မောင်းသားလေးတွေ မှာ ကြက်သီးလေးတွေ ပါ ထသွားတယ် ။
စို့ရင်းစို့ရင်း နဲ့ လက်တဘက်က ဝါဝါ့ ရဲ့ ပေါင်တွင်းသားလေးတွေ ကို လှမ်းအပွတ် “အာ ကိုကြီး ယားတယ်ကွာ ခိခိ ဟိ အားးး ယားတယ်လို့ အဲ့နေရာကို မပွတ်နဲ့ ´´ အဲ့လို ပြောလိုက်မှ မင်းဇော်လက်တွေက ဝါဝါ ရဲ့ ဆီးစပ်နားက အမွှေးတွေပေါ် ကို ပြောင်းပွတ်လိုက်တာ ကြောင့် ပိုဆိုးသွားတယ် “အားးး ကိုကြီးးးး ယားတယ် ဟိ..ဟိ..ဟီးးးး´´ ဝါဝါ တစ်ယောက် တွန့်တွန့်လူး သွားရင်း မင်းဇော် ကို လှမ်းဖက်ထားမိသည် ။ ဖီးလ် တက်နေတာ အရှိန်နဲနဲ လျော့သွားပေမယ့် ဝါဝါ့ ရင်ထဲ မှာတော့ ကြောက်စိတ်တွေ နဲနဲ ပျယ်သွားသလို ရှိကာ မင်းဇော် နဲ့ ပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သွားသလို ခံစားလိုက်ရတယ် ။ မင်းဇော်ကလည်း ဝါဝါ့ရဲ့ ခါးလေးတွေ ပေါင်တွင်းကြောလေးတွေ အဖုတ်အမွှေးနေရာလေးတွေ လျောက်ပွတ်ရင်း ကျီစားလိုက်တယ် ။
“ဟိဟိ ကိုကြီး ယားတယ်လို့ အဲ့လို မစ နဲ့ကွာ..ခစ် ခစ် ခစ် ´´ ဝါဝါ တစ်ယောက် မောလာတယ် မင်းဇော် ကလည်း ဝါဝါ တစ်ယောက်တွန့်လူး နေတာ ကို ကြည့်ပီး ပို သဘော ကျသွားတယ် ။ မင်းဇော် ဝါဝါ့ ရဲ့ နုတ်ခမ်းလေး တွေ အသာ နမ်းစုပ်လိုက်တယ် ။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´ “ပြွတ် ပြွတ် ´´ “ဝါ .. ကိုကြီး လီး ကို ကိုင်ပေးထားနော် ´´ “အာ အဲ့လို ကြီး ထည့်မပြော နဲ့ကွာ ကိုင်ပေးထား ဆိုပီးရောပေါ့ ´´ “ အင်းး ပါ ကိုင် ထားလိုက်နော် ´´ မင်းဇော် လီး ကို ကိုင်လိုက်တယ် ။ ဒစ်ထိပ်နေရာ ကြီးက ဖုထစ်နေတယ် ။ ပီးတော့ လီးတံကြီးကလည်း တဆက်ဆက် တုန်နေသလိုပဲ ။ “ကိုကြီးးး ဝါ အခု လို တခါမှ မနေဖူးဘူး အခုလို နေမိတာ ဝါ့ ကို အထင်သေးမှာလားနော် ´´ “အော်..ဝါ ရယ် ကိုယ့် ခယ်မလေး ကို အထင်သေးပါ့မလား လို့ ´´ မင်းဇော် စကားတွေ ပြောနေရင်း လက်တဘက်က ဝါဝါ့ ရဲ့ နို့သီး ခေါင်လေး တွေ ကို ဆော့ကစား ပေးလိုက်တယ် ။ အပျို နို့သီးခေါင်းလေး မို့ မာမာဆူဆူ လေး ဖြစ်နေတယ် ။ နို့အုံလေးတွေက အစ မာမာ တင်းတင်း ရှိလှတယ် ။
“ကိုကြီး စို့ပေးလေ ´´ “အင်း ´´ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´ “အင်းးးး အင်းးးဟင်းးး´´ ဝါဝါ တစ်ယောက် သူမ နို့ တွေ ကို စို့နေတာ ကို ခေါင်းလေး အသာမတ်ကာ ကြည့်မိတယ်။နို့သီးခေါင်းလေးတွေ ကို လျှာလေးနဲ့ ယက်လိုက် နို့အုံကြီး ကို စို့လိုက်လုပ်နေသော မင်းဇော် ပါးလေး ကို လက်ဖဝါးလေး ဖြင့် အသာ ပွတ်သပ်ပေးရင်း နို့စို့ ခံနေမိတယ် ။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´ “အားးး အင်းးးး´´ “ကိုကြီး …ဝါ့ ရင်ထဲမှာ ဘယ်လို ကြီးလဲ မသိဘူး အဲ့လို မျိုး တခါမှ မခံစားဖူးဘူး ´´ “ပြွတ် ပြွတ် ´´ မင်းဇော် နို့စို့ပေးနေရင်း ဝါဝါ့ ပေါင်ကြား ကို လက်လှမ်းနှိုက်လိုက်တယ် ။ ဒီတစ်ခုတော့ ဝါဝါ ပေါင်ကို စေ့မထား အနည်းငယ် ကားထားပေးလိုက်တယ် ။
လက်ချောင်းလေးတွေ အဖုတ်ပေါ် ရောက်သွားတယ် ဆိုရင်ပဲ မင်းဇော် လက်ချောင်းလေးတွေမှာ စေးကပ်ကပ် အထိ အတွေ့ ရလိုက်တယ် ။အရည်စိုစိုလေးများဖြင့် စေးကပ်ကပ် ဖြစ်နေတဲ့ အဖုတ်လေး ကို အသာ ပွတ်ချေပေးနေမိတယ် ။ အစိက သိပ်မသိသာ မကြီး ။ အဖုတ် ဘေး မှာ သူ့ မိန်းမလို များ အဖတ်ကလေး တွေ တွဲနေသလား လက်ချောင်းလေးများ ဖြင့် ဖြဲကြည့်မိတယ် မရှိ ။အတွင်းသို့ လက်ခလယ်လေး တစ်ဆစ်လောက် နှိုက်လိုက်တော့ အရည်စိုစို တွေ ပိုများနေတယ် ။ စောက်ဖုတ် အတွင်းထဲသို့ လက်ချောင်းလေး အား ဝင်ထွက် ဖြေးဖြေး ချင်းလုပ်ပေးရာမှ တဖြည်းဖြည်း ပိုချောမွေ့လာတယ် “အားးး အင်းးး ကိုကြီး ဖြေးဖြေး အားးး´´ ဝါဝါတို့ ကျောင်းသူတွေ အချင်းချင်း လိင်ကိစ္စ တွေ ပြောဖူးကြားဖူးနေတာ မို့ ဝါဝါ တစ်ယောက် အလိုး ခံပေးရတော့မယ် ဆိုတာလဲ စိတ်ထဲ သိနေတယ် ။သူမရဲ့ အပျိုစင် ဘ၀ ကို လည်း အဆုံးသတ်ရတော့မယ် ။ အခု အပျိုစင်ဘ၀ အဆုံးသတ်ရန်အတွက်လည်း ဝါဝါ အသင့်ဖြစ်နေပီ ။နို့တွေ စုပ်ရင်း အဖုတ်ပွတ်ပေးနေတဲ့ မင်းဇော် ရဲ့ လီး ကြီး ကို ခပ်ကျစ်ကျစ် ဆုပ်ကိုင်ထားမိပီ ။
“အားးး ကိုကြီးးး အားးး အင်းးးး´´ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´ “ဇွိ..ဇွိ …ဇွိ…´´ “အားးးကိုကြီးရယ် အားးးး´´ ဝါဝါ့ စောက်ပတ် မှာ အရည်တွေ အများကြီး ထွက်နေပါပီ ။ စောက်ဖုတ် ကြီး ကို ကော့ကော့ ပေးနေမိရင်း လက်တွေက မင်းဇော် ရဲ့ ခေါင်းမှ ဆံပင်တွေ ကို ပါ ဆွဲစုပ်ကိုင်ကာ နို့သီးတွေပေါ် ကို ဖိဖိ ထားမိတယ် ။တဖြေးဖြေးနဲ့ မင်းဇော် ရဲ့ လက်ချောင်း က တစ်ချောင်းလုံး အဖုတ်ထဲမှာ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် ကလိနေပီ ။ အဖုတ်ရည်တွေကလည်း ပိုပို ရွဲလာတယ် ။ မင်းဇော်လည်း ဘေးတိုက် အနေအထားမှ အဖုတ် နှိုက်နေတာ ကို ရပ်လိုက်ပီး ဝါဝါ့ ကိုယ်ပေါ် ကို အုပ်မိုး ကာ ပေါင်ကြားထဲ ခွဝင်လိုက်တယ် ။ နို့သီးလေး ကို စုပ်ကာစုပ်ကာ ဖြင့် ဖြေးဖြေး ချင်းအောက်ကို လျောဆင်းလာခဲ့ပီ ။တဖြည်းဖြည်း မင်းဇော် ခေါင်းက ဝါဝါ့ ရဲ့ အဖုတ်နားလေး ကို ရောက်လာကာ မင်းဇော် လျှာ ကို အပြားလိုက် ထုတ်လိုက်ရင်း စောက်ဖုတ်မွှေးလေးတွေအပေါ် ကို ယက်ပေးလိုက်တယ် “အားးးး ကိုကြီး မလုပ်ပါနဲ့ ငရဲကြီးလိမ့်မယ် အားးး´´ ဝါဝါ ရုန်းသလိုလုပ်လိုက်ကာမှ ဝါဝါ့ ပေါင်တွေက မင်းဇော် ခေါင်း ကို ညှပ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားကာ အဖုတ်က လည်း ကော့ပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားတယ် ။ မင်းဇော် နှာခေါင်းထဲ ခပ်ရွှန်းရွှန်း အနံတစ်ခု ရလိုက်တယ် ။ ဒါ အပျိုတစ်ယောက် ရဲ့ အဖုတ်အနံ့ ပဲလေ ။မင်းဇော် လက်နှစ်ဘက် ဖြင့် ဝါဝါ့ ပေါင်တွေ ကို ဆွဲကား ပစ်လိုက်တယ် ။ ဟစိစိ အဖုတ်လေး အား သေချာ တွေ့မြင်လိုက်ရပီ ။ ဝါဝါ့ စောက်ပတ် မှာ ပြဲလန်မနေ ဖောင်းဖောင်းကားကားလေး ကြားထဲမှာ အကွဲခြမ်းလေး နှစ်ခု က ဟစိစိ လေး ။ ဟစိစိ အဖုတ် အကွဲလေး ကြားထဲမှာ အစိလေး က မသိမသာ စွာ ပဲရှိနေတယ် ။
အဖုတ်အရည်ကြည်လေးတွေ ထွက်နေတာကြောင့် အတွင်းသားလေးထဲမှာ ပြောင်ချောချောလေး ဖြစ်နေတယ် ။ မင်းဇော် လျှာ ကို အပြာလိုက် ထုတ်လိုက်ပီး အဖုတ်သားလေးတွေကို ယက်ပေးလိုက်တယ် “အားးး ကိုကြီးးးးအားးး´´ “ပလက် ..ပလက် ပလက် “ “အားးကိုကြီး ရယ် ဘယ်လို ကြီးမှန်းမသိဘူးကွာ အားးးး´´ ဝါဝါ့ ပေါင်တွေ က အလိုလို ကားထားမိနေပီး အဖုတ်ကြီး ကိုလည်း ကော့ကော့ ပေးနေမိတယ် ။ အခု လို အဖုတ်ယက်ခံရမယ်လို စောစောကထိ တောင် မတွေး ထားဘူး ။ မင်းဇော်လီးကြီး သာ ထိုးသွင်းမယ်လို့ ထင်ထားခဲ့တာ ။ ဝါဝါ့ အဖုတ် ကို မင်းဇော် ယက်စုပ်လိုက်တိုင်း ဘိုက်ထဲက ကလီစာတွေ အူတွေပါ ပြတ်ထွတ်သွားသလား ခံစားမိတယ် ။
အဖုတ်အယက်ခံရတဲ့ အရသာ ကို ဝါဝါ ကြိုက်သွားပီ ။ တချက်တချက် မင်းဇော် လျှာ ထိပ်ဖျား က အဖုတ်အတွင်းသား ထဲ အထိပါ ရောက်ရောက်လာတယ် ။ ဝါဝါ အဖုတ်ကို ကော့ကော့ ပေးရင်း အယက်ခံနေမိတယ် ။ မျက်လုံးတွေ ကို မှိတ်ထားကာ နုတ်ဖျားမှ လည်း ညီးညူနေမိတယ် “အားးး ကိုကြီးးးးအားးး အင်းးးး´´ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´ “ ပလက် ပလက် ပလက် ´´ “အားး ကိုကြီးရေ အားးးး ´´ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´ “အားးးးရှီးးးးအားးး ´´ ဝါဝါ မရှက်နိုင်တော့ ပါးစပ်မှ လည်း ညည်းညူ ရင်း အဖုတ်ကို အယက်ခံနေမိတယ် “အားးး ကိုကြီးးးး ကောင်းတယ်ကွာ´´ “အွန်းးးး ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´ “အားးး ဟုတ်တယ် အထဲကို ယက်ပေး အားးး´´ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´ မင်းဇော်လက်ကလည်း အဖုတ်ကို ယက်ပေးနေရင်း လက်တွေက အဖုတ်မွှေးတွေကို ပွတ်ပေး ကစားပေးနေလိုက်တယ် ။ “အားးး ကိုကြီး ရေအားးး အားးး´´ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ´´ ခပ်စိစိ အနေအထား မှ သေသေချာချာ လေး ပွင့်အာလာသော စောက်ပတ် အား မင်းဇော် အားရပါးရ ယက်ပစ်လိုက်တယ် .။
စောက်ပတ် တပြင်လုံး အရည်တွေ ရွဲနေပီး မင်းဇော် နုတ်ခမ်းတွင်လည်း အရည်တွေ လည်ချောင်း ထိပါ စီးကျနေပီ ။ ဒီလောက် ရွဲစို ပြောင်ချောနေပီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မင်းဇော် ဝါဝါ့ ကို ပါကင် ဖောက်ရန် အချိန် တန်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်သည် ။ မင်းဇော် စက်ပတ်ကုန်းယက် နေရာ မှ ထကာ ဝါဝါ့ ဒူး နှစ်ချောင်း ကို ဘေးသို့ထောင်ကားလိုက်ရင်း ပေါင်ဂွကြားထဲ နေရာ ယူလိုက်သည် ။ မင်းဇော် လီးကြီး ကလည်း အစွမ်းကုန် မတ်ထောင်နေရင်း ခေါင်းတညိမ့်ညိမ့် ဖြင့် သူရဲ့ လားရာ ကို သွားရန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပီ ။ဝါဝါ့ အဖုတ် ၀ ကို လက်ညိုးလက်ခလယ်လေး ဖြင့် အသာ ဖြဲလိုက်ကာ မင်းဇော် လီးဒစ် ကို အသာ မြုပ်လိုက်တယ် “အားးး ကိုကြီး ဖြေးဖြေးနော် ´´ ဒစ်ခေါင်း အား အဖုတ် အကွဲ ကြောင်း တစ်လျောက် စုန်ချီဆန်ချီ ဖြင့် လေးငါးဆယ်ချက် ပွတ်ဆွဲလိုက်သည် ။ “အားးး ကိုကြီး အ အ အားး´´ လီးဒစ်ခေါင်း ဖြင့် ဖိဆွဲ မိလိုက်သည့် အခါတိုင်း ဝါဝါ့ အစိ လေး က ကျဉ်ခနဲ ကျဉ်ခနဲ ဖြစ်သွားသည် ။
ဘယ်လို့ အရသာ မသိ ။ တခါတလေ ရေသောက်လိုက်တဲ့ အချိန် သွားကြားထဲ ကျဉ် တဲ့ အရသာလေးမျိုး ။ ခံစားလို့လည်း ကောင်းသည် ။ နာကျဉ်သလို ရှိနေသော်လည်း ဆက်ပီး ခံစားချင်နေမိတဲ့ အရသာမျိုး ။ဘယ်အချိန် အတွင်းထဲ ကို တိုးဝင်လာမလဲ ဆိုတာ ကို မျက်စိမှိတ်ထားရင်း ဝါဝါ တစ်ယောက် မျှော်လင့်နေတုန်းမှာပဲ မင်းဇော် ရဲ့ လီးဒစ် ထိပ်ဖျားက ဗျစ်ကနဲ ထိုးခွဲ ဝင်ရောက်လာသည် “အ…အားးးး ´´ မင်းဇော် လက်မောင်း တွေကို လှမ်းဆွဲရင်း ကိုင်ထားလိုက်မိသည် ။ ခန္ဒာ ကိုယ် ကလည်း တွန့်ခနဲ ဖြစ်သွားသည် ။ မင်းဇော် ကလည်း ချက်ချင်းကြီး အထဲ ထိ ထိုးမသွားပါ လီးဒစ် ကိုသာ သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက် ဖြင့်လုပ်နေရင်း အထဲကို ဖြေးဖြေး ချင်း တိုးဝင်သည် ။ တချက်တည်း ဖြင့် အဆုံးထိ မဖြစ် နိုင်မှန်း သိတယ် ။ အထဲကို ကြပ်ကြပ်ညှပ်ညှပ် တိုးဝင်နေရ တာကြောင့် လီးဒစ်ဖျား နှင့် အရေပြား ကြားမှာ လဲ နာကျဉ်မှု ဖြစ်နေတယ် ။ အရည်တွေ တအား ထွက်နေတာ မို့ ချော မွှေ့နေသော်လည်း အဆုံးထိ မသွင်းနိုင်။
ခါးကို အားစိုက်ကာ နှဲ့နှဲ့ သွင်းနေရာက တဖြေးဖြေး နှင့် လီးတစ်ဝက်ကျော် ဝင်လာလေပီ။ “ဗျစ် ဗျစ် ဗျစ် “ “အ ..အာ..အားးး´´ “ဗျစ် ဗျစ် ဗျစ် ´´ “အားးး ကိုကြီး နဲနဲ နာတယ် ´´ “အင်းးး ဝါ ကိုကြီး ဖြေးဖြေး သွင်းနေတယ် နော် ´´ “ဗျစ် ဗျစ် “ “အားးး ကြပ်လိုက်တာ ဝါရယ် ကိုကြီး အဆုံးထိ ထိုးထည့်တော့မယ်နော် ´´ “အင်းးးးအားးးးနာတယ် အားးးအမလေးးးအားးးကိုကြီး´´ နောက်ဆုံး တစ်ချက် မင်းဇော် အားစိုက်ပီး ခပ်ပြင်းပြင်းထိုးခွဲ ပစ်လိုက်သည်။ လီးဒစ်နေရာမှာ ပါ နာကျဉ်သွားလိုပဲ “ဗျစ် ….. ဘွတ် ဖွတ် ´´ “အား နာတယ် နာတယ် အားးးးး´´ မင်းဇော် နဲ့ ဝါဝါ ဆီးခုံချင်း ကပ်ဖိထားလိုက်သည် ။ လီးက အဆုံး အထိ ဝင်သွားပီ ။
သူများတွေပြောသလို မျိုး အပျိုစင် အမှေး ပါးကို ထိုးခွင်းလိုက်ပီ ထင်သည် ။ လီးတံ အဆုံးထိ မရောက်ခင်မှာပင် အထဲက ဒုတ်ခနဲ အသံ မျိုး ခံစားမိလိုက်တယ် ။ လီးချောင်း ကို အထုတ်အသွင်း မလုပ်သေးပဲ အဆုံးထိ သွင်းကာ အမောဖြေနေလိုက်သည် ။ ဝါဝါ ကလည်း မင်းဇော် ရင်ဘက် ကြီး တွေ ကို လှမ်းကိုင်ထားသည် ။ ငါးမိနစ်လောက် အမောဖြေပီးသည့်နောက် “ ဝါ ..ကိုကြီး ဆက်လုပ်မယ်နော် ရရဲ့လား´´ “အင်းးး ဖြေးဖြေး နော် ကိုကြီး နဲနဲ နာနေတယ်´´ “အင်းးး ခနနေ လောက် ဆို အနာ သက်သာ သွားမှာပါ ဝါက အပျိုမို့လို့ နာတာပါ ´´ မင်းဇော် ဝါဝါ့ ရဲ့ ခါးလေး ကို ကိုင်ကာ လီးတံကို ဖြေးဖြေးချင်း ဆွဲထုတ်လိုက်သည် ။ “ဘွတ် ဘွ..ဘွတ်´´ အတွင်းမှ လေအံသံ များ ပါ ထွက်လာသည် ။ ဝါဝါ့ အဖုတ်မှ လေအံသံများ ထွက်သွား သဖြင့် နဲနဲ တော့ ရှက်သွားသည် ။မင်းဇော် လီးတံကို ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက် ဖြေးဖြေး ချင်း လုပ်ပေးနေရာ ဝါဝါ လည်း အတွင်းမှာ ခုနက စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း နာကျဉ်မှု ကို မေ့လျော့လာသည် ခံစားမှုလည်း ကောင်းလာသည် ။ခေါင်းလေး ကို အသာထောင်ကြည့်မိတော့ ဝါဝါ့ အဖုတ် ထဲ ကို လီး ထိုးထိုး ဝင်နေတာ ကို တဝက်တပြက် လှမ်းမြင်နေရသည် ။
“ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် “ “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ´´ “အ အ အာအားးး´´ “ကောင်းရဲ့လား ဝါ ´´ “ အင်း သိပ် မနာ တော့ဘူး ကောင်းလာပီ ´´ “ကိုကြီး မြန်မြန် လုပ်ကြည့်မယ်နော် ဝါဝါ အဖုတ် ကို လှမ်းဖြဲပေးထား နော် ´´ “အာ ကိုကြီးကလဲ´´ “ဝါ နာမှာ စိုးလို့ပါ ´´ မင်းဇော် က ဝါဝါ့ ရဲ့ လက် ကို လှမ်းယူကာ အဖုတ် ပေါ် တင်ပေးလိုက်သည် ။။ ဝါဝါ လည်း အဖုတ် နုတ်ခမ်းသား နှစ်ဘက်ကို သေချာ လေး ဖြဲပေးလိုက်တယ် ။ “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ “အားးးအားးး ကိုကြီးးး အားးး´´ နာကျဉ်မှု ဝေဒနာ မှသည် တဖြေးဖြေး ကောင်းလာပီ။ ဝါဝါလည်း အဖုတ်ကို ပြန်ကော့ပေးနေမိပီ။ “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် “ “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ´´ “အားး ကိုကြီး ကောင်းတယ် အားးး´´ တဖြည်းဖြည်း စောင့်ချက်တွေ က ပိုမို မြန်ဆန်လာသလို ဆီးခုံ နဲ့ ပေါင် နဲ့ ရိုက်သံ တဖတ်ဖတ် အသံတွေ လည်း ဆူညံလာသည် ။ ဤ အသံကပင် လိင်စိတ် ကို ပိုမို နှိုးစွ လာသလိုလို ထင်မိတယ် ။
“အားး ကိုကြီး စောင့်ပေးတော့ ဝါ ခံနိုင်နေပီ အားးးကောင်းတယ် ´´ “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ´´ “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ မင်းဇော် လိုးနေရင်းက ပင်နို့တွေကို ပါ လှမ်းလှမ်းဆွဲသည် ။ မင်းဇော် လက်က ပေါင်တံတွေကို ကိုင်ပီး လိုးသည့် အချိန် ဆို ဝါဝါ ကလည်း သူမ နို့တွေကို သူမ လက်ဖြင့် ပွတ်ချေနေပီ “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ “ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် “ “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ´´ “အားးး အားးအ´´ “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ ပက်လက် လှန် လိုးခံနေသော ဝါဝါ စောက်ပတ်ထဲမှ လီးတံ ကို ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် ။ “အာကိုကြီး လုပ်လေကွာ ဘာလိုချွတ်ပစ်တာလဲ ´´ “ဝါ့ ဖင်ကိုကြည့်ပီး လိုးချင်လို့ ဖင်ကုန်းပေးပါလားနော် လေးဘက်ထောက်လိုက်လေ ´´ “အာ အဲ့လို ကြီး မလုပ်ပေးချင်ဘူးကွာ ´´ “လုပ်ပါ ဝါ ရယ် ဝါ့ ဖင်ကြီး ကို ကြည့်ပီး လိုးချင်တယ်နော် ´´ မင်းဇော် ဝါဝါ့ ကို ခါးမှ ကိုင်ကာ မှောက်ပေးလိုက်ပီး တင်ပါးကြီး ကို အပေါ် ကို ဆွဲယူလိုက်တယ် ။
ဝါဝါ တစ်ယောက် ညင်းနေသော်လည်း ဖင်ကုန်းလျှက် သား ဖြစ်သွားပီ ။ ရှင်းရှင်း ပြောရလျှင် ဝါဝါ အလိုးခံနေရပေမယ့် ဖင်ကြီး ကုန်းမထားချင် ။ ရှက်လည်း ရှက်နေသေးသည် ။ တသက်လုံး ဘယ်သူမှ မမြင်အောင် ဖုံးကွယ် ထားတဲ့ ဖင်ကြီး တပါးသူ ရှေ့မှာ လေးဘက်ကုန်းကြီး ဖြစ်နေသည် ။ အပျိုတစ်ယောက်မို့ အရှက်တော့ မကုန်သေးပါ။ သို့ပေမယ့် အခုတော့ ဖင်ကုန်းလျှက်သား ဖြစ်နေပီ ။ မင်းဇော်ကလည်း ဝါဝါ့ ဖင် နောက် မှ ကျကျ နန နေရာယူပီး လီးဒစ် တံကြီး ကို အဖုတ်ဝမှ တေ့လိုက်သည် ။ လုံးဝန်းသော ဖင်လုံးကြီး ကို ကိုင်ထားရသည်မှာလည်း အနှစ်အရသာ ရှိလှသည် ။အရင်နေ့တွေက ဝါဝါ့ ဖင်ကို ထမိန်ပေါ်မှာ ခိုးခိုး ပီး ကြည့်နေရသည် အခုတော့ ဖင်အဖွေးသား မြင်နေရပီး အခုလိုးနေရသည်မှာ မိမိ ရဲ့ ခယ်မချောချော လေး ဖြစ်နေတာ ကြောင့် မင်းဇော် စိတ်တွေ ပိုထန်နေမိသည် တင်ပါး နှစ်ခြမ်း ပေါ်ကို လက်ဖြင့် အသာ ပွတ်ပေးနေရင်း လီးတံ ကို အဖုတ် ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်သည် ။ အဖုတ် မှာ ရွဲစိုနေတာ မို့ ချောချောချူချူ ပင် ဝင်သွားသည်။ “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ “အ အ အားး ကိုကြီး ဖြေးဖြေး ´´ “အားးးး ဝါ့ ဖင်ကြီး တွေ က မိုက်တယ်ကွာ တုံးခဲနေတာပဲ ´´ “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ´´ “အားးး ကိုကြီး နာတယ် အရမ်းမစောင့် နဲ့ အဲ့လောက် မခံနိုင်ဘူး “ “အားးး ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ´´ “ဘွတ် ဘွတ် ´´ “အားးး ကိုကြီး ကောင်းတယ် အားးး နာတယ် ´´ “အင်းး ကိုကြီး စောင့်လိုးပီနော် အားးး´´ “အင်းး ကိုကြီး လိုး အားးးလိုးးးးကွာ´´ “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ ခယ်မလေး ရဲ့ ဖင်တုံးကြီး ကို ကိုင်ပီးလိုးနေရသဖြင့် မင်းဇော် မထိန်းနိုင်တော့ သုတ်ရည်တွေ ထုတ်ချင်လာပီ။ အထုတ်အသွင်း တအား မြန်လာသည် ရှေ့မှ ဝါဝါ ကလည်း တအား အော်နေသည်။
“ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ´´ “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ´´ “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ “အားးး ဝါဝါ ကိုကြီး ပီးတော့မယ် အားးးး´´ “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ´´ “အားးး ထွက် …ထွက်ကုန်ပီ အားးးး´´ နောက်ဆုံး တစ်ချက် အားကုန် စောင့်လိုက်ကာ လီးထိပ်မှ အရည်တွေကို စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ပန်းထည့်လိုက်တော့တယ် ။။ “အားးး ကိုကြီး အားးးးး´´ မင်းဇော် ရဲ့ ရှိသမျှ အားတွေ အကုန် ဝါဝါ့ အဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်ရသလို အားအင်များ ကုန်ခမ်းသွားကာ လေးဘက် ကုန်းထားသော ဝါဝါ ပေါ် ကို မှောက်လျှက် ကျ သွားတယ် ။ လီးတံ ကြီး ကတော့ အဖုတ်ထဲမှာ ရှိနေဆဲ လီးတံကို ဝါဝါ အဖုတ် အတွင်း မှ ဆွဲ ညှစ်နေသလိုမျိုး ဝါဝါ့ အဖုတ် အတွင်း နံရံများ မှ လှုပ်စိ လှုပ်စိ ဖြစ်နေတယ် ။ ဝါဝါ ကတော့ တတောင်ဆစ် ထောက်ကာ မင်းဇော် ကိုယ်လုံးကြီး ကို ထိန်းထားရင်း ပီးဆုံးသွားတဲ့ အရသာ ကို ကောင်းကောင်းခံစားနေတယ် ။ အဖုတ်အတွင်း ထဲမှာ လည်း ပူနွေးနွေး အထိ အတွေ့ က ဘယ်အရာနှင့်မျှ မတူသော အထိ အတွေ့မျိုး ။ ငါးမိနစ်လောက် ငြိမ်နေအပီးမှာတော့ ဝါဝါက “ကိုကြီး ဆင်းတော့ကွာ ဝါ လေးလာပီ´´ မင်းဇော် ဘေးသို့ခန္ဒာကိုယ် ကို လှဲချလိုက်သည် ။ အဖုတ်ထဲ မှ လီးတံကြီးက ပလွတ် ကနဲမြည်သံ နဲ့ ကျွတ်ထွက်သွားတယ် ။ ဘေးမှာ ပက်လက်လန်လျှက် အနေအထား ဖြစ်သွားတော့ မှ ဝါဝါ စောင်းငဲ့ကြည့်မိသည် ။
လီးတံ ထိပ်မှာ လဲ အရည်တွေ ရွဲစို ပြောင်လက်နေသည် ။ ဝါဝါ အဖုတ်ကို လိုးပစ်လိုက်တဲ့ လီးကြီး ဝါဝါ အခု မှ သေသေချာချာ ကြည့်မိသည် ။ မနဲမနော ကြီး လှသည် ။ ဒီလီး ကြီး အဖုတ်ထဲမှာ အဝင်အထွက်ချောမွတ်နေတာကို ဝါဝါ အံ့သြ မိတယ် ။ ဝါဝါ ကုတင်ပေါ်မှာ ဆင်းကာ ရေချိုးခန်းမှာ သန့်ရှင်းရေသွားလုပ်ဘို့ ပြင်လိုက်သည် ။အခန်းထဲမှာ ရှိတဲ့ ရေချိုးခန်းမှာပဲ ပဲ သန့်စင်လိုက်တယ် ။ အဖုတ်အား ရေထိလိုက်တော့ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ခံစားရသည်။ သူမ အပျို မဟုတ်တော့ ။ မှန်ထဲမှ ဝါဝါ့ မျက်နှာ ကို ကြည့်မိရင်း ဝမ်းနည်းသလိုလိုလည်း ဖြစ်မိသလို အထိအတွေ့ မှာ လည်း သာယာမိသည် ။ ရေချိုးခန်းမှ တဘက်အဖြူ ကြီးကို ကိုယ်မှာ ပတ် ကာ အခန်းထဲ ပြန်ဝင်လိုက်တော့ မင်းဇော်က မှေးနေတုန်း “ကိုကြီး ထတော့လေ ရေချိုးတော့ ထမင်းပြင်ထားလိုက်မယ်နော် အတူတူ စားမယ် နေ့လည်း ၁နာရီတောင် ထိုးတော့မယ် ´´ ဝါဝါ က မင်းဇော် ကို လှုပ်နှိုးလိုက်တယ် “အင်းးးး ´´ မင်းဇော် မျက်စိ ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပီး “ဝါ အရမ်းလှတာပဲ ချစ်တယ် ´´ လက်မောင်းလေး ကို အသာဆွဲယူကာ ပါးလေးအနမ်းတစ်ချက် လှမ်းပေးလိုက်တယ် ။ ဝါဝါ အခန်းထဲမှ အဝတ်အစားများ ကို ကောက်ယူကာ ထွက်သွားတယ် ။ မင်းဇော်လည်း အိပ်နေရာမှ ထကာ ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်ရင်း ရေပန်းအောက်မှာ ဆယ်မိနစ်လောက်ရေချိုးလိုက်တယ် ။
ထမင်းစားခန်းထဲကို ထွက်လာလိုက်တော့ ဝါဝါက ထမင်းစားပွဲ မှာ အသင့်စောင့်နေတယ် ။ “မိန်းမ ဘာဟင်းတွေ ချက်ထားတုန်း ချစ်လေး ´´ “ကိုကြီး နော် ဘာမိန်းမ လဲ မမကြီး သိသွားမှ ဟုတ်ပေ့နော် အနေအထိုင် ဆင်ခြင် ´´ “ကိုကြီး နဲ့ ဝါဝါ တူတူ နေပီးသွားပီ ဆိုတော့ ဝါဝါလည်း ကိုကြီး မိန်းမ ဖြစ်သွားပီလေ´´ “သွားပါ လာ ဝါလည်း ဘိုက်ဆာနေပီ စားတော့ ´´ ထမင်းစားရင်း တစ်ယောက်တလဲ ခွင့်ကျွေးလိုက်ကြသေးသည်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဝါဝါ လည်း ပျော်ပါတယ် ။ စိုးရိမ်စိတ်တော့ ရှိတာပေါ့ အခု လို အပျိုစင် ဘ၀ ကို ပေးလိုက်ရတာက တအိမ်တည်းနေတဲ့ မိမိ ရဲ့ ခဲအိုလေ ။ ထမင်းစားပီး တော့ ဧည့်ခန်းမှာ တီဗီ ထိုင်ကြည့်ကြတယ် ။ ဝေမာလှိုင်က လေး နာရီလောက်မှ ပြန်ရောက်မှာ ဆိုတော့ အေးအေးလူလူ ပဲ နေဖြစ်တယ် ။ မင်းဇော်က နို့သီးလေးတွေ ကို ပွတ်ချေပေးရင်း စကားတွေ ပြော ၊ ဝါဝါ ကလည်း မင်းဇော် ရင်ခွင်ထဲမှာ အသာ မှီထားတယ် ။
“ဝါ နာနေသေးလား ´´ မင်းဇော် က ဝါ့အဖုတ်နေရာလေး ကို ကိုင်ကာမေးသည် “အင်း သိပ်တော့ မနာတော့ပါဘူး ခုန ကတော့ တအားနာတယ် ´´ “အင်းး နောက်ဆို လုပ်ရင်းလုပ်ရင်း မနာတော့ဘူးလေ ´´ “ဟင် ..ကိုကြီးက ခနခန လုပ်မှာလား မမ သိသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ´´ “မသိအောင် လုပ်မှာပေါ့ မမ ကျောင်းသွားတဲ့ အချိန် ဝါ အတန်းအားတဲ့ အချိန် တွေမှာလုပ်မယ်နော် ´´ “ကိုကြီး ဝါလေကြောက်နေတယ် မမသိသွားရင် ပြသနာပဲနော် ´´ “အင်း ပါ မသိစေရပါဘူး ဝါ တခါမှ အလိုးမခံဘူးသေးဘူးထင်တယ်နော် ကြပ်နေတာပဲ ဝါ့ အဖုတ်လေးက ´´ ဝါဝါ မျက်စောင်းလှလှ တချက်ထိုးရင်း မင်းဇော်ပေါင်ကို လက်သည်း နှင့် ဆိတ်လိုက်ကာ “ခုန က အတူတူ နေပေးတာ မသိဘူးလား လုပ်ဖူးလားမလုပ်ဖူးလား ဆိုတာ အခု ကိုကြီးက ပထမဆုံးပဲ ´´ “အင်း သိပါတယ် ဝါ့ ရဲ့ အပျို ရည်ကို ယူလိုက်ရလို့ ကိုကြီး အရမ်းဝမ်းသာတယ် အရင်ကတည်း က ဝါ့ ဖင်ကြီး တွေကို ကြည့်ပီး လုပ်ချင်နေခဲ့တာ ကြာပီ ခိုးခိုးကြည့်နေရတာ ´´ “သွား ကိုကြီး မကောင်းဘူး တော်တော် ဆိုးတယ် ´´ လက်သည်းဖြင့် မင်းဇော် ရဲ့ လီးတံလေး ကို သာသာ လေး ပုဆိုးပေါ် မှ ဆွဲ ဆိတ်လိုက်တယ် “အားးးး နာလိုက်တာ ´´ “သူကျတော့ နာတတ်တယ် သူများကျတော့ တအားလုပ်တယ် ထပ်ဆိတ်ဦးမယ် ရော့ ရော့ရော့ ´´
“အားးးး မလုပ်နဲ့ အားးးနာတယ် နာတယ် ´´ ဝါဝါ့ လက်ကိုဖမ်းဆွဲ ရင်း ပုဆိုးကို ဖြေလိုက်ကာ လီး တံ ကိုကြည့်လိုက်တယ် လက်သည်း နဲ့ ဆိတ်လိုက်ကာမှ လီးတံ က ထောင်လာတယ် ။ “ဝါ လုပ်လိုက်လို့ ချက်ချင်း ထလာပီနော် ပီး မှ အဆိုး မဆို နဲ့ ´´ “ကိုကြီး နာသွားလား ´´ မင်းဇော် လီးတံ ကို လာကိုင်ရင်း ဝါဝါ မေးလိုက်တယ် “မနာပါဘူး စတာပါ “ “ကိုကြီး လီးကြီးက အကြီးကြီးပဲနော် ´´ ရင်ခွင်ထဲမှ နေ၍ ဝါဝါ မင်းဇော် လီး ကို သေချာ ကြည့်မိလိုက်တယ် ။ ဒစ်ကြီး က လည်း ကားထွက်နေတာပဲ လီးတံ ကြီးက သူမ လက်ထဲမှာ အပြည့် ။ ခုနက တုန်းက ဒီလီးကြီး သူမ စောက်ဖုတ်ထဲကို ဝင်သွားခဲ့တာ အံသြမိတယ် ။
ထိုင်နေတာတောင် လီးတံကြီး က အပေါ် ကို ထိုးထောင် ထွက်နေတယ် ။ လီးတံပေါ်မှာ အရေပြားလေးတွေက ပျော့ပျော့လေး မို့ ဝါဝါ ဖြေးဖြေး လေး ဆွဲကြည့်ရင်းဆော့ကစားကြည့်လိုက်တယ်။ “အဲ့လို မဆွဲရဘူး ဝါ ရဲ့ လီးတံကို သေချာကိုင်ဆုတ်ထားပီး အပေါ်အောက် ဆွဲရတယ် အပေါ် ကို ဆွဲလိုက်ရင် လီးဒစ် ကို အရေပြား က ဖုံးသွားအောင်ဆွဲ ပီးရင် အောက်ကို ပြန်ဆွဲချ လီးဒစ် ပေါ် လာတဲ့ အထိ ဆွဲချ အဲ့လို လုပ်ပေးရတယ် အဲ့ဒါ ကို ဂွင်းတိုက်တယ်လို့ ခေါ်တယ် ´´
“အော် အော် … ယောင်္ကျားတွေ ဂွင်း တိုက်တယ် ဆိုတာတော့ ကြားဖူးတယ် ဘယ်လိုလုပ်တာ လဲ မသိတာ အခု မှ သဘော ပေါက်တယ်အဲ့လို လုပ်တော့ ကောင်းလို့လားဟင် ကိုကြီး ´´ “ကောင်းတာ ပေါ့ ဝါကလဲ ကိုကြီး တို့ စိတ်ထဲ ရှိတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက် ကို မှန်းပီး အဲ့လို ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ် ဂွင်းတိုက်ရင်း အဲ့ဒီမိန်းမ ကို လိုးရတယ်လို့ မှန်းပီး လုပ်တာ ကြာကြာလုပ်လိုက်ရင် ခုနက ဝါ နဲ့ လိုးသလို ပဲ လီးရေ တွေ ပန်းထွက်သွားတာပေါ့ ´´ “အော် အဲ့လိုလားးးး ´´ “အင်း အခု ဝါ ကိုကြီး ကို အဲ့လို လုပ်ပေးကြည့်လေ ´´ “အင်းးးလုပ်ပေးကြည့်မယ်နော် ´´ ဝါဝါ က မင်းဇော် လီး ကို ကိုင်ကာ ရှေ့ တိုး နောက်ဆုတ် သူမလက်ကလေး နဲ့ ဂွင်းတိုက်ပေးတော့တယ် ။
“အားးး ကောင်းတယ် ဝါရယ် အားးးး ဖြေးဖြေး အောက်ထိ တအားကြီး မဆွဲ နဲ့ ´´ “အင်းးး ဒီလိုလားး´´ “အင်း ဟုတ်တယ် ဖြေးဖြေး မှန်မှန်လေး အားးးဟုတ်တယ် ´´ ကြာကြာ မသင်ပေးလိုက်ရ ဝါဝါ ဂွင်း သေချာ တိုက်ပေးတတ်လာတယ် “ဝါ ဒီအတိုင်းကြီး ဆိုတော့ ပူတယ် နာတယ် တံတွေး လေး နဲနဲ လက်မှာ စွတ်ပီးလုပ် ´´ “အာ ကိုကြီးကလဲ ရွံ့စရာကြီး ´´ “ရွံ့ စရာ မဟုတ်ပါဘူး ဝါ ရဲ့ သူများတွေ ဆို လီးတောင် စုပ်ပေးကြသေးတာပဲ ဝါ့ မမ ဆိုလည်း ကိုကြီး လီး ကို စုပ်ပေးတာပဲ ဝါ့ အဖုတ် ကို လည်း ကိုကြီး ယက်ပေးတာပဲလေ ´´ “ဟင် တကယ် ကိုကြီး လီးကြီး ကို မမ က စုပ်ပေးတယ်ပေါ့ ´´ “အင်း ပေါ့ မယုံလို့လား မယုံ ရင် ညကျ ရင် ကိုကြီး အခန်း တံခါးလေး ဟ ထားမယ် လာကြည့် ´´ “အာ ကြည့်ရဲဘူး မမ သိသွားမှာ စိုးတယ် ´´ “မသိအောင် တိတ်တိတ်လေး လာပေါ့ ကိုကြီး အခန်းမီး ဖွင့်ပီး လုပ်မယ် လာကြည့်နော် ´´ “အင်းးး ´´ မင်းဇော် လီးကို ကိုင်ကာ ဂွင်း ဆက်ထုပေးလိုက်သည် ။ “ကိုကြီး ဟာကြီးက တဖြည်းဖြည်း ပိုပို ကြီးလာသလိုပဲနော် မာတောင့်တောင့်ကြီး “ “အင်းး စုပ်ကြည့်ပါလား ဝါ “ “ဟာ….. ကိုကြီးကလဲ ဝါမှ မစုပ်တတ်တာ “ “လာ ကိုကြီးသင်ပေးမယ် ပေး ဝါ့လက်လေး “ မင်းဇော် က ဝါဝါ ရဲ့ လက်ချောင်းလေး ကို ဆွဲယူလိုက်ပီး သူ့ ပါးစပ်ထဲ ထည့်လိုက်တယ် ။ ပီးတော့ လျှာလေး နဲ့ပွတ်လိုက် စုပ်ပြလိုက် လုပ်ပြလိုက်တယ် ။ လီးတံကို စုပ်နေတဲ့ ပုံစံမျိုး ဝါဝါ့ လက်လေး ကို စုပ်ပေးလိုက်တယ် ။ “အဲ့လိုလေး စုပ် ရလား လုပ်တတ်လား “ “အင်း စမ်းကြည့်မယ်လေ “ “အင်း .. လာ ထ ဝါ က အောက်ကနေ ထိုင် ကိုကြီး က ဆက်တီပေါ် မှာ ထိုင်ပေးမယ် “ ဝါဝါ လည်း မင်းဇော် ရင်ခွင်ထဲမှ ဆင်းကာ အောက်မှာ ထိုင်လိုက်သည် ။
မင်းဇော် လီးတံ နဲ့ ဝါဝါ နုတ်ခမ်း နဲ့ တစ်တန်း တည်း ဖြစ်သွားတယ် ။ မင်းဇော် လီး ကို စုပ်ပေးဘို့ မဝံ့မရဲ ဖြစ်နေသည် ။ “ငုံ့ လိုက်လေ ဝါ “ “အင်းးးး …“ ခေါင်းလေး ငြိမ့်ပြလိုက်ရင်း မင်းဇော် လဒစ်ခေါင်းကြီးအား ဝါဝါ နုတ်ခမ်းလေး အသာဖွင့်လိုက်ကာ ငုံကြည့်လိုက်သည် “အားးး နွေးသွားတာပဲ ဝါ ရယ် ခုနက ကိုကြီး လုပ်ပြသလိုလေး စုပ်ကြည့်လိုက် “ ဝါဝါ က ခေါင်းလေး တစ်ချက် ငြိမ့်ပြလိုက်က လဒစ်ကို တပြွတ် ပြွတ် ဖြင့် စုပ်ကြည့်လိုက်သည် လီးဒစ် တစ်ဝိုက်ကို လျှာဖျားလေး နဲ့ ရစ်သပ် ပေးလိုက်သည် “အားးးး ကောင်းတယ်ဝါ ဝါက တတ်လွယ်သားပဲ ကောင်းတယ် စုပ် လက်တစ်ဘက်က ကိုကြီး ဥတွေကို ကိုင်ထား လီးတံ အရင်း ထိ ဆွဲ စုပ်ပေး အားးး ကောင်းတယ် “ သူမ စုပ်ပေးနေတာ ကို ကျေနပ်ကာ ကောင်းနေသည်ကို တွေ့လိုက်တော့ ဝါဝါ ပျော်သလိုလို ခံစားမိတယ် ဒီထက်ကောင်းအောင် စုပ်ပေးလိုက်ပစ်တယ် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အင်းးး အင်းးး ကောင်းတယ်ဝါ အားးးးရှီးးးးး “ အောက်ကို ဝဲကျနေတဲ့ ဝါဝါ့ ဆံပင်တွေ ကို စုပီး ကိုင်ပေးလိုက်ကာ ဝါဝါ လီးစုပ်နေတာကို သေချာချာ ကြည့်လိုက်မိတယ် ။ လရေဝင်ရင် အသေခင်တယ် ။ မိန်းမ စက်ပတ် တစ်ကြိမ် လီးဝင် နောက်ထပ် တစ်သက်စားမကုန် ။ ခယ်မ ဆိုတာ လိုက်ပွဲ ။ ဆိုတာလေးတွေ တွေးကြည့်လိုက်တော့ လည်း ဟုတ်သလိုလို ပဲ လို့ မင်းဇော် တွေးမိလိုက်တယ် ။
အကြိမ်ကြိမ် လိုးချင်စိတ်တွေကို ထိန်းခဲ့ရတာ ဒီနေ့တော့ ခယ်မလေး ဝါဝါ အလိုးခံရုံတင်မဟုတ် သူ့လီးကို အားရပါးရ စုပ်ပေးနေပီ ။ ဝါဝါ စုပ်ပေးနေမှ လီးတံ ကြီးကလည်း ပိုပို တောင်လာသလိုလို ရှိလာသည် ။ “ကောင်းတယ်ဝါ …အားးး အောက်က ဥလေးတွေကို ပါ ယက်ကြည့် “ ပါးစပ်ထဲ မှ လီးတံကို ချွတ်လိုက်ပီး အောက်က ဥလေးတွေကို ယက်ကြည့်လိုက်သည် ။ ပျော့စိစိလေး နဲ့ အသည်းယားစရာ ။ လျှာဖျားလေး နဲ့ အလျားလိုက် ယက်ကြည့်သည် ။ ဥလေးတွေကို ငုံစုပ်ကြည့်သည် “ပလက် ပလက် ပလက် ပြွတ် “ “အားးးး “ “ကောင်းလား ကိုကြီး “ ဝါဝါက ခေါင်းလေး အသာမော့ပီး မေးလိုက်သည် ။ “အရမ်းကောင်းတယ် ဝါ … ဝါ့ အကျီတွေ ချွတ်လိုက်ကွာ ကိုယ်လုံးတီးလေး နဲ့ ကိုကြီး လီး စုပ်နေတာလေး ကြည့်ချင်တယ် “ ကိုယ်ပေါ်က စွပ်ကျယ်လေးကို ချွတ်လိုက်ရင်း ပြောလိုက်သည် “ကိုကြီး ချွတ်ပေး ….“ “အင်းး… ထ “ ဝါဝါ ကို ဆွဲ ထူလိုက်ပီး အကျီရော ထမိန်ရော ချွတ်ပေးလိုက်သည် ။
ဝါဝါက နို့တွေကို လက်တစ်ဘက်နဲ့ ကာထားပီး နောက်လက်တဘက်က အဖုတ်လေး ကို အုပ်ထားသည် “လက်ကြီး မကာထားပါနဲ့ ဝါရယ် “ “ရှက်တယ် “ “မရှက်ပါနဲ့ ဝါ ရယ် ခန က ပဲ တခါ လိုးပီးသား ကို ဝါ့ ကို အခုလို ကိုယ်လုံးတီးလေး နဲ့ စိတ်ထဲ မှာ ခနခန မြင်ယောင်ကြည့်နေခဲ့တာ အခု လို မြင်ရတော့ စိတ်ထဲ တွေးထားတာ ထက်တောင် လှနေသေးတယ် “ “တကယ်လားးး အာ့ ဆို ဝါ ကျေနပ်တယ် …“ လက်လေးတွေ ကို ဖယ်ပေးလိုက်ပီး မင်းဇော် နုတ်ခမ်းလေး ကို ဝါဝါ လှမ်း နမ်းပေးလိုက်တယ် ။ နှစ်ယောက်သား မတ်တပ်ရပ်ရင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဖက်ကာ အနမ်းတွေ ဖလှယ်လိုက်ကြည် ။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ ထို့နောက် မင်းဇော်က ဝါဝါ ရှေ့မှာ ထိုင်ချလိုက်တော့ မင်းဇော်မျက်နှာနဲ့ ဝါဝါ အဖုတ်က တစ်တန်းတည်း ဖြစ်သွားသည် ။
တင်ပါး နှစ်ဘက်ကို လှမ်းကိုင်ကာ အဖုတ်ကို လျှာနဲ့ ယက်ပေးလိုက်သည် “အားးး ကိုကြီး ရယ် “ ပေါင်လေး အနည်းငယ် ကားလိုက်ကာ မင်းဇော် ခေါင်းကို ကိုင်လိုက်ရင်း အဖုတ်လေး ကို ကော့ပေးလိုက်မိသည် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးးး ရှီးးးး ကိုကြီးးးး “ “ပြွတ် ပြွတ် ပလက် ပြွတ် “ “အားးး အမလေးးးး အားးးး“ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အ အ အ အ ကောင်းတယ်ကိုကြီး အ ဟူးးးးး အားးးး“ “ပြွတ်ြ ပွတ် ပြွတ်“ “အားးး ကိုကြီး အားး ချစ်တယ်ကွာ အားးးး“ မင်းဇော်က အဖုတ်ကို ယက်နေရင်းမှ ဝါဝါ့ ကို ကိုယ်တစ်ပါတ် လှည့်စေလိုက်ကာ ဝါဝါ့ တင်ပါးနှစ်ခြမ်း ကို နေရာ အနှံ နမ်းပေးလိုက်သည် ။
ထို့နောက် တင်ပါး နှစ်ခြမ်းကို ဖြဲလိုက်ကာ တင်ပါး နှစ်ခြမ်းကြား လျာ အပြားလိုက် ထည့်ရင်း အထက်အောက် ယက်ပစ်လိုက်သည် “အားးး ကိုကြီး အာ့ ဖင် …ဖင်ကြီး အားးးး“ “ပြွတ် ပြွှတ် ပြွတ် “ ဝါဝါ့ ဒူးတွေ မခိုင်ချင်သလို ဖြစ်လာကာ ရှေ့မှ ဆက်တီ စားပွဲ ပေါ် လက်လှမ်းထောက်လိုက်သည်မို့ မတ်တပ်ရပ်ကာ ဖင်ကုန်းပေးလိုက်သည့် အနေ အထားဖြစ်သွားသည် ။ ပေါင်ကလည်း ပိုကား လာပီး နောက်မှ မင်းဇော်က တင်ပါး နှစ်ခြမ်းကြား အသားကုန် ယက်ပေးတော့သည် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပလက် ပလက် ပြွတ် “ “အားးး ကိုကြီး ရယ် ချစ်တယ်ကွာ အားးးး“ ညိုတိုတို စအိုပေါက်လေးမှာ လည်း ပွစိပွစိဖြင့် မင်းဇော် ရဲ့ လျာအောက် ရောက်နေရသည် “အားးး ကိုကြီး တက်လိုးပါတော့ အားးး ဝါ မနေတတ်တော့ဘူး အားးး အမလေးးးး “ “အင်းးး ဝါ အဲ့ဒီအတိုင်းနေ ခါးလေး နဲနဲခွက်ထား ဆက်တီစားပွဲကို သေချာကိုင်ထားနော် ကိုကြီး နောက်က နေ မတ်တပ်ရပ်ပီး လိုးမယ် “ “အင်းးး ကိုကြီးးး “ မင်းဇော်လည်း ဝါဝါ နောက်မှ နေရာ ယူလိုက်ပီး လီးတံကို အဖုတ် ၀ မှာ တေ့လိုက်သည် ။
အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းမှာ တင် နှစ်ယောက်သား ကိုယ်လုံးတီး ချွတ်ပီး ခယ်မလေး ရဲ့ ဖင်ကို ကျကျ နန ကိုင်ကာ အဖုတ်ထဲ လီး ထိုးသွင်းလိုက်သည် အရည်တွေ ထွက်နေတယ် ဆိုပေမယ့် အဖုတ်ထဲ လီးဝင်သွားသည်မှာ စီးစီးပိုင်ပိုင် ရှိလှသည် ။ မန္တလေးထိုးမုန့်ကို ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားပြီးမှ ကိုက်ဝါးလိုက်သည့်ပမာ အိစိစိ ဖြင့် သွားဖုံးမြုပ်သွားသလို ခံစားလိုက်ရသည် ။ “အားးး ဝါ့ အဖုတ်လေး က ကြပ်ကြပ်လေး အီးးးး အားးးးး “ “အားးး ကောင်းတယ် ကိုကြီး ခုနက လိုးတာ ထက်ကောင်းတယ် ဝါ ခံနိုင်တယ် ဆောင့်ပေး“ “အင့် အင့် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ “ဗျစ် ဗျစ် ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် “ “အင့် အင့် အင့် ရော့ ရော့ အားးးး “ မိန်းမ မရှိစဉ် အိမ်မှာ ခယ်မ နဲ့ ခဲအို ရဲ့ လိုးသံတွေ အော်သံတွေက ဆူညံထွက်နေသည် တင်ပါးတွေကို ဖျစ်ညှစ်လိုက် နို့တွေ ကို လှမ်းဆွဲလိုက်ဖြင့် စည်းချက် ညီညီ ဆောင့်လိုးပေးနေလိုက်သည် ။ “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် “ “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ “အအ အ အ အ အားးး ရှီးးး“ ခယ်မလေး ကို ကိုယ်လုံးတီး ချွတ်ပီး လိုးနေရတဲ့ အရသာ ကြောင့် မင်းဇော်လီးက အပြတ်အသတ် မာထန်နေသေည် ။ “ဒုတ် ဒုတ် ဖုတ် ဖုတ် ဖတ် ဖတ် “ “အ အ အားးး ကောင်းတယ် အားးး ဆောင့်ပါ အားးးး“ “အင့် အင့် အင့် အင့် “ “အားးး အားးးးးးး အမလေးးးး “ အချက် နှစ်ဆယ်ကျော်လောက် ထပ်ဆောင့်လိုက်ပီး လီးတံကို ချွတ်လိုက်သည် ။
ထို့နောက် ဝါဝါ့ကို ဆွဲ ထူလိုက်ကာ မင်းဇော်ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ခိုင်းလိုက်ပြန်သည် ။ “ချစ်လေးး လီးစုပ်ပေးကွာ “ “အာ ကိုကြီး လီးမှာ အရည်တွေ နဲ့“ “ဝါ့ စောက်ဖုတ်က အရည်တွေပဲ ဘာလဲ ရွံလို့လား ကိုကြီး ဝါ့ အဖုတ်ကို ယက်တော့တောင် အရည်တွေ ပေသေးတာပဲ ယက်ပေးနော် “ မင်းဇော် ပြောလိုက်တော့လည်း ဟုတ်သလိုလို ။ ဟုတ်တယ် ကိုယ့် အဖုတ်က ထွက်တဲ့ အရည် ဘာရွံ့ ရမှာလဲ လို့ စိတ်ထဲ တွေးလိုက်ပီး မင်ဇော် လီး ကို ဆွဲ စုပ်ပစ်လိုက်သည် ။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးး ကောင်းတယ် ချစ်လေး ရယ် “ “အားးးး “ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “ကြိုက်လား ချစ်လေး “ “အု အု “ ခေါင်းလေးငြိမ့်ပီး ပြန်ဖြေသည် ။ ပါးစပ်ထဲ လီး ရောက်နေသည်မို အု ..အု ဖြင့်သာ အသံထွက်လာသည် ။ မင်းဇော်လည်း ဝါဝါ့ ခေါင်းလေးကို ကိုင်လိုက်ပီး ပါးစပ်ထဲကို အဖုတ်လိုးသလို ဖြေးဖြေးလေး အသွင်း အထုတ်လုပ်ပေးလိုက်သည် ။
“ပလွတ် ပလွတ် ပလွတ် ပလွတ် “ “အားးးရှီးးးး “ “အားးး ကောင်းလိုက်တာ ဝါ ရယ် “ “ပလွတ် ပလွတ် “ ပါးစပ်ထဲမှ လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပီး ဝါဝါက မော့ ကြည့်ကာ “အသက်ရှူကြပ်လာပီ ကိုကြီး … “ မေ့စေ့မှာ လရေတွေရော သွားရေ တွေရော ပေကျံနေသည် ။ ဝါဝါ့ ကို ဆွဲထူလိုက်ပီး နုတ်ခမ်းလေး ကို အသာ စုပ်နမ်းလိုက်သည် ။ ထို့နောက် ဝါဝါ့ ပေါင်တစ်ချောင်း ကို လက်တစ်ဘက် ဖြင့် မလိုက်သည် ။ ခြေထောက်တစ်ချောင်းက ခပ်ကွေးကွေးလေး အပေါ်သို့ ပါလာသလို နောက်တစ်ဘက်က ခြေဖျားလေး ထောက်လာသည် ။ လက်တွေက မင်းဇော် လည်ဂုတ်ကို သိုင်းဖက်ထားလျှက်သား ။ မင်းဇော် လည်း လီးတံကို အဖုတ်ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်က လက်ကို တင်ပါးတွေပေါ် တင်ထားလိုက်ပီး ထိန်းပေးကာ မတ်တပ်လိုးသည့် အနေအထား ဖြစ်အောင်လုပ်ကာ ဖြေးဖြေးချင်း ညှောင့်ပေးလိုက်သည် “အားးး ကိုကြီးးး “ တင်ပါးတွေကို ဖျစ်ညှစ်ပေးရင်း ဆောင့်ဆောင့် လိုးပေးလိုက်သည် “အင့် အင့်အင့်အင့် “ “အားးး ကောင်းတယ် ကိုကြီးရယ် “ မျက်လုံးလေး မှေးစင်းကာ မင်းဇော် နုတ်ခမ်းတွေကိုမမှီ တမှီ လှမ်းဆွဲစုပ်သည် ။
မတ်တပ်ရပ်လိုးတာ ကြာကြာတော့ မလိုးနိုင် ဆယ်မိနစ်လောက် နေတော့ ဒူးတွေ ညွှတ်ချင်လာသည်မို့ ဝါဝါက ကြမ်းပြင်မှာ လေးဘက်ကုန်းလိုက်ပီး မင်းဇော်က နောက်မှ ဒူးထောက် အနေအထားဖြင့် ဆက်လိုးသည် ။ အပျိုဖြန်းလေး ဝါဝါ မှာ မင်းဇော်ရဲ့ လီး အရသာ ကို တွေ့ရှိသွားပီး ဖင်ကြီးကို ထောင်နေအောင် ကုန်းပေးရင် အလိုးခံသည် ။ မင်းဇော်ကလည်း ဝါဝါ အဖုတ်ကို လိုးနေရင်းမှ ဖင်ပေါက်လေးကို လည်း လက်မလေး ဖြင့် ပွတ်ပေးနေသဖြင့် ဝါဝါတစ်ယောက် လူးလှိမ့် ခံစားနေရသည် ။ “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ “အ အ အ အ အားးး“ “အင့် အင့် အင့် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဖတ် ဖတ် “ “အားးးးး ကိုကြီး ဝါ ပီးတော့မယ် အရမ်းကောင်းနေပီ ဆောင့်လိုးပေး အ အ အားးးး“ “အင့် အင့် အင့် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် “ “အ အ အ အ အားးးးး “ အချက်နှစ်ဆယ်လောက် ဆက်တိုက် ဆောင့်လိုးပေးလိုက်ပီး ဝါဝါ့ဖင်ကြီးတွေကို မင်းဇော်လီးတံ အဆုံး ဖိသွင်းကပ်ထားလိုက်ကာ လရေတွေဖြောကနဲဖြောကနဲ ပန်းထုတ်လိုက်လေတော့သည် ။ ဝါဝါ အပေါ်မှာ မင်းဇော်က ထပ်လျှက် ကြမ်းပြင်ပေါ် လဲကျသွားလေသည် ။ မင်းဇော်လီးတံကြီးက ဝါဝါ့ ဖင်ကြားထဲမှာ ကပ်လျှက် နှစ်ယောက် အသက်ရှူသံတွေက မြန်ဆန်နေကြပီး အတိုင်းသား ကြားနေရသည် ။ အပျိုမလေး ဝါဝါ .. ခဲအိုဖြစ်သူ အား ပန်းဦးချွေခွင့် ပြုလိုက်သလို ခယ်မလေးအား မယားငယ်အဖြစ်သို့ ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့် မင်းဇော် အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်မိလေသည်
နောက်ရက်တွေ မှာ အလုပ်တွေလည်း ရှုပ် ဝေမာလှိုင် လည်း မလစ် သည်မို့ ဝါဝါ နဲ့မင်းဇော် တွေ့ ဘို့ အဆင်မပြေဖြစ်နေခဲ့သည် ။ အိမ်မှာ ဝေမာလှိုင် ရှိနေချိန်တွေမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စကားအပြောအဆိုက အစ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ မရိပ်မိအောင် နေနေ ရသည် ။ မျက်လုံးချင်း ဆုံချိန်မှာ ဝါဝါ ရဲ့ မျှော်လင့်ချက် မျက်ဝန်းလေးတွေ ကို တွေ့နေရသေးသည် ။ တစ်ရက်တည်းသာ လိုးခဲ့ ပီး နောက်ရက်တွေ တွေ့ ဘို့ အခွင့်မသာသည်မို့ မချင့်မရဲ ဖြစ်နေရသည် ။ နီးလျှက်နဲ့ ဝေးနေရသည် ။နေ့လည်ပိုင်းတွေ မှာလဲ မင်းဇော်က အလုပ်ရှုပ်နေသည်မို့ အခြေအနေ မသာ ခဲ့ ။ ည ဘက်တွေမှာ တော့ ဝေမာလှိုင် နဲ့ပဲ တစ်ရက်ကျော် တခါလောက် လုပ်ဖြစ်သည် ။ သူတို့ လိုးနေကြသည်ကို လည်း ဝါဝါ လာလာ ချောင်းကြည့်သည် ။ တံခါးပိတ်ထားလျှင် အပြင်မှာ လိုးသံတွေကို နားထောင် နေမိသည် ။ ဘယ်နေ့ အခွင့်သာမလဲ စောင့်ဆိုင်း ရင်း ဝါဝါ တစ်ယောက် မျှော်လင့် နေမိသည် ။ ဒီလို နဲ့ သာ တစ်ပတ် ကျော်သွားသည် ။ ဘာမှ မထူး ။ ကျောင်းမှာ စာသင်နေလည်း ဒီစိတ်ပဲ အမြဲ တောင့်တ နေမိသည် ။ ကျောင်းမှာ ဝါဝါ့ ကို လိုက်နေ့တဲ့ ကောင်လေး တွေကို လည်း အခု တလော ဘယ်လို မှ စိတ်ထဲ မထားနိုင် ။ ယခင်က ဆို သူ့ နောက် လိုက်စကားပြောတဲ့ ကောင်လေးတွေကို ပြေပြေပျစ်ပျစ် ပြန်ပြောတတ်ခဲ့ပေမယ့် အခုတလော ရှောင်နေမိသည် ။ မင်းဇော်ကို ပဲ စိတ် ထဲ စွဲနေမိသည် ။
ဒီနေ့ မနက် ရှစ်နာရီ အတန်း စ ချိန် ကတည်း စိတ်ထဲ မှာ မင်းဇော် အကြောင်းသာတွေး မိနေတယ် ။ ရှေ့က တီချယ် စာသင်နေတာ ကို လည်း စိတ်မဝင်စား ။ စာသင်ဘို့လည်း စိတ်မပါတော့ သည်မို့ ကိုးနာရီလောက်ကျတော့ အိမ်ပြန်မယ် စိတ်ကူးကာ အတန်း ထဲက ထွက်လာခဲ့လိုက်သည် ။ အတန်းအပြင်ရောက်တော့ လွယ်အိတ်ထဲမှ ဟန်းဖုန်းလေး ထုတ်ကြည့်လိုက်မိတော့ မှ စိတ်လှုပ်ရှားသွားရသည် ။ ကိုကြီး မင်းဇော် ထံမှ miss call တွေ အများကြီး ဝင်ထားသည် ။ ခုနက ဖုန်း အသံ ပိတ်ထားသည်မို့ မသိလိုက် ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု နဲ့ အတူ ချက်ချင်း ဖုန်းပြန်ခေါ်လိုက်သည် ။ ဖုန်းက တော်တော် နဲ့ မဝင် ။ “လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော ဖုန်းမှာ မအား သေးပါ သဖြင့် “ နဲ့ချည်း တိုးနေသည် ။
ဆက်တိုက် ပြန်ခေါ်နေရင်း “တူးးးးးးးးး တူးးးးးးးးး “ “ဟဲလို ဝါလား “ “ဟုတ် ကိုကြီး “ “ဝါ ကိုကြီး ဒီနေ့ အားတယ် ဝါ ကော အားလား အပြင်မှာ တွေ့မယ် ကျောင်းကို လာခေါ်မယ် အတန်း ဖျက်ခဲ့လို့ရမလား “ “အခု ပဲ ကိုကြီး ကို လွမ်းနေတာ စာထဲ စိတ်မပါတာ နဲ့ အိမ်ပြန်မယ်ဆိုပီး နေမကောင်းဘူး အကြောင်းပြပီး အတန်းထဲက ထွက်လာတာ ပျော်လိုက်တာ ကိုကြီးရယ် ဝါ လည်း သတိရနေတာ “ “ဒါဆို ကိုကြီး ခန နေ လာခေါ်မယ်နော် ကျောင်း နားမှာ စောင့်နေ“ “ဟုတ် ကိုကြီး ချစ်တယ် စောင့်နေမယ်နော် မကြာနဲ့ “ “အင်းပါ ချစ်လေးရဲ့ မကြာဘူး ဒါပဲနော် အာဘွား… ချစ်တယ် “ “ဟုတ် ကိုကြီး အာဘွား “ “တူ တူ တူ တူ “ တစ်ဘက်က မင်းဇော် ဖုန်းချသွားသည် အထိ နားနဲ့ ကပ်ပီး နားထောင်နေမိသေးတယ် ။ ဝါဝါ ပျော်သွားသည် ။ ခုနကလို မှိုင်တိုင်တိုင် မဟုတ်တော့ ပျော်ရွှင် သွက်လက်ကာ ကျောင်းအပြင်သို့ လှမ်းထွက်လာလိုက်သည် ။ ကျောင်းအပြင် ခရေပင်နားမှ အုတ်ခုံလေးမှာ ထိုင်လိုက်ရင်း လွယ်အိတ်ထဲမှ နုတ်ခမ်နီဘူးလေး ထုတ်ကာ ဆိုးလိုက်သေးသည် ။
အိပ်ဆောင်မှန်လေး ဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်ရင်း ဆံပင်တွေကို လည်း သပ်ရပ်စွာ ပြင်ဆင်လိုက်သေးသည် ။ သိပ်မကြာလိုက်ပါ မင်းဇော် ရဲ့ ကားလေး ဝါဝါ့ ရှေ့ ထိုးစိုက်လာသည်မို့ ကားပေါ် ချက်ချင်း တက်ခဲ့လိုက်သည် ။ ကားပေါ်သို့ ဝါဝါ ရောက်လာသည် နှင့် ဝါဝါ့ လက်ကလေး ကို မင်းဇော်က လှမ်းဆွဲ ကိုင်လိုက်ပီး “လွမ်းလိုက်တာ ဝါ ရယ် နီးလျှက်နဲ့ ဝေးနေရတယ် ဒီနေ့ ကိုကြီး အလုပ်တွေ တမင် ဖျက်ခဲ့ပီး ဝါ့ ဆီ ဖုန်းဆက်နေတာ ဝါက ဖုန်းမကိုင်တော့ စိတ်ထဲ တမျိုးကြီး ဖြစ်နေတယ် “ “စာသင်နေလို့ ဖုန်းပိတ်ထားတာကိုကြီးရဲ့ ဝါလည်း သတိရနေတာပါ ကဲပါ တစ်နေရာ သွားလေ “ “ကိုကြီး ဟော်တယ် ဘိုကင်ယူထားတယ် ဒီနေ့ တစ်နေ့လုံး နေမယ် စိတ်ကူးထားတယ် “ “ဟုတ်ကိုကြီး မောင်းလေ “ ကားလေး ကျောင်းရှေ့မှ မောင်းထွက်လာလိုက်သည် ။
“ဝါ …“ “ရှင် … ကိုကြီး “ “ချစ်ရဲ့လား “ “ကိုကြီးကလဲ ချစ်တာပေါ့လို့ “ “နေဦးဝါ မေးစရာရှိသေးတယ် ဝါတို့ မိန်းကလေး အဝတ်အထည်ဆိုင် ကောင်းကောင်း တစ်နေရာ လမ်းညွှန်ပေး“ “ဘာလုပ်မလို့လဲ ကိုကြီးကလဲ “ “ဝါ့ အမ ဝေ နဲ့ ကိုကြီး လိုးတဲ့ အခါ သူ့ကို ကျောင်းဆရာမ ဝတ်စုံလေး ဝတ်ခိုင်းပီး ခနခန လိုးဖြစ်တယ် အခု ဝါ့ ကို ကျတော့ စိတ်ထဲ အခြားဝတ်စုံတစ်ခု နဲ့ အာသီသ ရှိနေတယ် “ “ဟင် .. ဝါ က ဘယ်လို ဝတ်ရမှာလဲ “ “ဘစ်ကနီလေး နဲ့ မြင်ချင်တယ် အောက်ခံပင်တီလေးကို တစ်ချောင်းကြိုး ဂျီစတင်းလေး နဲ့ ဝတ်ရမယ် “ “အော် … အဲ့လိုလား ဝတ်ပြမယ်လေ *** လမ်းထိပ်နားက *** ဆိုင်ကိုမောင်း “ “အင်းးး ကားဒက်ရှဘုတ်ထဲမှာ ကိုယ်ကြီး ပိုက်ဆံအိတ်ရှိတယ် ယူသွား နှစ်စုံလောက် ဝယ်ခဲ့ “ “ဟုတ် … “ “အနီတစ်စုံ အမဲ တစ်စုံ ဝယ်လာခဲ့နော် “ “ဟုတ်ကဲ့ ပါ ရှင် … “ ဝါဝါ လမ်းညွှန်ပေးသော ဆိုင်ရှေ့ ရောက်တော့ ကားရပ်ပေးလိုက်ပီး ကားပေါ်ကပဲ စောင့်နေလိုက်သည် ။ ဆယ်မိနစ်လောက်နေတော့ အထုတ်ကလေး ဆွဲပီး ဝါဝါ ပြန်ထွက်လာကာ ကားပေါ် တက်လိုက်သည် ။
ကားပေါ်ရောက်တော့ အထုတ်ကလေး ကို လက်နဲ့ မြှောက်ပြလိုကပီး “ အနီအနက် နှစ်စုံဝယ်လာတယ် အဆစ် အနေနဲ့ ဇာစတော်ကင်လေး နှစ်ထည်ပါ ဝယ်လာတယ်နော် ကိုကြီး “ “ဟုတ်လား မိုက်တာပေါ့ “ ပါးလေး ကို သာသာလေး လိမ်ဆွဲလိုက်ပီး ကားကို ဆက်မောင်းလာကာ ဘိုကင် ယူထားသော ဟော်တယ် သို့ ရောက်လာခဲ့တော့သည် ။ ဟော်တယ် အခန်း သော့ယူကာ ပိုက်ဆံရှင်းပီး ဝါဝါ့ ပုခုံးလေး ကို ဖက်ကာ အခန်းရှိရာသို့ တက်လာခဲ့လေသည် ။
အခန်းထဲ ရောက်တာနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဖက်ကာ အနမ်းတွေ ဆက်တိုက်ပေးကြသည် ။ ငါးမိနစ်ကျော်ကျော်လောက် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နမ်းနေရင်းမှ နှစ်ယောက်သား ခွာလိုက်သည် ။ ထို့နောက် ဝါဝါက ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ဘီယာပုလင်းလေး ထုတ်ပေးလိုက်ပီး “ကဲ ကိုကြီး ဘီယာသောက်ရင်း ထိုင်စောင့် အဝတ်အစားလဲလိုက်ဦးမယ်နော် “ “အိုခေ ပါ ချစ်လေးးး “ ခုနက ဝယ်လာသော အထုတ်လေး ယူကာ ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်သွားလေသည် ။ မင်းဇော်လည်း ဘီယာသောက်လိုက်ရင်း တီဗီ ကို ဖွင့်ကာ လိုင်းပြောင်းလိုက်သည် ။ ဒီဟော်တယ်မှာ မင်းဇော် ခနခန တည်းဖူးနေကျ ။
ရှင်းရှင်း ပြောရလျှင် ကေတီဗီ က စော်လန်းလန်းလေးတွေ ဘာတွေ ကို တခါတခါ ညှို့ပီး ဒီဟော်တယ် မှာ တည်းနေကျ ။ ဟော်တယ် ရဲ့ တီဗီ လိုင်းထဲမှာ အောကား ပြတဲ့ မူဗီ လိုင်း တစ်ခု ဖွင့်ပေးထားသည် ။ အောကားမူဗီလိုင်း သို့ ချိန်လိုက်တော့ ဂျပန် အောကား ပြနေသည် ကို တွေ့လိုက်သည် ။ အသံ ကို တိုးထားလိုက်ရင်း စီးကရက်လေး ခဲရင်း ဘီယာသောက်ကာ ထိုင်စောင့်နေလိုက်သည် ။ မကြာပါ ရေချိုးခန်း တံခါးလေး ပွင့်သွားပီး အထဲမှ ဝါဝါ ထွက်လာသည် ။
“အိုးးးးး မိုက်တယ် ချစ်ရယ် “ ဝါဝါက ရှက်ပြုံးလေး ပြုံးလိုက်ရင်း “လှ လား ကိုကြီး “ “အင်းး အရမ်းလှတယ် “ အနီရောင် ဘရာဆီယာ အနီရောင် ကြိုးတစ်ချောင်းဂျီစတင်းလေး နှင့် အောက်မှ ခြေထောက်မှာတော့ အနက်ရောင် ဇာ စတော်ကင်လေး ဝတ်ထားပီး အင်္ဂလိပ်အောကားတွေ ထဲ မှ ဆော်တွေ ဝတ်ထားသလိုမျိုးလေး ဖြစ်ကာ လှပနေသည် ။ ဝါဝါ က ကိုယ်ကို တစ်ပတ် နှစ်ပတ် လှည့်ပြလိုက်သေးသည် “တကယ့် ဆက်ဆီပဲ ချစ်လေး ရယ် “ မင်းဇော် ထိုင်နေရာသို့ ကြွကြွရွရွ လမ်းလျောက်လာကာ မင်းဇော်ပေါ်သို့ ခွထိုင်လိုက်သည် ။ ထို့နောက် မင်းဇော် လက်ထဲ မှ သောက်လက်စ စီးကရက်လေး ကို လှမ်းယူလိုက်ကာ မင်းဇော် နုတ်ခမ်းမှာ တေ့ပေးလိုက်သည် ။ မင်းဇော်ကလည်း စီးကရက်ကို ရှိုက်ဖွာလိုက်ကာ မီးခိုးတွေကို ဝါဝါ့ ရင်ဘက်ဆီသို့ မှုတ်ထုတ်ပေးလိုက်သည် “ဖူးးးးးးးးးးး “ “ဒီနေ့ ကိုကြီး စိတ်ကြိုက် ဝါ့ ကို ချစ်ပေး ကိုကြီးချစ်သလောက် ဝါ အချစ်ခံမယ်နော် “ “ဒီနေ့မှ မဟုတ်ဘူး နောင်အချိန်တွေလည်း ချစ်ပေးမှာပေါ့ ဝါ ယောင်္ကျား မယူနဲ့ ကိုကြီး တို့ နဲ့ပဲနေ ဝေ မသိအောင် ဝါ့ ကို တစ်သက်လုံးခိုးချစ်ပေးမယ် “ “ဟွန်းးးး ပြောတာပဲ တစ်ပတ်တောင်ကျော်ပီ အိမ်မှာ ဝါ့ နားတောင် မကပ်ပဲနဲ့များ “ “ဝေ ရိပ်မိသွားမှာ စိုးလို့ပါ ချစ်ရဲ့ ကိုယ့်ခယ်မလေး ကို ချစ်ပေးချင်တာပေါ့ အများကြီး ချစ်ချင်တာပေါ့ ဒီမှာ ကြည့်ပါလာ လီးတောင်နေပီ “ “ဟုတ် ဝါ့ ကို တော့ မေ့မထား ပါနဲ့နော် “ “မမေ့ပါဘူး ချစ်လေး ရယ် “ “ဝါ ကိုကြီး ကိုချစ်တယ် “ ဝါဝါ့ နုတ်ခမ်းလေး ကို စွဲ စုပ်လိုက်ရင်း လက်တွေက တင်ပါးပေါ် ဖျစ်ညှစ်လိုက်တယ် ။
တစ်ချောင်းကြီး ဘောင်းဘီလေး ဝတ်ထားတာမို့ တင်ပါးတွေက အတိုင်းသား ။ ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားထဲမှာ ကြိုးလေးက မြုပ်နေသည် ။ “မနက်ဖြန် ကျောင်းသွားရင် ဒီ ဒီလိုလေးပဲ အတွင်းက ဝတ်သွား ဝတ်ထားလား မဝတ်ထားလား ကျောင်းသွားခါနီး ဝေ့ အလစ်မှာ စမ်းကြည့်မှာနော် “ “အင်းပါ ကိုကြီးရဲ့ ကိုကြီး ဝတ်စေချင်ရင် ဝတ်သွားမှာပေါ့ “ “ကဲ ကိုကြီး ကို ဖင်လေး လှုပ်ပီး လမ်းလျောက်ပြပါဦး မော်ဒယ်လေး လိုပေါ့ “ “လျောက်ပြမှာပေါ့ “ မင်းဇော် ပေါ်မှ ဆင်းလိုက်ကာ တင်ပါးလေး လှုပ်ပီး လမ်းလျောက်ပြသည် ။ အပျို မို့ ဘိုက်သားလေးတွေကလည်း ချပ်ရပ်နေသည် ။ မင်းဇော်က သူ့ အဝတ်အစားတွေ ကို ချွတ်ပစ်လိုက်ပီး လီးတံကို ဂွင်းထုရင်း ဝါဝါ့ရဲ့ အလှတွေကို ခံစားနေသည် ။ စောက်ဖုတ် နေရာတွင် တြိဂံ လေးသာ ဖုံးနေပီး တင်ပါးနေရာမှာတော့ ကြိုးလေး သာ နေရာယူထားသည်မို့ ဝါဝါ့ရဲ့ အလှအပတွေက ပေါ်လွင်လွန်းလှနေသည် ။ ရင်သား ထွားထွားတွေမှာလဲ ဘရာဇီယာ အတွင်းမှ လျှံထွက်ကျတော့မလား ထင်ရသည် ။ ဝါဝါ့ ထံသို့ လျောက်သွားလိုက်ပီး တင်ပါးလေး ကို ကိုင်လိုက်သည် ။ ဝေမာလှိုင်ကို ဆရာမ ဝတ်စုံလေး နဲ့ လိုးခဲ့သလို ဝါဝါ့ ကိုတော့ ဘစ်ကနီလေး နဲ့ လိုးမည် ။ ဝါဝါ့ ကို နောက်မှ သိုင်းဖက်လိုက်ပီး လက်တွေက ရင်သားတွေကို ကိုင်လိုက်ကာ နောက်မှ ဖင်ကြားထဲတွင် လီး တံ ကို အမြှောင်းလိုက် ကပ်ထားလိုက်သည် ။
လည်ဂုတ်သားလေးကို “ပြွတ် “ကနဲနမ်းစုပ်လိုက်ပီး “ချစ် … ကုတင်ပေါ် တက်ပီး ဒီဘက်လှည့် လေးဘက်ကုန်းလိုက် “ ဝါဝါ ကလည်း မင်းဇော် ခိုင်းသမျှ တသွေမတိမ်း လိုက်လုပ်သည် ။ ကာမဆန္ဒတွေ တက်ကြွနေသည်မို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပျိုလေး ဆိုတာကိုပင်မေ့နေသလိုပင် ။ မင်းဇော်က ဝါဝါကုန်းနေတဲ့ ရှေ့မှာ ရပ်လိုက်တော့ လီးတံနဲ့ ဝါဝါ့ မျက်နှာ နဲ့ က တစ်တန်းတည်း ဖြစ်သွားတယ် ။ ခေါင်းလေး မော့လာတဲ့ ဝါဝါ့ မျက်နှာရှေ့မှာ မင်းဇော်လီးကြီး တရမ်းရမ်းလှုပ်ခါနေတယ် ။ လီးဒစ်ဖျားလေး ကို နုတ်ခမ်း ၀ မှ တေ့ပေးလိုက်တာနဲ့ နုတ်ခမ်းဖူးလေးက ပွင့်အာလာပီး ဒစ်ဖျားလေးကို ငုံစုပ်လိုက်တယ် “ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးးး “ ဒစ်ဖျားကို လျာနဲ့ရစ်သပ်ကာ ဖင်ကုန်းပီး စုပ်တော့သည် ။ “အားးး ကိုကြီး ခယ်မလေး က ဘယ်ဆိုးလို့လဲ တစ်ခါပဲ အတွေ့ အကြုံရှိသေးပေမယ့် စုပ်တတ်လာပီ အားးး ကောင်းတယ် “ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ ဖင်သားလေး ကို လှမ်း ပွတ်ပေးလိုက်ရင်း လက်ဖဝါးလေး နဲ့ စပ်ကနဲ ရိုက်လိုက်တယ် “ဖန်းးး “ “အု ……“ ဖင်လေးကော့သွားပီး လူကရှေ့သို့ တိုးလိုက်သလို ဖြစ်သွားတာမို့ လီးတံကလည်း ပါးစပ်ထဲ တိုးဝင်လာတယ် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “နောက် တခါ အလိုးခံရင်လည်း အခုလိုပဲ ဝတ်ပီး အလိုးခံရမယ်နော် “ ဝါဝါ လီးစုပ်ရင်း ခေါင်းငြိမ့်ပြသည် ။
ဂျီစတင်း ကြိုးလေးကို လှမ်းဆွဲလိုက်ပီး ကြိုးကို လျော့လိုက်တင်းလိုက်လုပ်ပေးလိုက်တော့ ဖင်ပေါက်နေရာလေးကို ကြိုးလေးက ပွတ်ပေးနေသလိုဖြစ်သွားတာမို့ ဖင်လေး ကော့ကော့ တတ်လာသည် ။ ဝါဝါ့ စိတ်ထဲ တွင် အမဖြစ်သူ ဝေမာလှိုင် လီးစုပ်နေသည်ကို မြင်ယောင်မိကာ စိတ်တွေ ပိုမိုကြွတက်လာပီး မင်းဇော်လီးကို အဆက်မပြတ် စုပ်ပေးနေမိသည် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးး ကောင်းတယ်ကွာ “ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးး ကောင်းလိုက်တာ ဝါ ရယ် ဝါတို့ ညီအမနှစ်ယောက်လုံး လီးစုပ်တာ ကောင်းတယ် “ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပလက် အု အု အု ပြွတ် “ “လီးကြိုက်လား ချစ်လေး “ ပါးစပ်မအားသဖြင့် မေးသမျှ ခေါင်းပဲ ငြိမ့် ပြနေမိသည် ။ ပါးစပ်ထဲ မှ လီးတံ ကို ဆွဲချွတ်လိုက်တော့ ဝါဝါ့ မေးစေ့မှာ အရည်တွေ ရွဲနစ်နေသည် “ချစ်လေး ဟိုဘက်လှည့်လိုက် “ လေးဘက်ထောက်ရင်း ဖင်ကိုမင်းဇော်ဘက်ကိုလှည့်ကာ ကုန်းထားလိုက်သည် ။
မင်းဇော်က ဒူးထောက်လိုက်ပီး ဝါဝါ့ တင်ပါးတွေ အနှံ့ လျာနဲ့ လိုက်ယက်သည် ။ “အားးးး ရှီးးးး“ “ပလက် ပလက် ပလက် ပြွတ် “ ထို့နောက် ဖင်ကြားထဲမှ ကြိုးလေးကို ဘေးသို့ ဆွဲဖယ်လိုက်ကာ စအိုပေါက်လေးကို လျာနဲ့ အပြားလိုက်ယက်ပေးလိုက်သည် ။ စအိုပေါက်မှာ အေးခနဲ ခံစားလိုက်ရသည်မို့ အတွေ့ထူး တစ်ခု ရရှိလိုက်ပီး ဖင်လေး ကော့တက်သွားသည် “အားးး ကိုကြီးးး အီးးး ဟင့် အင့် အင်းးးး“ “ပလက် ပလက် ပလက် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးး ကိုကြီးရေ အားးးး “ “ဝါ ရှေ့က တီဗီမှာတွေ့လည်း ဂျပန်မလေး ဖင်အယက်ခံနေတာ အခု ဝါ့ ကို အဲ့လို လုပ်ပေးနေတယ် ကောင်းလား ခေါင်းလေးထောင်ကာ ရှေ့က တီဗီ ကို လှမ်းကြည့်မိတော့ တီဗီထဲမှ ဂျပန်မလေး ကလည်း ဖင်လေး ကုန်းပီး အယက်ခံနေသည် ကို တွေ့လိုက်ရသည် ။ “ပလွတ် ပလွတ် ပလက် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးးကိုကြီးးး အားးးးရှီးးး အမလေးးးး အားးး လားးလားးး “ “ပလက် ပလက် ပြွတ် “ “အားးး ကိုကြီး ရယ် လိုးပါတော့ မခံစားနိုင်တော့ဘူး အားးး“ “ပြွတ်ြ ပွတ် “ “ကဲ လိုးတော့မယ် အချစ်လေး ဖင်ကော့ထား ခါးလေး ခွက်ထား အင်းးး ဟုတ်တယ် အဲ့လိုမျိုးးး “ ပင်တီကြိုးလေးကို ဘေးသို့ ဆွဲဖယ်လိုက်ပီး လီးတံ ကို အဖုတ်မှာ တေ့လိုက်သည် ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ခုနက ယက်ပေးထားတဲ့ စအိုပေါက်လေးကို ပါကင်ဖွင့်လိုက်ချင်တာ ။ဝါဝါ ကြောက်သွားမည်စိုးတာကြောင့် အဖုတ်မှာပဲ လီးတပ်လိုက်သည် ။ မိမိလက်ခုပ်ထဲက ရေ ဖြစ်နေသည်မို့ ဘယ်အချိန် ဖြစ်ဖြစ် ဖွင့်လို့ရနေပီမို့ နောက်တခါမှ ဖင်ချမည် စိတ်ကူးလိုက်သည် ။
“ထည့်ပီနော် ဝါ “ “အင်းးးး “ “ဘွတ် …. ပလွတ် “ “အားးးးးး ဝင်သွားပီ ကိုကြီးးး အားးး အ အမလေးးးး ကောင်းလိုက်တာ “ “အွန့် အွန့် အွန့် ဝါ့ စောက်ပတ်ကို ကိုကြီးလီးနဲ့လိုးနေပီ အားးး ကောင်းလိုက်တာ ညီမလေးးး အားး အချစ်လေး အားးး အင့် အင့် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် “ “အားး ကြိုက်တယ်ကိုကြီးးး လိုးပါ ဝါ့ အဖုတ်ကို လိုးပါ ကိုကြီး ချစ်တယ် အားးး ကိုကြီး စိတ်ကြိုက် ဝါ့ အဖုတ် ပြဲတဲ့ အထိ လိုးကွာ အားးး အမလေးးး “ “ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် “ လက်တစ်ဘက်ကလည်း ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် လုံးလုံးဝန်းဝန်း နို့အုံလေး ကို လှမ်းချေလိုက်သေးသည် “အားးး ကိုကြီးရယ် ကောင်းလိုက်တာ “ “အင့် အင့် အင့် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် “ “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ “အားးး အီးးး အားးး အမလေးးး “ “ဖွတ် ဖွတ် ဘွတ် ဖွတ် “ “အားးး အချစ်လေး ထလိုက် နံရံမှာ လက်ထောက်ပီး ဖင်ကော့ပေး ဘရာဇီယာတွေ ဘောင်းဘီတွေ ချွတ်လိုက် “ “အင်း ကိုကြီး “ ဝါဝါ လည်း မတ်တပ်ရပ်ကာ ဘရာဇီယာ နဲ့ ပင်တီ ကို ချွတ်လိုက်ပီး အခန်း နံရံမှာ လက်ထောက်ပီး ဖင်ကော့ပေးလိုက်သည် ။ မင်းဇော်လည်း နောက်မှ နေရာ ယူပီး နို့ အုံတွေကို ဆွဲကိုင်က ဆောင့်လိုးတော့သည် “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် “ “အားးး ထိတယ် ကိုကြီးရယ် အားးး“ “ကိုကြီးလီး ကြိုက်လား အင့်အင့် အင့်“ “အားး ကြိုက်တယ် လိုး အားး မညှာနဲ့တော့ကွာ ဆောင့်လိုးပေး“ “အင့်ကွာ အင့် အင့် အင့်ကွာ ရော့ အင့် “ “ဘွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ “ဖုတ် ဖုတ် ဖုတ် ဖုတ် “ အချက်လေးငါးဆယ် ဆောင့်လိုးပေးလိုက်ပီး ညှောင်းလာတာနဲ့ “ဝါ ထိုင်လိုက် လီးစုပ်ဦး “ ဝါဝါလည်း မင်းဇော်ဘက်ကို လှည့်ပီး ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်တယ် ။
အို … မင်းဇော်လီးမှာ အရည်တွေ ရွဲနစ်နေတယ် ဖြူပျစ်ပျစ် အရည်တွေ ဒါ… သူမစောက်ဖုတ်မှ အရည်တွေပေါ့ အားးး “ပလွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ ဝါဝါ အရည်တွေ စိုနေတဲ့ လီးတံကြီးကို စုပ်ပေးလိုက်တယ် “အားးး ကောင်းတယ်ကွာ “ “ပလက် ပလက် ပြွတ် “ “ဝါ .. လျာထုတ်စမ်း လီးနဲ့ လျာ ကို ရိုက်ပေးမယ် “ “အင်းးး “ ဝါဝါ လျာလေး ထုတ်ပေးလိုက်တော့ မင်းဇော်က လီးတံကို ကိုင်ပီး ဝါဝါ့ လျာ ကို တဖတ်ဖတ် နဲ့ရိုက်သည် ။ ပါးနှစ်ဘက်ကိုလည်း လီးတံနဲ့ ဘယ်ပြန်ညာပြန် ရိုက်လိုက်သေးသည် “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ “အားးး ရှီးးးး “ “လရေသောက်ချင်လား ဝါ “ မင်းဇော် အပြောကြောင့် သူ့အမဝေမာလှိုင် လရေတွေ မျိုချခဲ့သည်ကို ပြန်မြင်ယောင်သွားပီး ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်သည် “ပါးစပ် ဟ ထား ဝါ ကိုကြီး ဂွင်းထုပီး လရေ ထည့်ပေးမယ် “ “အင်းးး “ ပါးစပ် ဟထားသော ဝါဝါ့ ရှေ့မှာ မင်းဇော် သူ့လီးသူ ကိုင်ပီး အဆက်မပြတ် ဂွင်းထုလိုက်သည် “အ အ အ အ အ “ “အင်းးး အားးး ရှီးးးး အားးးး “ လျာလေးထုတ်ကာ ပါးစပ်လေး ဟ ပီး မင်းဇော် ဂွင်းထုနေတာ ကို ကြည့်နေလိုက်သည် “အ အားးအားး ထွက်တော့မယ် ဝါ အားးးး“ “အင်းးး အင်းးး အားးး“ “ဗျစ် ဗျစ် ဗျစ် ဗျစ် ဗျစ် “ “အားးး ရှီးးးး အားးးဟားးးးးးး“ မင်းဇော်လီးထိပ်မှ ဖြူပျစ်ပျစ်လရေတွေ ဝါဝါ့ ပါးစပ်အတွင်းသို့ တဖျောဖျော ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်သည် “အားးး ကောင်းတယ်ကွာ “ ပါးစပ်ထဲ ဝင်လာတဲ့ လရေတွေကို မျိုချလိုက်ပီး လီးထိပ်မှာ ကပ်ကျန်နေတဲ့ လရေတွေကိုပါ လီးတံကို ကိုင်ပီး စုပ်ယက်ပေးလိုက်သည် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “ကောင်းလား ဝါ ကြိုက်လား “ “အင်းး ကြိုက်တယ် “ “မရွံ့ဘူးလား “ “ရွံ့ပါဘူး ကိုယ့်ယောင်္ကျား လရေပဲ ဟုတ်ဘူးလား ယောင်္ကျားးး“ “ဒါပေါ့ ဝါဝါက ကိုကြီး အလိုးခံပီးပီ ဆိုတော့ ကိုယ့် မိန်းမပေါ့ ကိုကြီးက ဝါ့ယောင်္ကျားပေါ့နော့် ချစ်မိန်းမလေး “ “ဟုတ် ယောင်္ကျား“ “ရော့ ဒီမှာ ကျန်သေးတယ် စုပ်လိုက်ဦး “ ဆိုပီး မင်းဇော် လက်မှာ ပေကျံနေတဲ့ လရေတွေကိုပါ ယက်စေရန် လက်ချောင်းလေးတွေကို ဝါဝါ့ ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်ပေးလိုက်တော့ လက်က လရေတွေကို ပါ တပြွတ်ပြွတ် နဲ့ စုပ်ပီး မျိုချလိုက်တော့သည် ။ ဟော်တယ်မှာ တစ်နေ့လုံး သောင်းကျန်းကြပီး ညနေစောင်းမှ ပြန်ထွက်လာသည် ။
ဟော်တယ် ရှေ့ ရောက်တော့ ရုံးမှ မန်နေဂျာ လင်မယားနှင့် ဆုံဖြစ်အောင် ဆုံလိုက်သေးသည် “ဟာ ညီလေး ဘယ်လာတာတုန်း ဒါ ညီလေး အမျိုးသမီးလား “ “အော် … ဟို ဟို ဒီနားပါ ဒါက ကျွန်နော့် အမျိုးသမီး ညီမ ပါ သူ့ သူငယ်ချင်း ဆီ လာတွေ့ ချင်တယ် ဆိုတာ နဲ့ လိုက်ပို့တာပါ “ “အော် အော် အေးး ဒါ ကိုယ့် အမျိုးသမီးပါ ဒေါ် နန္ဒာဦး တဲ့ မှတ်ထား ဦး ညီလေး “ “ဟုတ် ကဲ့ ခင်ဗျ … “ ဒေါ်နန္ဒာဦးက ပြုံးပြလိုက်ပီး နှစ်ယောက်သားထွက်သွားကြသည် ။ ခယ်မနဲ့ခဲအို နှစ်ယောက်ထဲ ဟိုတယ်လ် က ထွက်လာတာ သူငယ်ချင်းလာတွေ့တာတဲ့လား လို့ တောင် တွေးလိုက်သေးတယ် ။ မင်းဇော်က ဂျာကြီး နဲ့ သူ့မိန်း မ ကျောပြင်ကို ကြည့်နေမိတယ် ။ ဟွန်းးး ဒီအမျိုးသမီး တော်တော် တောင့်တာပဲ အသက်က လေးဆယ်ကျော်လောက်ပဲ ရှိဦးမယ် ။ ဒီလို ဆော်ကြီး မျိုး မဖြုတ်ဖူးသေးဘူး ကြည့်ပါဦး ဖင်အိုးကြီးတွေက အယ် ထွက်နေတာပဲ ဒီလို ဆော်မျိုး ဖင်ကုန်းခိုင်းပီး လိုးခွဲလိုက်ရလို့ကတော့ ဟွန်းးးးးးးးး “ကိုကြီး … သွားမယ်လေ … အခုပဲ ညီမလေး နဲ့ နေလာတယ် သူများမိန်းမ ကို သွားငမ်းနေတာများ မျက်လုံးတွေပါ ပေါက်ထွက်ကုန်ဦးမယ် ဟွန်းးးး “ဟင်… မဟုတ်ပါဘူး ဝါ ရယ် ကဲလာ သွားကြမယ်လေ ……. “နှစ်ယောက်သား ကားပေါ်တက်ကာ ထွက်လာလိုက်ကြလေသည် ။ ဝါဝါ တစ်ယောက် မင်းဇော် လက်ခုပ်ထဲက ရေ ဖြစ်သွားလေပြီ ။ ကြိုက်တဲ့ အချိန် ကြိုက်သလို ခေါ်ဖြုတ်လို့ရပီလေ ။ ခယ်မလေး ရဲ့ ဖင်ဟာ ခဲအိုလီး အတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပီလေ ။
ခယ်မရဲ့ ပေါင်တစ်ခြမ်း ခဲအိုပိုင်တယ်တဲ့ ။ ဟွန်းးဟွန်းးး အခုတော့ ပေါင်တစ်ခြမ်းတင်မက တကိုယ်လုံး ပိုင်နေပီလေ ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ခယ်မလေး ဝါဝါ တစ်ယောက် ခြံထဲက ဘဲမလေး တစ်ကောင်လို ခဲအိုရဲ့ အသုံးချတော်ခံ အဖြစ် ရှိနေခဲ့သည် ။ ဝေမာလှိုင် လစ်သည့် အချိန် အိမ်မှာ တစ်မျိုး အချိန်ရလျှင်ရသလို အပြင်မှာ တစ်မျိုး ခေါ်အလိုးခံဖြစ်နေသည် ။ ဝေမာလှိုင်ကို လိုးလိုက် ခယ်မလေး ဝါဝါ ကို လိုးလိုက်နဲ့ ကာမအရသာ အပြည့်အ၀ ရနေပေမယ့် လိင်ကိစ္စ ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ မင်းဇော် တစ်ယောက်ကတော့ အပြင်မှာ လဲ လစ်ရင် လစ်သလို ကဲနေမိသေးသည် ။ သောက်လေ သောက်လေ ငတ်မပြေ ဆားငန်ရေ လိုပါပဲ ။ ဒီအပေါက်ထဲ ဒီအချောင်း ထိုးထည့်တာ မှန်ပေမယ့်လည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူညီတဲ့ က္ကတ္ထိယတွေရဲ့ အထိအတွေ့ ကို ရှာမြဲရှာဆဲ ။ဒီလို နဲ့ပဲ ….. ဒီတစ်ခါ အထိအတွေ့ အတွေ့အကြုံက မင်းဇော်အတွက် ထူးခြားသည်လို့ ဆိုနိုင်သည် ။ မင်းဇော်အတွက် စိုးထိတ်မှု ရင်ခုန်မှု အံ့သြမှု တွေ ဖြစ်နေမိသလို တကယ့်ကိုပဲ ခံစားမှု အသစ် ဖြစ်နေသည် ။ ကုတင်ပေါ်မှာ ခြေထောက်တွဲလောင်း ချထိုင်ထားရင်း အောက်မှ လီးစုပ်ပေးနေသူရဲ့ ဆံနွယ်လေးတွေကို ပွတ်သပ်ပေးလိုက်သည် ။ အသားဖြူဖြူ ခန္ဓာကိုယ် မဝတ၀ ။ ဆံနွယ်တွေက ခါးလယ်ကျော်ကျော်လောက်ရှည်သည် ။
မင်းဇော် ရဲ့ လီးတံကို သေချာကိုင်ကာ အရင်းမှအဖျားထိ လျာနဲ့ပွတ်သပ် ယက်ပေးလိုက် အောက်မှ ဥလေးတွေကို လျာထိပ်လေးနဲ့ထိုးလိုက် ဥ အလုံးလေးတွေကို ငုံစုပ်လိုက် လီးဒစ်ကို ပြန်ငုံစုပ်လိုက်ဖြင့် ကျွမ်းကျင်စွာ စုပ်ပေးယက်ပေးနေသူကို သေသေချာချာ ကြည့်နေမိသည် ။ မင်းဇော် ပေါင်တွင်းသားတွေကို ပါ လျာအပြားလိုက် လျှက်နေသေးသည် ။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးးးးးးးးး ကောင်းလိုက်တာ “ မင်းဇော် အသံတိုးတိုးလေး ညည်းမိလိုက်သည် မင်းဇော်ကို ခေါင်းမော့ကြည့်လိုက်ရင်း “တကယ်ပဲ ကောင်းတာလား “ မင်းဇော် ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်တော့ နုတ်ခမ်းလေး မှ အပြုံးတစ်ချက်သန်းသွားရင်း လီးတံ ကို ဆက်စုပ်ပြန်သည် ။ သူမရဲ့ ဆံနွယ်တွေကို မင်းဇော် စုပီး ကိုင်ပေးလိုက်သည် ။ ပါးလေးတွေ ချိုင့် ဝင် သွားအောင် စုပ်ပေးနေသည် ကို တွေ့လိုက်ရသည် ။ မင်းဇော် လိုးခဲ့ဖူးသမျှ မိန်းကလေး များသည် အများစု အားဖြင့် အသက် သုံးဆယ်အောက်တွေချည်းဖြစ်သည် ။ ယခု မင်းဇော်ရှေ့မှာ ထိုင်ကာ လီးစုပ်ပေးနေသူမှာတော့ အသက် လေးဆယ်ကျော် လေးဆယ့်ငါး အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ။ အသက်လေးဆယ့်ငါးလောက်ရှိနေပေမယ့် အလှအပတွေကျန်တုန်း တဏှာခိုးတွေထန်တုန်းဆိုတာ ကို မင်းဇော်သိလိုက်ရတဲ့အပြင် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် မိန်းကလေးတွေ ထက်ကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်ဆိုတာ သိလိုက်သည် ။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ လီးဒစ်နဲ့ လရေပြားကြား နေရာလေးကို လျာနဲ့ရစ်သပ်ပီး ဆော့ကစားလိုက်တာများ မင်းဇော် အသည်းခိုက်မိသည် ။
“ပလက် ပလက် ပြွတ် “ “အားးး ကောင်းတယ်ဗျာ အားးး“ လီးစုပ်ပေးရင်းမှ အမျိုးသမီးက လီးတံကို ချွတ်ကာ ထရပ်လိုက်သည် ။ ထို့နောက် အပေါ်အကျီရင်ဖုံးမှ နှိပ်စိလေးများ ကို တဗြုတ်ဗြုတ် ဆွဲ ဖြုတ်ပစ်လိုက်သည် ။ စွံ့ငွားစွာ ပေါ်လာသည့် ရင်သားတွေကို အသားရောင် ဘော်လီဖြင့် မနိုင့်တနိုင် ထိန်းပေးထားသည် ။ဘော်လီပေါ်မှ နို့အုံကို သူမ ဘာသာ ပွတ်ပြညှစ်ပြလိုက်ရင်း မင်းဇော် ဘက်ကို ကျောပေးကာ တဘက်သို့လှည့်လိုက်ရင်း ဘော်လီးချိတ်လေးများကို လက်နောက်ပြန် ဖြုတ်ကာ ချွတ်ချလိုက်သည် ။ သူမရင်သားတွေ ဘယ်လို ရှိမယ်ဆိုတာကို သိချင်လွန်းလှသည် ။ တဘက်သို့ လှည့်ထားသဖြင့် ကျောပြင်ကိုသာမြင်နေရသည် ။ ခါးက နဲနဲ တုတ်နေတယ် ဆိုပေမယ့်လည်း အောက်မှ စွံ့ထွားလှသော တင်ပါးကြီးတွေကြောင့် ခါးတုတ်သည် မထင်ရသလို ဖြစ်နေသည် ။ နောက်သို့ ဖြန့်ကျနေသော ဆံနွယ်တွေကို စုစည်းကာ ရှေ့သို့ ပို့လိုက်သည် ။ ထိုနောက် အမျိုးသမီးက သူမရဲ့ အနက်ရောင်ထမိန်စကပ် ရှိ ခါးဘေးမှ ချိတ်လေးကို ကျွမ်းကျင်စွာ ဖြုတ်လိုက်ပြန်သည် ။ “ဇွိ…………..“ ချိတ်အောက်မှ ဇစ်လေးအား ဖြေးညှင်းစွာ ဆွဲချလိုက်သည့် အသံက တိတ်ဆိတ်နေသည့် အခန်းအတွင်း သိသာစွာကြားလိုက်ရသည် ။ ထမိန်စကပ် အနားသားလေးတွေကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ကိုင်ကာ ရှေ့သို့ခါးလေးညှတ်ချလိုက်ရင်း ချွတ်ချလိုက်လေသည် ။
အို … ကြီးမားလိုက်တဲ့ တင်ပါးကြီးတွေကို အသားရောင် ပင်တီကြီးက ထိန်းသိမ်းထားသည် ။ ဖြူဖွေးလုံးခဲနေသော ပေါင်တံ နှစ်ဖက်ကလည်း တင်ပါးကြီးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်ညီစွာ လှပနေသည် ။နောက်သို့ ဖင်လေး ကုန်းပေးထားသလို ဖြစ်သွားတာကြောင့် တင်ပါးကြီးတွေက လုံးတင်းပီး ကားထွက်လာသလိုပင် ။ ထမိန်စကပ်လေး ချွတ်ချလိုက်ပီးနောက် အမျိုးသမီးက မင်းဇော်ဘက်သို့ ဖြေးဖြေးချင်း ပြန်လှည့်လာသည် ။ လက်တစ်ဘက်က နို့အုံကို လက်ဖျံဖြင့် မလုံတစ်လုံ ဖုံးအုပ်ထားပီး နောက်တစ်ဘက်က အဖုတ်နေရာလေးမှာ လက်ဝါးလေး အုပ်ထားကာ မင်းဇော် ကို ပြုံးပြလိုက်သည် ။ အသားရောင် ပင်တီရဲ့ အလယ်တည့်တည့် အဖုတ်နေရာလေးနားမှာ အနက်ရောင်နှင်းဆီပွင့်ချည်ထိုးလေးထိုးထားသည်က လည်း တမျိုး ရင်ခုန်စရာ ။ မင်းဇော် ထိုင်နေရာမှ အမျိုးသမီး ဆီ ထသွားကာ ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်ရင်း နုတ်ခမ်းတွေကို အငမ်းမရ စုပ်ပေးလိုက်သည် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “ဟင်းး ဟင်းးဟင်းးးး“ အမျိုးသမီးထံမှ ရမ္မက်ရှိုက်သံကို အတိုင်းသားကြားနေရသည် ။ အမျိုးသမီးက သူမရဲ့ လက်တွေကို မင်းဇော် နောက်ကျောအား သိုင်းဖက်လိုက်သည်မို့ သူမရဲ့ နို့အုံနှင့် မင်းဇော်ရင်ဘက်က ဂဟေဆက်သွားသလို မင်းဇော်ရဲ့ ထောင်မတ်နေတဲ့လီးကလည်း နှင်းဆီနက်လေးအား နုတ်ခွန်းဆက်သနေသည် ။
“ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “ဟင်းးးး အင်းးး ပြွတ် ပြွတ် “ နုတ်ခမ်းချင်း ပြန်ခွလိုက်ပီး အမျိုးသမီးအား ကုတင်ပေါ်သို့ ပက်လက်လှန် အနေအထား ပစ်ချလိုက်သည် ။ “အို………..“ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ ပက်လက်လှန် အနေအထား အမျိုးသမီးပေါ်ကို ခပ်မြန်မြန်တက်ခွလိုက်ကာ လုံးဝန်းကြီးမားတဲ့ နို့ အုံကြီးတွေကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် စို့ပေးလိုက်သည် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးးး မောင်ရယ် …..“ နို့အုံကြီးတွေကို လက်ဖြင့် အားသန်သန် ညှစ်ပေးလိုက်မိသည် “အားးးး ကျွတ် ကျွတ် အားးးး “ နို့သီးခေါင်းတွေကို လက်ညိူးလက်မနှစ်ဘက်ပူးကာ ချေပေးလိုက်သည် “အားးး ကျွတ် ကျွတ် အားးး မောင်ရယ် အားးး “ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးး ရှီးးးး အင်းးး အားးး ဟုတ်တယ် အားးး အမလေးးးး“ ထို့နောက် အောက်ဘက်သို့ ဖြေးဖြေးချင်း လျောဆင်းလာကာ ဘိုက်သားလေးတွေကို နမ်းရင်း နှင်းဆီနက်လေး ရှိရာနေရာသို့ ရောက်လာတော့ အမျိုးသမီးက ပေါင်းလေး ခပ်ဟဟ ကားပေးလာသည် ။ အမျိုးသမီး ရဲ့ နှင်းဆီဖူးလေး ရှိမယ့် နေရာကို ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ နှင်းဆီနက်နေရာလေးကို နမ်းလိုက်သည် ။ စိမ်းရွှင်ရွှင် အနံတစ်ခုက နှာခေါင်းထဲ တိုးဝင်လာသည် “အားးး “ ခါးတစ်ဘက်တစ်ချက်ရှိ ပင်တီ မျှော့ကြိုးလေးအား လက်နှစ်ဘက်ဖြင့် ဆွဲယူလိပ်ချလိုက်ပီး အောက်သို့ ဆွဲချွတ်ရန်ကြိုးစားလိုက်သည် ။ အမျိုးသမီး က တင်ပါးကြီး ကို ကြွပေးလိုက်မှ ပင်တီလေး ကျွတ်သွားလေသည် ။ စောက်ဖုတ်အထက် ဆီးခုံနေရာမှ ကွေးကောက်ကောက် မဲမဲသဲသဲ စောက်မွှေးအုံကြီးမှာ ထူလွန်းလှပီး စောက်ဖုတ်ကို ဖုတ်ကွယ်ထားသည် ။ အမွှေးဆံလေးတွေမှာ စိုရွဲရွဲ အရည်တစ်ချို့က ကပ်လို့နေသေးသည် ။
အမွှေးအုံထူထူထဲထဲ အဖုတ်လိုက်ကြီး ဖြစ်နေသည်မို့ “စောက်ဖုတ် “ အောက်မှ ပက်ကြားအက် အကွဲကြောင်းလေး ရှိသည်မို့ “ စောက်ပတ် “ လို့ ခေါ်သည် လို့ တွေးမိလိုက်သေးသည် ။ တော်တော် ထူထဲ တဲ့ စောက်ဖုတ်အုံကြီး ။ မင်းဇော် လက်ဖဝါးဖြင့် အမွှေးအုံနေရာကို ပွတ်ဆွဲလိုက်ရင်း စောက်ပတ်နေရာလေး ကို စမ်းကြည့်လိုက်တော့ အရည်တွေ တော်တော် ထွက်နေသည် ။ လက်ညိုးလေး ဖြင့် စောက်ပတ်လေး အား ပွတ်ဆွဲလိုက်ရင်း အတွင်းထဲသို့ ထိုးထည့်လိုက်ပီး “အရည်တွေ တော်တော် လာနေပီပဲ “ “အင်းးးးး “ အပြုံးလေး ဖြင့် ခေါင်းငြိမ့်ပြသည် ။ အမျိုးသမီး က ဒူးနှစ်ဘက်ကို ထောင်ကာ နဲနဲ ကားပေးလိုက်ပီး “မှုတ်ပေးးးး လေ “ “နေဦး မမှုတ်ခင် သေချာ ဖြဲကြည့်ဦးမယ် “ ဟု ဆိုကာ မင်းဇော်က သူမ စောက်ပတ်ကို ဖြဲကြည့်လိုက်သည်။ အတွင်းသား နီနီရဲရဲမှာ အရည်ကြည်တွေ အိုင်ထွန်းနေသည် ။ စောက်ပတ်ဘေးသားတွေကတော့ နဲနဲ ညိုတိုတိုရှိသည် ။ စောက်ပတ်နုတ်ခမ်းသား ပွင့်ချပ်လေး နှစ်ချပ်မှာ ဘေးသို့ အာတာတာလေး ပွင့်လန်းနေသည် ။ “မမြင်ဖူးတာ ကျနေတာပဲ ဟင်းဟင်းးးး“ “မြင်ဖူးသမျှထဲ အလန်းဆုံးပဲ ပွင့်ဖတ် အာအာကြီးတွေနဲ့ အတွင်းသားနီနီရဲရဲ အမွှေးထူထူကြီး အရမ်း ခိုက်တယ်ဗျာ “ “ဟင်းးဟင်းးးဟင်းဟင်းးးးး “ အမျိုးသမီးက သဘောကျစွာ ရယ်နေလေသည် ။
အတွင်းသားထဲ ရောက်နေသော လက်ညိုးကို ပြန်ထုတ်လိုက်ပီး လက်ညိုးနဲ့လက်ခလယ် နှစ်ချောင်းပူးကာ ပြန်သွင်းလိုက်သည် “အားးးး ရှီးးးးးး “ အတွင်းသားတွေက ချောမွတ်နေသည် ။ လက်ထိုးထဲထားရင်းပင် စောက်စိကို ကုန်းစုပ်ပေးလိုက်သည် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးးးရှီးးးးး အင်းးးး“ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးး အမလေးးး ကောင်တယ်ကွယ် အားးးး “ အမျိုးသမီး မှ ပေါင်ကို အစွမ်းကုန် ကားပေးလာသည် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးး ရှီးးးးး အိုးးးး ဟင်းးးး“ ပေါင်ကြားထဲမှ မင်းဇော်ရဲ့ ခေါင်းကိုလှမ်းကိုင်ကာ ဆံပင်တွေကို ဆွဲကုတ်ထားရင်း စောက်ပတ်ကြီး ကို ကော့ကော့ထိုးပေးနေမိသည် ။
စောက်ပတ်ထဲမှ အရည်တွေက ဖင်ကြားထဲ ထိ စီးကျလာသည် “ပြွတ် ပြွတ် ပလက် ပြွတ် “ “ဇွပ် ဇွပ် ဇွပ် ဇွပ် “ လက်ညိုးလက်ခလယ် နှစ်ချောင်းပူးကလည်း စောက်ခေါင်းထဲ ထိုးမွှေနေသည် “အားးး အမလေးးး အိုးးးး “ အမျိုးသမီးရဲ့ ညီးတွားသံက သူမရဲ့ ရမ္မက်တွေကို ဖော်ညွှန်းနေသည် ။ မင်းဇော်က အမျိုးသမီးရဲ့ ခါးအောက်ကို ခေါင်းအုံး တစ်လုံး ထိုးခံပေးလိုက်သည်မို့ တင်ပါးက ကြွတက်လာသည် “ပြွတ်ြ ပွတ် ပလက် ပလက် ဇွပ် ဇွပ် “ “အားးး ရှီးးးး ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ် အားးး“ မင်းဇော် ခေါင်း ပြန်ကြွလိုက်ပီး အဖုတ်ထဲသို့ လက်ဖြင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်း အထုတ်အသွင်း လုပ်ပေးလိုက်သည် “ဇွပ် ဇွပ် ဇွပ် ဇွိ ဇွိ … “ “အားးး ရှီးးးး ဟူးးးး “ ထိုးထည့်ထားသော လက်ချောင်းနှစ်ချောင်း ကို အထဲမှာ လက်ဆစ်လေးတွေ ကွေးပေးပီး ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပွတ်ဆွဲလိုက်ပြန်သည် “အားးးး အို … ရှီးးးးးးးးးး“ ထို့နောက် လက်ချောင်းတွေကို ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ အရည်တွေက လက်ချောင်းတွေမှာ အမျှင်အတန်းလိုက်ပါလာသည် ။ မျက်လုံးလေး မှေးစင်းကာ အမှုတ်ခံနေရင်းမှ မင်းဇော်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်သည် ။ မင်းဇော်က လက်ချောင်းမှာ ပါလာသော အရည်တွေကို ပြလိုက်ရင်း အမျိုးသမီး ရဲ့ နုတ်ခမ်းပေါ်သို ထိုလက်ချောင်းလေးများဖြင့် ပွတ်ပေးလိုက်သည် ။
အမျိုးသမီးကလည်း ပါးစပ်ဟကာ မင်းဇော်ရဲ့ လက်ချောင်းမှ အရည်တွေကို လှမ်းစုပ်ယူလိုက်သည် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “ထ… ဖင်ကုန်းလိုက်နော် “ “အင်းးးး “ အမျိုးသမီးက ထထိုင်းလိုက်ရင်း မင်းဇော်ဘက်သို့ ဖင်ပေးကာ လေးဘက်ကုန်းလိုက်သည် တင်းမာပီးကားထွက်နေသော ဖင်လုံးကြီးတွေကို မင်းဇော် လက်နှစ်ဘက်ဖြင့် ဖျစ်ညှစ်လိုက်သည် “အားးးး “ “ဖင်ကြီးက ဖွေးပီး တင်းကားနေတာပဲဗျာ ….“ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ….. “ “ဖြောင်းးးး“ “အ … “ အားမလို အားမရဖြင့် တင်ပါးကြီးတွေကို လျာနဲ့ ယက်နမ်းကာ လက်နှစ်ဘက်လက်ဖဝါးဖြင့် တင်ပါးနှစ်ခြမ်းလုံး ကို ပြိုင်တူ ရိုက်ချလိုက်သည် “ဖြောင်းးး “ “အားးးး မောင် အားးး“ တင်ပါးကြီးက ကြွတက်လာသလို ခါးလေးပါ ခွက်သွားသည် ။
တင်ပါးနှစ်ခြမ်းကို ဆွဲဖြဲလိုက်တော့ အလယ်မှာ ညိုတိုတို ခရေပွင့်လေး ။ မင်းဇော် ကုန်းယက်လိုက်သည် “အို …….. “ စအိုကို အယက်ခံလိုက်ရသဖြင့် အမျိုးသမီး အသည်းထဲ အေးခနဲ ခံစားလိုက်ရသည် “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အားးးးး အမလေးးးး ဟူးးးးဟင်းးးဟီးးးးးးး “ စအိုဘေးဖင်သားလေးတွေကို ဖြဲလိုက်ပီး အတွင်းသို့ လျာဖျားလေးကို တောင့်ကာ ထိုးသွင်းလိုက်သည် “အားးး “ “မနေတတ်တော့ဘူးကွာ တက်လိုးတော့ အားးးး “ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အင့် အင့် အင့် အားးး“ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ အမျိုးသမီးက လေးဘက်ထောက်ထားတဲ့ လက်တစ်ဘက်ကို ဖြုတ်လိုက်ပီး အောက်မှ သူမ အဖုတ်သို့ လှမ်းကိုင်ကာ အစိကို ကိုယ့်ဘာသာ ပွတ်ချေနေမိသည် “အားးး အားးး အားးးး“ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ အမျိုးသမီး အနေဖြင့် အလိုးခံရန် အသင့် ဖြစ်နေပီ တော်တော်လည်း ဆာလောင်ပွတ်သိပ်လာသည် “လိုးတော့ကွာ မနေတတ်တော့ဘူး “ မင်းဇော်လည်း အမျိုးသမီး ရဲ့ နောက်မှာ ဒူးထောက်ကာ ကျကျ နန နေရာ ယူလိုက်ပီး လီးဒစ်ကို စောက်ပတ်ဝမှာ တေ့လိုက်ပီး ဆောင့်ထိုးသွင်းလိုက်သည် “ဘွတ် …“ “အားးးးးး အီးးး“ သူမ စောက်ရည်တွေ နဲ့ ချောမွတ်နေတာမို့ လီးက အဆုံးထိ တခါတည်း ဝင်သွားသည် ။
မင်းဇော်လည်း သူမ တင်ပါးစပ်ခါးနေရာ ကို ကိုင်ကာ နောက်မှ ဆောင့်လိုးပေးလိုက်သည် “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွံတ် “ “အမလေးးး ထိလိုက်တာ အားးး ကောင်းတယ် မောင် အားးး “ “ဖုန်းးး ဖုန်း ဖုတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် “ “အင့် အင့် အင့် အင့် “ “အားးးး အားးး အမလေးးးး ဆောင့် အားးး ဆောင့် ပေး “ “အင့် အင့် ဘွတ် ဘွတ် “ “အားးး ထိတယ် အားးး ကောင်း ကောင်း အားးးး“ လီးမှာ အဆုံးထိ ချောချောမွတ်မွတ် ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေသလို ဥတွေကလည်း အမျိုးသမီးရဲ့ဆီးခုံနားသို့ မထိတထိ သွားသွား ရိုက်ပေးနေသလို ဖြစ်နေသည် “အင့် အင့် အင့် “ “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် “ မင်းဇော်က ခါးကိုင်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ ညာလက်ကို တင်ပါးနှစ်ခြမ်းကြားတင်လိုက်ပီး လက်မကို စအိုပေါက်ထဲသို့ ထိုးထည့်လိုက်သည် ။ “အားးး အမလေးးးး“ “အင့် အင့် အင့် “ “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ လက်မ က စအိုပေါက်ကို တဆုံးထိုးထည့်ထားပီး အတွင်းမှာ လက်မ ကို ကွေးလိုက်ဆန့်လိုက်မွှေထိုးပေးရင်း အောက်မှာ စောက်ပတ်ကို လီးက အချက်မပြတ် ဆက်တိုက်လိုးပေးနေသည် “အမလေးးးကွယ် အားးး ကောင်းတယ်အားးးမညှာနဲ့ ဆောင့်လိုး အားးးး “ အတွင်းမှာ လီးတံကို စောက်ပတ်နုတ်ခမ်းအတွင်းသားတွေ က ဆွဲဆွဲ စုပ်ယူနေသလို ခံစားရသည် ။ မျော့ဆိုတာဒါလား ။
မင်းဇော်လီးကို ညှစ်ညှစ်ပေးနေသလိုပင် ။ ပိုပီး လိုးလို့ ကောင်းလာသည် “အင့် အင့် အင့် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ “ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် “ “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် “ “အားးးး ကောင်းတယ် အားးး ဆောင့် ဆောင့် ဆောင့်ကွာ အင်းးး အားးး“ အရည်တွေကလည်း တအား စိုရွဲနေသည် ။ သူမ ဖင်ကြီးတွေကလည်း မင်းဇော်ထံ နောက်ပြန်ဆောင့်ပေးနေပြန်သည် ။ မင်းဇော်က သူ့ လီး ကို ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ ဆောက်ရည်တွေ တော်တော် စိုရွဲနေတာ တွေ့လိုက်ရသည် ။ အမျိုးသမီးရဲ့ ဖင်နှစ်ခြမ်းကို ဖြဲလိုက်ပီး စအိုပေါက်နေရာ ကို လီးနဲ့ အချောင်းလိုက် ရိုက်လိုက်သည် “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ ထို့နောက် စအိုပေါက်ပေါ်သို့ လီးကို အလျားလိုက်တင်ပီး ဖိကပ်ကာ ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်သည် “အားးးး ရှီးးးးး “ ထို့နောက် စအိုခရေလေးအား လီးဒစ်ဖြင့် ဝလုံးဝိုင်းသဖွယ် ဝိုက်ကာ ဝိုက်ကာ ဖြင့် ပွတ်ပေးလိုက်ပြန်သည် “အားးး “ ထို့နောက် ဖင်ပေါက်ပေါ် လီးဒစ်ကို ကျကျ နန သေချာချိန်လိုက်ပီး လီးဒစ်ကို လက်ဖြင့်ဖိလိုက်ကာ စအိုပေါက်ထဲသို့ ဖိသွင်းလိုက်သည် “အ အ မောင်အအ ဖင် အားးးး အားးးလားးးလားးး ဖင် “ “ဗျစ် ဗျစ် ဗျစ် “ လီးဒစ်က စအိုပေါက်ထဲ ဝင်သွားလေသည် ။
မင်းဇော် ခါးကို ခပ်မတ်မတ်လုပ်ကာ လူကို ကြွလိုက်သည် “ကြိုက်လား ဒီထဲထည့်တာ “ “အင်းးး ဖြေးဖြေး မောင် အားးး နာတယ် ဖြေးဖြေး “ “အင့် အားး “ “ဗျစ် ဗျစ် “ “အဆုံးထိ ဝင်တော့မယ် တစ်ဝက်ရောက်ပီ ဖင်လျော့ထား “ “အင်းးး အားး အီးးးး ဖြေးဖြေး အားးး“ မင်းဇော်ရဲ့ လိင်တံက အမျိုးသမီး ဖင်ပေါက်အတွင်းသို့ တအိအိဖြင့် အဆုံးထိ ရောက်သွားသည် “အားးး အဆုံးထိ ဝင်နေပီ ပြန်ထုတ်ကြည့်မယ်နော် “ ဖြေးဖြေး ချင်း ပြန်ထုတ်လိုက်တော့ ဖင်နုတ်ခမ်းသားလေးတွေက လီးနဲ့ အတူ ခပ်စူစူလေး ကပ်ပါလာလေသည် “ဘု ဘု ဘု….“ အထဲမှ လေတွေပါ အံကျလာသည် ။ လေထိုးတံဖြင့် လေတွေ စုပ်ထုတ်လိုက်သည့်နှယ် “ဘု ဘု ဘု…..“ “အားးးးး“ “အင့် အင့် အင့် “ ဖြေးဖြေးချင်း ပြန်ထိုးသွင်းလိုက်ပြန်သည် ။
“ဘု ဘု ဘွတ် ဘွတ် “ “အားးး “ ဖြေးဖြေးချင်း အထုတ်အသွင်း လုပ်လိုက်သဖြင့် စအိုပေါက်က ချောမွေ့လာသည် “နဲနဲ ဆောင့်ကြည့်မယ်နော် ဖြစ်လာ “ “အင်းးး လုပ် “ “ဘွတ် ဘွတ် ဘု ဘု “ “ဗျစ် ဗျစ် “ “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် “ “အားးးး “ “ဖင်မချရတာ ကြာပီ အခုမှပဲ ချရတော့တယ်ကောင်းလိုက်တာ ကြပ်ထုတ်နေတာပဲ “ “အင်းးး မောင် လိုးးး အားးး “ “အင့် အင့် အင့် အင့် “ “ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဘု ဘု ဘု ဘု “ “အားးးး ကောင်းတယ် အားးးး “ “အားးး ရလာပီ မောင် လိုးးး အားးး သွင်းပါ အမလေးးး “ မင်းဇော်လည်း အမျိုးသမီး ရဲ့ ခါးပေါ် လက်နှစ်ဘက်တင်လိုက်ကာ ဒူးကွေး လူကို ထ လိုက်ရင်း အပေါ်မှ မောင်းထောင်းသလို ဆောင့်လိုးတော့သည် ။ အောက်မှ မင်းဇော် ရဲ့ လက်ထောက်ထားတာကို တောင့်ပေးထားသည့် အပြင် ဖင်ကို ပါ ကော့ပေးထားလေသည် “ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် “ “အင်း အင်းး အားးး ကောင်းနေပီ “ “အားးး ရှီးးးး “ “အင့် အင့် အင့် ရော့ “ “အားးး အမလေးးး “ နှစ်ယောက်စလုံး ရဲ့ ရမ္မက်မီးတွေက အဆုံးစွန်ထိ တောက်လောင်နေကြပီ “အင့် အင့် အင့် ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် “ “ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဖတ် “ “အားးး လိုးပါ မောင် အားးး အမလေးးးး “ အချက်လေးငါးဆယ် ဆောင့်လိုက်တာမို့ မင်းဇော်ရော အမျိုးသမီး ပါ မောဟိုက်သံတွေ ထွက်လာသလို ချွေးတွေလည်း ရွဲနစ်လာသည် ။ မင်းဇော် စိတ်တွေ လည်း တအား ထန်လို့ နေသည် ။
မင်းဇော် သူမ ပေါ် မှ ဆင်းလိုက်သည် ။ “ကြိုက်လား ဖင်ခံလို့ ကောင်းလား “ “ကောင်းတယ် အားးး တအားကောင်းတယ် “ “ရော့ ဒီမှာ ဖင်လိုးထားလို့ ပေနေတဲ့ လီး စုပ်ပေး “ “အင်း အင်း ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ အမျိုးသမီးက ထထိုင်ကာ လီးကို အငမ်းမရ စုပ်သည် ။ လီးတံ ပေါ်သို့ တံတွေးထွေးချပေးလိုက်ပြန်သည် “ပျစ် …..“ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “ထပ်လိုးဦးမယ် ကုန်းထား “ “အင်းး“ အမျိုးသမီး က ထပ်ကုန်းပေးပြန်သည် ။ မင်းဇော်က ခုနက ချွတ်ထားသော အမျိုးသမီး ရဲ့ ပင်တီ အသားရောင်လေး ကို လှမ်းယူလိုက်ပီး နှာခေါင်းနဲ့ ရှုလိုက်သေးသည် ထို့နောက် “ရော့ ပါးစပ်ဟ ကိုက်ထား “ ပင်တီလေး ရဲ့ အနက်ရောင်နှင်းဆီ နေရာလေး ကို ရွေးကာ အမျိုးသမီး ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်ပေးလိုက်တော့ အမျိုးသမီးကလည်း ကိုက်ထားရင်း ဖင်ကုန်းထားလိုက်လေသည် မင်းဇော်က နောက်မှ သူမ ကိုယ်ကို ဆွဲယူလိုက်ပီး ကုတင်ဇောင်းတွင် ကုန်းခိုင်းလိုက်ပီး နောက်မှ မတ်တပ်ရပ်နေရာယူကာ ဖင်ပေါက်မှာ လီး တေ့ပီး ထိုးသွင်းလိုက်သည် ။ အမျိုးသမီးမှာ ကုတင်ဇောင်းတွင် လက်ထောက်ကာ တင်ပါးကြီး ကော့ပေးရင်း ပင်တီလေး ကို ပါးစပ်နဲ့ ကိုက်ကာ အလိုးခံနေရသည် ။ “ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် “ “ဘု ဘု ဘု ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် “ “အားးး ကောင်းတယ် အင့်အင့်အင့် “ “အင့် အင့် အင့် ငါလိုးမ ဖင် အင့်ကွာ အင့် “ “ဖျန်းးးး ဖျန်းးး “ “ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် “ ရှေ့သို့ ဝဲကျနေသော ဆံပင်တွေ လှမ်းဆွဲကိုင်ထားရင်း ဆောင့်လိုးနေသည် ။
စည်းချက်ညီညီ တဘုန်းဘုန်း တဘွတ်ဘွတ် အလိုးခံရင်း နှစ်ယောက်သားရဲ့ ရမ္မက်မီးတောက်တွေ က အဆုံးစွန်ထိ တောက်လောင်နေချိန် ……. “ကျီ…… “ အခန်းတံခါး ပွင့်ဟ သွားသံနှင့် အတူ “အို…… ဟာ…….“ “ဟင်…“ ဝမ်းနည်းခြင်း စိတ်တိုခြင်း ဒေါသထွက်ခြင်း မီလျှံများတောက်လောင်နေသည့် မျက်ဝန်းတစ်စုံ “အားးးးးး “ ငယ်သံပါအောင် အော်လိုက်သော အသံတစ်ခု က ပတ်ဝန်းကျင်ကို လွှမ်းမိုးသွားတော့သည် …… “ဗိုလ်ကြီး ………“ အလေးပြုရင်း ဝင်လာတဲ့ ရဲဘော်ကို အလေး တစ်ချက် ပြန်ပြုလိုက်ကာ ရဲအုပ် အောင်ခိုင် မှ “အေးးး ပြော ဘာထူးလဲ “ “တရားခံ အမျိုးသမီး က ခွင့်တောင်းခိုင်းလို့ပါ … နာရေး ကို သူလိုက်ပို့ ချင်ပါတယ်တဲ့ “ “အော် ……… အင်းးးးးးးး “ ရဲအုပ်အောင်ခိုင် တစ်ချက် စဉ်းစားလိုက်သည် ။
“အေးကွာ အစောင့် သေချာ ထည့်ပီး ခွင့်ပေးလိုက်ပါ “ “ဒါနဲ့ဗိုလ်ကြီး တရားခံ အမှုက ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ ကျွန်နော်က မနေ့က မှ ခွင့်က ပြန်လာတာမို့ သေချာ မသိလိုက်လို့ပါ “ “အင်းး တရားခံ အမျိုးသမီး နေရာမှာ အခြားသူ ဆိုရင်လည်း အခု လို လူသတ်မှု ဖြစ်မှာ သေချာပါတယ် အခု တရားခံ အမျိုးသမီးက သူကိုယ်တိုင် ဖြောင့်ချက်ပေးပီး စခန်းမှာ လာဝန်ခံခဲ့တာ သေဆုံးသူ နဲ့ တရားခံအမျိုးသမီးက လင်မယားတွေ သူ့ အမျိုးသားက ပီးခဲ့တဲ့ လ က တရားခံရဲ့ ညီမ နဲ့ ဖောက်ပြန်ခဲ့တာ ကို တရားခံ အမျိုးသမီး ဆရာမဝေမာလှိုင်က သိခဲ့တယ် ။ အရှက်ကွဲမှာ စိုးတာကြောင့် သူ့ညီမ ကို လည်း တခြား ကို ပြောင်းခိုင်းလိုက်ပီး သူ့ အမျိုးသား သေဆုံးသူ မင်းဇော်ကို ဖြောင်းဖြခဲ့တယ် နောက်မလုပ်ဘို့ တားဆီးခဲ့တယ် နောက်ပိုင်း နဲနဲ ပြန်အဆင်ပြေလာကာမှ အခု လိုကိစ္စ ထပ်ဖြစ်တာပဲကွာ တရားခံ အမျိုးသမီး ဆိုတာကလဲ ငါ့သမီးရဲ့ ကျောင်းဆရာမကွာ ဟူးးးးးးးး“ “အော် … ဘယ်လို ထပ်ဖြစ်တာလဲ ဗိုလ်ကြီး ……..“
“အေးကွာ လူ့ အသိုင်းအဝိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြောလို မထွက်ချင်တဲ့ ကိစ္စပေါ့ “ “ဘယ်လို ဖြစ်ရတာလဲ “ “သေဆုံးသူက ခယ်မ နဲ့ ဖြစ်ပီး နောက်ထပ် အမှားကြီး တစ်ခု ထပ်ဖြစ်တယ် ပြောရမယ်ဆို ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ငြိသွားကြလဲ မသိပေမယ့် မဖြစ်သင့်တဲ့အရာတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ တရားခံရဲ့ အမေ ဒေါ်စိုးစိုးဦး သူ့ယောက္ခမ တော်သူ နဲ့ ဖောက်ပြန်ကြတယ်ကွာ ဆရာမ နေရာမှာ ငါသာ ဆိုရင်လည်း ဟူးးးးးးးးးး“ “ဟာ …. ခယ်မ နဲ့လည်း ဖြစ်တယ် ယောက္ခမ ကိုတောင် မရှောင်ဘူး ဒီကောင် သေသင့်တာပါပဲ “ “အေးးးကွာ …နေရာမှာတင် ပွဲချင်းပီး ကတ်ကြေးနဲ့ ၁၈ ချက် ထိုးသတ်ခဲ့တာ အေးးး ထားပါကွာ …. တရာခံ ကို သေချာ အစောင့်ပေးပီး နာရေး ပို့ပေးလိုက်ပါ ………“ “ဟုတ် ဗိုလ်ကြီး …. လေးစားပါတယ် “ “လေးစားပါတယ် “ မီးခိုးခေါင်းတိုင်မှ မီးခိုးလုံးများလွှင့်တတ်သွားတာကိုကြည့်ရင်း အစောင့် ရဲမေ နှစ်ယောက်ကြားမှ လက်ထိပ်လေး ခပ်ထားရင်းဝေမာလှိုင် တစ်ယောက် အံကို တင်းတင်းကြိတ်ထားလိုက်လေသည် ။
နွေရာသီရဲ့ လေပူ တစ်ချို့က ဝေမာလှိုင့် ဆံနွယ်တွေကို တိုးဝှေ့သွားသည် “မောင် …. ဝေ မောင့်ကို ချစ်ပါတယ် … မောင့် ဆန္ဒတွေကို လည်း အဆုံးစွန်ထိလိုက်လျောခဲ့ပါတယ် မောင့်ရဲ့ ပြင်ထန်လွန်းတဲ့ ရမ္မက်မီးတောက်တွေက အခု လွှင့်စင်သွားတဲ့ မီးခိုးတွေနဲ့ ပဲ ထိုက်တန်ပါတယ် မောင် … နောင်ဘ၀ များ လူ့ဘ၀ ကို ပြန်ရောက်ခဲ့ရင် ဖြူဖြူစင်စင် အချစ်တွေ ရမ္မက်မရှိတဲ့ အချစ်တွေ နဲ့ တွေ့ချင်ပါသေးတယ်မောင် …. မောင့်ကို ချစ်သလို စိတ်လည်း နာတယ် နာကြဉ်းတယ် မောင် …. သွားတော့မောင် … ဘယ်တော့ မှ ပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့ ရမ္မက်ရဲ့ လမ်းဆုံး ကို တစ်ယောက်တည်းသာ သွားတော့မောင် ……… ပြီးပါပြီ
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ရမကျဇုနျ